Linux hachisi chitendero | Kubva kuLinux
Pese patinopinda mukukakavadzana, nharaunda yeLinux yakakamurwa mune akawanda maficha, chimwe chazvo uye chisiri chidiki, iyo uzivi nyaya.
Pandakatanga kushandisa Linux, ndinorangarira kuti yangu Windows 7 yakashanda zvakakwana, ini ndakanga ndisina matambudziko akakodzera, kungoda kuziva kwakanditungamira kuyedza distro mushure me distro uye kugara nayo kwenguva yakareba.
Ini ndakatanga nguva yandakatsanangura mazwi aStallman, ndichive nechokwadi chekuti ichi ndicho chega chokwadi uye senguva dzose, patinotenda kuti tine 100% yezvokwadi, isu takanganisa, hatisi kukwanisa kuona nyika chaiye, yavo zvatinoda uye isu tinova rudzi rwevanonyanyisa mune zvechitendero avo, kune imwe nhanho, vane hanya zvakanyanya nerusununguko rwe software kupfuura rusununguko rwevanhu, zvinova zvinofadza asi ichokwadi.
Kana ini ndakadzidza chimwe chinhu mumakore achangopfuura, ndeyekuti chokwadi chinoenderana nedivi raunotarisa, uye kuti hapana mumwe wedu anaro mune hwaro hwese.
Kudzokera kune izvo zvinotinetsa, kwete munhu wese anoshandisa Linux nefilosofi, pamwe vazhinji vanozviitira nyore uye nyore nyore, pakati pavo, mukana wekugadzirisa yako system kune zvaunofarira, iko kugona kwekugona kushandisa akasiyana desktops, optimization yeiyo system , uye vamwe vazhinji nekuda kwekuda kuziva uye kuri nyore, ndosaka tichifanira kungwarira patinotaura zvirevo zvine mutsindo se:
"Hatifanire kukanganwa chinangwa cheGNU!"
Zvakakomba, zvakakomba zvikanganiso. Linux hachisi huzivi, zvirinani kwete zvekare, muenzaniso wakajeka ndiyo nhamba yemakambani zvakare ane zvivakwa zvekudyara uye anoshandisa Linux yezvavanoda, seOracle, AMD, Nvidia, Steam, Intel, IBM….
Kunyangwe bato rakakurumbira munharaunda yangu rinoshandisa Linux kunze kwekudikanwa, nekuti haifanire kumutsiridza makomputa mazhinji uye nekuda kwekuti inovhara zvese zvinoitwa, saka hatigone kutonga kuti ndiani anoita izvozvo.
Ini ndinoishandisa nekuti ndinoifarira, ndinofanira kubvuma kuti mune angangoita makore matatu, ndanga ndichigadzirisa zvinhu zvakawanda uye ndanga ndine matambudziko akasiyana siyana, ayo akapfuura zvakanyanya zvandaive nazvo muWindows, uye kunyangwe zvakadaro ndichiri kuishandisa (vatyairi nvidia, amd, Intel, kubonderana kwema de's, kufa kweX, zvirongwa zvisingamhanye).
Ini ndadzidza kuti rusununguko rwemunhu rwuri pamusoro perusununguko rwe software uye ini ndiri kuenda kuzvitsanangura. Nguva zhinji ini ndainzwa uyu mutsara, nezve proprietary software "proprietary software inokuita muranda, ungatendera vanhu kuti vave varanda here?"
Ndiri kuzodzikisira izvi. Kutanga, isu hatigone kuenzanisa rusununguko rwevanhu neyakareruka pc chirongwa, izvi hazvina kunaka uye zvine demagogic.
Chechipiri, zvinosuwisa mukuzvisarudzira kwevanhu, kune mukana zvakare wekutora rusununguko kubva kune vamwe vanhu, chimwe chinhu chakaitika zviuru zvakapetwa uye zvinosuwisa zvicharamba zvichiitika.
Chechitatu, software yekudyara haibvise rusununguko rwako, inokupa sarudzo, iyo muzviitiko zvakawanda iri yepamusoro, nekuti kune kambani iri kubhadhara vashandi venguva yakazara (vane mhuri yekudyisa) kugadzira software inosangana zvese zvinodiwa nevatengi.
Wese munhu ane rusununguko rwekumira kushandisa zvavanoshandisa nekushandura zvirongwa, hapana munhu anonongedzera kumazana kuti isu tishandise yakavharwa chirongwa.
Zvitendero zvinoita zvakafanana, zvinokuudza kuti iwe unofanirwa kuita izvo zvakanaka zvavanofunga kuti zvakanaka, uye zvinodzora rusununguko rwako rwekuita chimwe chinhu chakasiyana nechavaratidza, ngatirege kuwira mukunyanyisa kwechitendero.
Kana iwe ukashandisa Linux kunze kwedzidziso, yakakwana, kana iwe ukaishandisa kunze kwekudikanwa, yakakwana, kana iwe ukaishandisa nekuti iwe haugone kutenga Mac, yakakwana, ngatirege kudzora rusununguko rwevamwe.
Chinhu chakanaka nezveLinux ndizvo chaizvo izvi, kuti iwe unogona kuzvishandisa kubva kumurume asina pekugara, purezidhendi weUnited States, kana mudzvanyiriri weimwe nyika yeArabhu, Linux iri nezve rusununguko rwekuita nayo zvaunoda, pasina munhu anoti izvi zvakanaka kana izvi zvakaipa.
Nehurombo munyika chaiye, pfungwa yekuti software chigadzirwa ichiripo, uye kune mari yekushandisa iyi software, tinogona kuifarira kana kwete, asi uyu ndiwo muenzaniso watinogara mairi, uye kuenda kunopesana nawo, ndiyo nzira yekupokana neiyo yenyika modhi modhi.
Kana iwe uchida kuti modhi ichinje, iwe unofanirwa kupa muenzaniso, uko vanhu vamwe chete vanogona kuramba vachibhadharisa software uye vachiramba vachibhadhara vashandi vavo, uye vachiramba vachiita purofiti, izvo zvisingawanzo kuitwa.
Zvichida, sei mugadziri anogadzira chikumbiro chemimhanzi achizoita mari, achingopa technical service, sezvaanoita Red Hat? Pamwe vanhu havazobhadharira technical service, nekuti kuteerera 4 nziyo, uye kuve neakarongeka mimhanzi raibhurari, hazvidiwe. Uye kana munhu iyeye achida kuwana imwe mari, kunyangwe mubhadharo, achavhura sei kodhi yacho?
Pamwe, mumwe munhu aigona kuuya, kuzotora kodhi, kuivandudza uye chishandiso chavo chaizodarika chepakutanga, nekuita kushoma, nekudaro vachisiya musiki wekutanga pamakwikwi, zvichikonzera pakupedzisira kusarudza kusaenderera mberi nekusimudzira, izvo zvakaitika kakawanda, zvichipiwa kunetsekana kwekuita mari zvidiki zvirongwa. (Ona Nuvola Player paGoogle).
Kupedza, ndinoda Linux uye ndinoziva kukanganisa kwayo uye hunhu hwayo, ndinoda Windows uye ndinoziva kukanganisa kwayo uye humwe hunhu hwayo, ndinoda OS X uye ndinoziva kukanganisa kwayo uye hunhu, uye ini ndichashandisa imwe neimwe yadzo, kune izvo zvinodiwa panguva yacho.
Kana ndichida kushandisa Adobe Kugadzira Suite ndichaishandisa, kana ndichida kushandisa Microsoft Office, Ndichaishandisa, kana ndichida ini ndinoshandisa Gimp kana Inkscape, ndichaishandisa, nekuti chakanyanya kukosha rusununguko nekugadzirwa kwemushandisi.
Mapurojekiti akaita seGimp angangove akazara uye "anoshandiswa zvine hushamwari" nhasi, kana pachinzvimbo chekukurukura kuti madzishe eAdobe akaipa sei, isu taipa zvipo zvakanaka kuchirongwa.
Naizvozvi ini ndati kuonekana, rarama uye rega urarame.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Linux haisi chitendero
Iwe uri kusanganisa Linux neGNU, idzo dzakasiyana pfungwa.
Ini kune inonzi nevamwe gnu linux, ini ndinongoti linux uye period.
Kutaura nezve technical-komputa chidzidzo ndinofungidzira kuti hazvina basa kana uchichidaidza kuti GNU, Linux, GNU / Linux kana Jose Maria. Asi nezve posvo nezve uzivi, kana iwe uchifanira kusiyanisa nekuti iwo akasiyana mafilosofi uye inova isiri yakanyanya kukoshesa kuongorora kuti usadaro.
Zvakanaka, kunyora mu blog iwe unofanirwa kuve unowedzera hunyanzvi pokito, ingori katsamba
Hakusi kuita zvehunyanzvi kana kwete, ini handifunge kuti gnu inofanirwa kuuya pekutanga, uye chimwe chinhu chinotsigirwa nemakambani mazhinji anopa rutsigiro, ayo anongoshandisa chinongedzo cheLinux. Unogona kuzvida kana kwete, asi ndiwo maonero angu.
Iwe wakati ipfungwa dzako, Linux ndiyo kernel chete uye chete, ndeyevanhu chete vanotanga chimwe chinhu, kuitira kuti vazive zvavari kutaura nezvazvo, zviripo kuti uri kuenda nesimba
uye gnu mune izvi saka, ingori compiler uye mana maraibhurari chete uye chete, uye? Panguva iyo shanduko kubva ku gcc kuenda ku llvm yakwana, chii chichava chikonzero chekudaidza linux gnu?
sezvo linus yakati:
Zvakanaka, ndinofunga zvaizoruramiswa, asi zvinonzwisisika kana iwe ukagadzira iyo GNU Linux kugovera ... nenzira imwecheteyo yandinofunga kuti "Red Hat Linux" yakanaka, kana "SuSE Linux" kana "Debian Linux", nekuti kana iwe gadzira chako kugovera Unotumidza zita, asi kudaidza Linux zvakajairika "GNU Linux" hakuna musoro
Ini ndinopindura zve aki. Gnu isina linux yaisazove chinhu, asi linux isina gnu hairege kuve iro basa kana dissertation kana kunakidzwa kweanobira kubva kuYunivhesiti yeTlandlandia, saka sezvavanenge vachidanana, ndizvo zviripo (izvozvi). Kana kwete nekuti VaStallman vangadai vakaburitsa OS yavo kana kana hongu IBM yakanga yatotenga Minix musimboti kubva kuLinus, izvo hazvife zvakazivikanwa, chokwadi uye ini ndinodzokorora ndechekuti vaviri vanogarisana uye havaparadzanisike.
GNU isina linux iripo uye inonzi HURD Linux isina GNU? Android? Hapana chinhu cheGNU mu Android?
Kudana Linux kuoma kwakafanana nekunzi ndakatenga Firestone, apo zviripo ndiwo matai emotokari yangu yeFord. Handikwanise kuchovha ndisina ivo, asi mota yangu iFord
@morfeo, fananidzo yacho ingadai iri yechokwadi, dai iwe wataura kuti chero zvodii, Linux ndiyo injini yemota.
Huye, mota yangu Volks Wagen ine AUDI injini, asi ini handisi kuzvirova pamusoro peaudi yangu !!
@Morpheus. Mu Android hapana chinhu GNU. Linux chete neGoogle zvinoshandiswa.
Asi ipapo isu tinofanirwa kuidaidza kuti Linux, kwete Android!
Uye saka Patrick Volkerding akadana zvisikwa zvake Slackware Linux.
@ eliotime3000 Uye nei iye "anonamata anonamata" achimuti "Slackware"? Ini ndinofanira kungodaidza kuti LINUX, kana icho chete chakakosha chinhu kernel!
Nezve mubvunzo wako wekutanga, wainzi Slackware zvichibva pazvivakwa zvakapihwa nehurongwa hwekushandisa ichienzaniswa neyakatangira, Softlanding Linux Systems (RIP).
Nezve wako wechipiri mubvunzo:
Zvakareruka, nekuti iko kugovera, uye nekuti iri anodzvinyirira mudzvanyiriri wehupenyu. Pamusoro pezvo, ndiko kugoverwa kwakareba kureba kunowanikwa, uye dai zvisiri zvekuve piyona maererano nechengetedzo yepakeji manejimendi, ingadai isina kuvapo.
@ eliotime3000 kunze kwezvisinganzwisisike, Patrick Volkerding ane kodzero zhinji dzekudaidza YAKO inoshanda system zvaari kuda. Izvo zvisina kunaka kudana Inoshanda Sisitimu kune yakapfava kernel kupfuura iyo GNU inoshanda sisitimu.
Kujekesa: Torvalds haigadzirise uye chengetedza yakakwana uye inoshanda OS, chete kernel yeGNU.
Iyo FSF yakagadzira iyo GNU Inoshanda Sisitimu neiyo HURD kernel makore mazhinji Linux isati yavapo (ndinofunga dambudziko raStallman ndere "asiri ezvekutengesa" mazita aakasarudza).
Zvakanaka, ndinosiya hurukuro iyi, ndiri kuenda kunokwira muVW / Audi yangu.
Rombo rakanaka uye zivisai mushe musati matora!
Dystopic Vegan akadaro
Zvakanaka, kune Gnu / hurd, Gnu / Linux, GNU / kFreeBSD, kana Hurd iyi yagadzirira hapazovi nechikonzero chekudaidza GNU linux uye nedzidziso nehunyanzvi Android, ingave iri Android / Linux asi munhu wese wandinoiziva se Android uye kana iwe uchiziva kunyange icho chine linux kernel asi akawanda "linux" mafeni anobuda kuzosheedzera kubva padenga remba ... Android ine linux !!! ine linux !! uye ivo vanoti ... linux yakawana mugove wemusika ... asi yaive chaiyo Android iyo ingangoita 70% isina mahara ...
Pindura Distopico Vegan
Ini handigovane chero chinhu chaunotaura. Ini ndichakupa muenzaniso: Ubuntu ndiko kugovera kunobva paGNU / Linux (kana kana iwe uchida kuwedzera purist GNU neLinux). Izvo isu zvatisingakwanise kuita kutaura "zvakanaka tinodaidza kuti Linux uye ndizvozvo" uye kanganwa nezvevanhu vese vakashanda paGNU. Unogona kuwedzera imwe tsanga kuGNU uye ndizvozvo. Asi sekutaura kwavo pamusoro, Linux isina GNU ingori "basa kana dzidziso kana kunakidzwa kwebavha kubva kuYunivhesiti yeTlandlandia".
Ini ndinogara ndichiti GNU / Linux mukunyora, nekuremekedza. Kana ndotaura nezve OS ini ndinowanzo taura Linux kuvanhu vatsva vasina chavanoziva nezvayo uye GNU / Linux kune vashandisi vandinoziva vanoziva nezvazvo. Uye nguva dzose, uye ini ndagara ndichiti, ndinogadzirisa vanhu pavanoti "linux" kungoreva nzira yakakwana yekushandisa: GNU / Linux.
Kuna Gnu unowedzera imwe kernel, bsd semuenzaniso, uye unorasikirwa nerutsigiro rwe90% yeiyo Hardware, gnome yaizorega kushanda nekuda kwekukanganisa uye kusati yaiswa uye zviuru zvezvimwe zvinhu. Iyo nucleus ndiyo inonyanya kukosha chikamu muhurongwa, sekungova chikamu chakakosha kwazvo chenyika, ndiyo hwaro hwezvose.
Debian Gnu / Akakuvara:
Gnome yeDebian Gnu / Yakakuvara:
(... uyezve izwi rekuti kusaziva rinorwadza)
@ pandev92 WTF? Uye kana iwe ukatora GNU kubva kuLinux, rinongova basa rekuFinnish hacker. »GNU inoda Linux neLinux inoda GNU. Nongedzo. Hapana chimwezve chekutaura nezvacho. Uye hazvisi izvo kuti ini ndakarurama zvachose, izvo zvirizvo uye iwe unoziva kuti ndizvo uye isu TESE tinoziva kuti ndizvo. Iwe haugone kuzvidza chikamu chebasa saizvozvo. Heino rakabatana basa uye inonzi GNU / Linux. Ubuntu kugovera kunobva paGNU / Linux. Ubuntu ndeye Debian-yakavakirwa yekuparadzira iyo zvakare yakavakirwa paGNU / Linux. Tese isu tinoshandisa chero kugoverwa kweGNU / Linux tiri kushandisa kugoverwa kweGNU / Linux. Katsi yangu paanouya patafura yangu uye achiona kuti pane chirauro pahwindo rangu uye anofamba achiedza kuibata, ari kunakidzwa nechituko chiri kushanda muGNU / Linux. Izvo hazvina kuoma kunzwisisa, chaizvo. Linus anogona kutaura chero chaanoda.
Kana iwe ukabvisa Gnu kubva kuLinux, maturusi anongotsiviwa nemamwe masystem bsd, semahara bsd zvaita, kumira uchishandisa gcc. Asi iyi haisi iyo hurukuro.
KANA ukatsiva iyo BSD kernel ne linux ingave iri BSD ine linux kernel, kwete linux
Hei! kubva pane zvandinoona kana ndichipfuura mbeva pamusoro pechiratidzo cheiyo penguin (tux) mune yangu mushandisi mumiriri ndinoona kuti inoti "GNU / Linux x64" 🙂
David gomez akadaro
Ini ndinozviona zvakasiyana ... Kwandiri, iyo inoshanda sisitimu iLinux, uye akawanda kugovera anosanganisira akateedzana ezvishandiso zvakagadzirwa kana kuburitswa pasi peiyo FSF rezinesi system, GNU GPL. Ichi hachisi chikonzero nei ndichifanira kuisa GNU pamberi peLinux kungofungidzirwa kunofungidzirwa kwevagadziri.
Kune rimwe divi, kana GNU yaiswa pamberi peLinux ini handisi kuziva basa remusimudziri weGIMP, kana mushambadzi weGTK +, nezvimwe, nezvimwewo. Kwete changamire, nekuisa GNU pamberi peLinux ndiri kupa mbiri kuna Richard Stallman nenheyo yake, iyo kubva pakutanga ndiyo yakakuvadza fatistist, kuti Linux inotora chikwereti chose uye iye (kana hwaro hwake) anoiswa parutivi.
Icho asi kutsva kwakadzika mukudada!
Pindura kuna David Gómez
"Chatisingakwanise kuita kutaura" zvakanaka tinodaidza kuti Linux uye ndizvozvo "uye kanganwa nezvevanhu vese vakashanda paGNU"
Asi ko kana isu tichigona kuidana kuti "GNU / Linux" uye kukanganwa nezve vamwe vanhu vese vane zvirongwa zvinosanganisirwa mukuparadzira linux (semuenzaniso KDE, Gnome, LibreOffice, ...) uye ndiani asiri Linux Torvals kana kushandira GNU?
Saka kana iwe uchida kusarudzika unofanirwa kuidaidza kuti "xxx / yyy / yyy / abc / 123 / xyz / pqr / rst / uvw /… /… /… / Linux".
Saka kana iwe uchida kusarudzika unofanirwa kuidaidza kuti "xxx / yyy / yyy / abc / 123 / xyz / pqr / rst / uvw /… /… / GNU / Linux".
Carlos Zayas Guggiari akadaro
Unogona kuidaidza chero chaunoda, asi hapana anoti Linux (kana GNU / Linux, Ubuntu, Fedora, Android kana chero chaunoda kuitumidza) uzivi, ndoda chitendero. Uyo anotaura chimwe chinhu chakadai, imo nekuti ane pfungwa dzakayambuka kana pamwe haana kumbozvinetsa nekuverenga zvakanyatsonaka zvinyorwa zvinowanikwa mumitauro yakati wandei paFree Software Foundation saiti. Kana iyo GNU uzivi kana chinamato, asi ingori nzira yekushandisa yakafemerwa nemisimboti yesoftware yemahara, ine hunyanzvi, hwetsika, zvematongerwo enyika pamwe neuzivi. Mhedzisiro yakakosha yechinyorwa chako ndeyechokwadi, asi kwete nekuda kwezvikonzero zvaunotaura.
Pindura Carlos Zayas Guggiari
pandev92, ungaudza sei linux (ini ndinodaidzawo kuti linux, period) kana chiri chitendero, unogona kuchiona mune zvakataurwa, ko kana chiri chitendero? Ehe zviripo uyezve ndezvipi, ndeyechokwadi, yakafanana nenguruve yeKaturike pamberi peMiddle Ages, yakafanana neIslam inosemesa. Iwe unongotaura chimwe chinhu kupokana nemuporofita (GNU kana chero chii) uye ivo vanocheka mazai ako kana kukuchidzira iwe moto iwe uchiri mupenyu kana vakasazvicheka pachirahwe kutanga.
Chitendero chinotora mukana wekusaziva kwevanhu kuti uvashandise.
Iyo yemahara software uzivi inopokana chete neizvozvo.
Zvichida iyo "solidism uye chitendero" yemakambani "epamusoro" software haivabvumidze kuti vaone chokwadi.
Chinyorwa chemunyori pamwe nekutaura kwako kuyedza "kubvarura" avo vasingafunge senge iwe (kuwedzera kumaKaturike nemaMuslim), vasina hwaro. Ndiani anonamata?
Icho chinyorwa chakashata, zvinoita sekunge chakanyorwa nemwana fan we windows: S
Chinhu chega chandinobvumirana nacho ndechekuti gnu / linux hachisi chinamato, zvimwe zvese imarara.
chinyorwa chakanaka, mune zvimwe zvinhu handibvumirani, asi pasina kupokana ndinobvumirana neshoko rekuti "linux hachisi chitendero".
Jesu Delgado akadaro
Yakanaka post. Pasina kupokana, vanhu vazhinji vakawira muiyo "fanatic fanism" iyo inoita kuti nharaunda yevashandisi iparadzane kana kusatambira mamwe maonero, vachiita puritans kana radicals. 🙂
Pindura Jesús Delgado
Vakabatidza moto, asi ndinobvumirana nezvinhu zvakawanda zvaunotaura, ini ndagara ndichiti munhu wese anoshandisa zvaanoda kupfeka.
Ini ndinodawo zvinotaurwa na @seba «Kudzivirira zano kunoitawo iwe kuti uve nhapwa kwariri, hazvidziviririke, uyu ndiye munhu». Ini ndinogovana izvi zvizere.
@ pandev92: Ini handinyatsonzwisisa zvaunoreva ne «. Linux hachisi huzivi, zvirinani kwete zvekare, muenzaniso wakajeka ndiyo nhamba yemakambani zvakare ane zvivakwa zvekudyara uye anoshandisa Linux yezvavanoda, seOracle, AMD, Nvidia, Steam, Intel, IBM…. »
Linux, Yakavakirwa pafilosofi, kuti makambani anoishandisa pasina huzivi hazvireve kuti haipo, pakupera kweiyo "Philosophy" ndeyezvino, chimwe chinhu chinoshanduka kubva kumunhu kuenda kumunhu uye imwe neimwe inochinjisa kune izvo zvinoita sezviri nani.
Makambani anoshandisa linux pasina uzivi? izvo zvakajairika, makambani anongoshandisa izvozvi zve "Mercantilism", uye linux inokwana zvachose mune izvi sezvo ichideredza mutengo, ichiwedzera kuchengetedzeka, uye ichivapa zivo isingaperi iyo yavanogona kushandisa kune zvavo zviitiko. Mapurogiramu mangani akavharwa asingashandise mazano akawanikwa kubva mahara software? kana ivo vachave neyemahara kodhi, iyo yatisingakwanise kuongorora? .. pss zvirinani tisingataure.
Kwaziso uye Kwakanaka post
Nicholas Tassani akadaro
Yakanaka chinyorwa! Chiono chakanaka kwazvo.
Pindura Nicolai Tassani
Ndine urombo, asi kubva pane zvandakaverenga, zvinoita kwandiri sekuti une ruoko rwepfungwa kumusoro kwausingatsanangure. Ini handisi musimboti, kure nazvo, vanhu vanoshandisa chero chavanoda, windows mac gnu / linux, chero chinonyanya kubatsira kune yega yega. Ndanga ndichishandisa "GNU / LINUX" kweanopfuura makore gumi uye zvinoita kwandiri sekuti maitiro ako haana kunaka. Ini ndinonzwisisa meseji asi haina kuita (kwandiri) zvaunotaura. Uri kuisa pamwechete GNU, LINUX uye OPEN SOURCE. Uye mumwe nemumwe ane zvinhu zvake. GNU ndeye (openource) nharaunda inomhanya paLinux, Linux ndiyo musimboti, uye Vhura Sosi yakavhurwa sosi software. Linux, iyo kernel, ine zvikamu zvekudyara mune mazhinji ekuparadzira. Kune rimwe divi, pane yemahara kodhi iyo inotengeswa uye iyo yainogona kutengwa, kwave kutove kune GNU / LINUX migove yakabhadharwa (saka nekutarisa kuti Xandros, Linspire, Suse… pe rangarira). Iyo uzivi hwe openource haina kufananidzwa nekushandisa muchina uine imwe Inoshanda Sisitimu, iyo ingave iri yakashata kwazvo uye yakapusa kuenzanisa. Iyo uzivi hwe openource hwakavakirwa pakuronga chimwe chinhu kana kugadzirisa chimwe chinhu kune zvakajairika zvakanaka. Uye ini ndinodzokorora zvakare, iwe unogona kubhadharisa, kana zvisiri kuudza shamwari yangu Jonhatan Thomas, musiki weOpenshot, uyo ane kickstarter aburitsa zvakakwana kuti azvitsaurire iye wega kumwaka kune zvaanoda. Simply izvo iwe zvaunosheedzera vanokoshesa ndevaya vanodzivirira kushandiswa kweiyo yemahara kodhi nekuti ivo vanodavira kuti nayo iwe unogona kuve nharaunda irinani, kana kunyangwe ichiratidzika kunge isinganzwisisike, yemahara kodhi inokanganisa nzanga.
Uye zvakadaro, kutanga ini kuna Gnu linux, ndinongodaidza kuti linux, sezvo linus torvalds ingati, hapana chikonzero chekuti ndiise gnu pamberi payo. Chechipiri, iwe unondipa iyo muenzaniso wechikumbiro icho chakapihwa mari ne kickstarter ..., imwe ..., apo iwe pachako uchiziva kuti hazvigoneke kuti zvese zvikumbiro zviite izvozvo.
Firosofi yekuvhura izano rinoshanda, iro rekutora kodhi uye kugona kurishandisa kuti ubatsirwe, uye kazhinji marezinesi anonyanya kutsigira tsika iyi ndeavo anoshandiswa mumabasa akaita se chromium, wayland, x11 nezvimwe.
Iwe uchiri kukanganisa, pakupedzisira, batsira munharaunda, zvese zvinodzokera kwazviri, Mahara haina kuenzana neyemahara
Ini ndinofunga wakakanganisa kuzvitarisa chete munharaunda, torvalds vakati gore rapfuura, nezvazvo:
Neimwe nzira, ini ndinofunga kuti iko chaiko kuzadzikiswa kwe Open Source kuri kubvumidza munhu wese kuti ave neudyire, kwete kuyedza kuti munhu wese abatsire pane zvakajairika
Mune mamwe mazwi, ini handioni Open Source seiya diki meseji yekuti "ngatiimbei tese kuimba kumbaya pamoto tiite nyika ive nzvimbo iri nani." Kwete, Sosi Yakavhurika inoshanda chete kana munhu wese achipa nekuda kwezvikonzero zvavo uye zveudyire.
Zvikonzero zvekutanga zveudyire zvekushandira pamwe neLinux zvakanangana nekungonakidzwa kwekukanya. Ndozvakaitika kwandiri: kuronga kwaive kufarira kwangu, kuda kwangu, uye kudzidza kudzora Hardware yaive chinangwa changu cheudyire. Uye semhedzisiro, aive asiri ega muchinangwa icho.
Usazvitorere pachako, asi kuve iye ari kutaura nezvokunzvenga kuzviita chinamato iwe ziva mavhesi ese akataurwa naLinus.
Chikamu chakaringana, ndicho chinzvimbo chaVaLinus, uyo sezviri pachena ndiye waunotarisisa naye, asi havazi vese vakaita saiye kana iwe, kwete seni kana chero mumwe munhu, mumwe nemumwe wedu akasiyana. Mr. Ritchie pasina ivo vatinenge tisingataure vachimiririra, havana kufunga izvozvo, kana VaStallman kana Maddog, kana…. Nezve izvi ini handidi kuti iwe ufunge kuti ndinozvifananidza navo, kure nazvo, mumwe nemumwe anozoita sarudzo dzake uye zvinokurudzira, asi kana mukati mechikurudziro ichocho kushanda pamwe nevanhu vazhinji uye kuti, semuenzaniso, vanhu vanoita kwete kubatsirwa Ivo vangave nekwaniso kune tekinoroji, kune nyika dzisina kusimukira, kunyangwe kune vanhu vakaita sewe neni, usandiudze pane chakakanganisika neizvozvo. Kana iwe uchibva pachinzvimbo chako pablog kana ini pachangu uchibva kune wangu uchigona kubatsira nekushandira pamwe muzviyo zvejecha zvatinogona kupa, chii chakanganisika nazvo? Asi pane izvo isu tinofanirwa kuve takakomba zvishoma uye tisingasanganise zvinhu, isu tinofanirwa "kuzivisa", uye kwete kuzvipira kuzviramba tichizvitsika kuti kana gnu / linux kana linux (sekudaidzira kwaunoita naVaLinux) ichi kana icho , kana chiri chitendero kana uzivi. Linux haisi uzivi kana chinamato, asi GNU, isina huzivi, inogona kutaridzika nekuti inotenda munharaunda munharaunda dzayo dzebug, mukuvandudzwa kwayo mumipiro yayo, pasina kukumbira chero chinhu kudzoka, hongu ... yakanaka yekushandisa system.
Zvamunotaura zvinoita sekuda kuziva kwandiri:
«Ini ndakatanga nguva yandakatsanangura mazwi aStallman, ndichiva nechokwadi chekuti ichi ndicho chega chokwadi uye sezvazvinowanzoitika, patinotenda kuti tine chokwadi chezana, takakanganisa, hatikwanise kuona nyika chaidzo»
Neraki iwe hauchateedzeri izwi raVaStallman, asi kubva pane zvandinoona mune ako makomendi iwe unoteedzera izwi raVaLinus Torvalds.
AH .. Fundamentalist yeTorvalds, asi kwete yaStallman.
Isu tese tine mazano edu uye ino posvo inokumbira ruremekedzo, asi inoshora akawanda mazano, mazano uye mavara pasina izvo izvi positi zvaisatombovapo
Kwete kana @morfeo, ini handisi musimboti wema torvalds, muzvinhu zvakawanda anoti handibvumirani uye zvakatonyanya nezvakabuda patrolls, asi pano hatisi kukurukura kana linux inonzi gnu linux, linux, kana ubuntu chete. Pano tiri kukurukura chimwe chinhu, saka ndokumbira usatsause musoro wenyaya.
Uye ndechipi chimwe icho chinhu? Ndo izvo zvinotaurwa nechinyorwa, iwo anofara "mafashinasi" (zvirinani kuti ine iro label).
Zvakakosha here kunyora chinyorwa chakazara kuti uti "Ndiri kuzofunga kuti ndinoda sei"? Izvo zvinopera pasina kutaura. Izvo zvisinganzwisisike ndosaka vachipambadza nguva yavo zvisirizvo (pane nhema zhinji, senge iyo redhat inongopa technical service: REDHAT INOBHADHARA (yemahara ndiFedora)). Ichi hachisi chitendero, kana zvitendero, kana chero chinhu chakadai: iyo yakachena sainzi yemakomputa uye kodhi kodhi, kuwedzera pakutsvaga mutemo unobatana kupfuura uno wazvino. Iko kuziva nezve njodzi dzepropathiary software (uye kuti yatove kupfuura pakuona, neWellden neNSA, kuti "anokoshesa dzidziso" Stallman aive akarurama) Chinangwa ndechei? nekuti patova netambo yezvinyorwa kuyedza kumisikidza idzi pfungwa dzisinganzwisisike pane ino blog
Ichokwadi ndechekuti, uye ndinovimba unozvitora nenzira inovaka, nzira yaunotaurira vaverengi vako inoita kunge isiriyo kwandiri inoratidza kushayikwa kwekuremekedza. Ini ndinofungidzira kuti iwe uri mudiki uye izvo zvinogadziriswa nezera uye nekuziva kuti iwe unodzidza zvakawanda nekuteerera (kuverenga mune ino kesi) pane kutaura (kunyora).
Izvo ini zvandinoteerera kuna Stallman kushandisa shomashoma yepropathietary software inogoneka yekuvanzika uye kunyanya yekumashure (Prism nezvimwe zvinhu), asi kubva ipapo kuzoita fanboy kana kuenda pasuo nesuo ...
Dambudziko nderekuti vanhu vazhinji vanovhiringa zvinoreva ne end.
Kune vazhinji, kushandisa Linux ndiwo magumo uye vanozvirumbidza pairi. Kune rimwe divi, kune vanhu vanongoshandisa izvo zvinovatendera kuchengetedza yakawanda nguva. Nguva zhinji tinokanganwa kuti PC hapana chimwe kunze kwechiridzwa chekuita mamwe mabasa uye chishandiso chekuita kuti hupenyu huve nyore mune zvese.
Mune yangu nyaya, ini ndinoshandisa Linux nekuti ini ndinoda yemahara software, uye inoita kunge yakanaka kwazvo uzivi iyo inogona (kana inofanirwa) kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana dzehupenyu hwedu. Asi zvakare, ini ndinoshandisa Linux nekuti inondiponesa nguva yekunakidzwa nezvimwe zvinhu uye ini ndinogadzira kupfuura chero mune imwe OS.
Sezvaunotaura, Linux ine zvikanganiso uye nguva zhinji iwe unofanirwa kurwa navo. Asi ndizvo zvazvinoreva kushandisa chimwe chinhu mahara.
Nenzira imwecheteyo, zvinoitikawo neakavhurika sosi, kunyangwe izvo zvichionekwa zvakanyanya sechishandiso kwete senge svikiro.
Nezve iyo posvo pachayo:
Iwe zvakare unopokana kuti izvo iwe zvaunodana Linux hazvipe chero hupfumi sarudzo kune yazvino neoliberal capitalism, uye kuti kuti umise chimwe chinhu kutanga, iwe unofanirwa kuve neimwe nzira. Handizive kana iwe waverenga "Hupfumi hwehuneti", iri basa rinopa dzidziso dzezvematongerwo enyika nezve hupfumi senge iyo inobuda kubva ku "linux" uye inopa data rinoshanda rinotsigira dzidziso, "Linux" inopa imwe nzira. Uye kunyangwe kushomeka kweimwe sarudzo isina kupa, hachisi chikonzero chekumisa chinzvimbo chekare, regai nditsanangure: panguva yeHondo Yenyika II maPoland akarwa nevaNazi uye padivi pevaSoviet veRussia, vachitoziva kuti maRussia vaive kwete vanhu. munhoroondo "vane hushamwari" navo (uye sezvazvakazoonekwa munguva yenhengo yavo muUSSR) nekuti kunyangwe dai vasina imwe nzira zvaive nani kubvisa gomarara uye vozoona zvavakaita, kusavapo yeimwe nzira hachisi chikonzero chekusabvisa Bundu.
Kana iwe ukavhiringidza linux kernel, uye GNU iyo yakazara sisitimu yekushandisa ine yakazara uzivi uye chinangwa shure kwayo, linux ndeyekuti ndiani anonyora chinyorwa ichi, vanhu vanongoda kuedza uye kushandisa mamwe mashandiro masisitimu, kuongorora, kuyedza uye inoremekedzwa.
Asi Yemahara Software ine kumashure uye chinangwa, ndosaka OpenSource nezvimwe zvakazvarwa.
Linux yakafanana neLinux, geek ine yakawanda yemahara nguva, uye GNU uye yemahara software yakafanana kune avo vanoda nyika iri nani, yemahara, nezvimwe. Kune chimwe chinhu, vatambi vakaita seRMS vanobatanidzwa uye vanotsigira akasiyana emagariro uye pro-rusununguko zvikonzero , uye kunyangwe neavatambi ava vasingabvumirane pane zvese zvirinani zvinokupa kumashure uye chinangwa uye kwete chete "zviri mahara uye ndiri kuda kuziva"
Kana kuri kwekunyanyisa kwechitendero, nekuti Gandhi akaiswa mutirongo nekuda kwemafungiro ake munyika umo zvichikosha kuti unzwisise "zvido nezvido", Luther King akafira "kufarira kwake zvechitendero" kuti aone kodzero dzevanhu, saMalcom X uye kunyange Bakunin, Barry. Horne, Emma Goldman nezvimwe.
Vanhu vakasungwa kana kufira mazano avo, mazano epasirese akarurama uye zvirinani, vasina kugadzikana, vasina kunaka, kana ivo vaisavapo nekuda kwekuda kuziva asi nemafungiro eshanduko anowanzodiwa.
Iye mukomana akavhiringidzika, iye anosanganisa rusununguko rwemunhu nekodhi yemahara.
Kana iwewo hauna chokwadi chizere nezvenyaya iyi ... Remekedza maonero avo sekuremekedza kwako. Pfungwa dzakadai sekusununguka kwemunhu ndedzega kune mumwe nemumwe. Haasi epfungwa dzakanangana uye haigone kuyerwa kana kushandiswa zvine mutsindo ...
Ini ndinobvumirana naKarlinux, kunyangwe iwe uchiremekedza mumwe munhu, haugone kuremekedza pfungwa yake nekuti haina kunaka, kana iko zvino ndikakuudza kuti 2 + 2 = 5, kunyangwe ukandiremekedza, iwe uchandiudza kuti ndiri kukanganisa, uye kana ndikakuudza kuti ndiwo maonero angu uye ndeyechokwadi seyako here? Haasi ese maonero anoshanda, uye ini ndinofunga kune yakashata dzidziso kumashure mune ino positi, sezvawataura iwe pachako.
Muenzaniso wakanaka kwazvo. Masvomhu anoenderana nemisimboti uye haingosiire nzvimbo maonero. Kana ndikakuudza kuti 2 + 2 = 4 unogona kundiudza kuti kwauri nhamba 4 inonzi shanu. Asi haugone kutaura kuti 2 + 2 = 5 nekuti chokwadi hachienderane neiyo equation.
Ini ndinonzwisisa pfungwa yako asi iyo muenzaniso haishande.
Masvomhu anoteerera nemitemo yeaxiomatic inogamuchirwa pasi rose nekuti dai pasina ivo paisazove nehurongwa senge huripo. Naizvozvo maonero ari kunze kwemasvomhu, zvirinani padanho iro.
Zvakanaka ndizvo zvandataura, rusununguko rwemushandisi harugone kuenzaniswa kana kuyerwa kana kuvhiringidzwa nerusununguko rwekodhi, pfungwa hadzigoni kuvhiringidzika, zvakadaro ndakatokumbira ruregerero pazasi kuitira kuti mumwe munhu anzwe zvakaipa nezvandataura.
Haufanire kukumbira ruregerero pane chero chinhu, murume. Tiri kutaura nenzira ine hutano uye pasina kutenda kwakaipa.
Aya ndiwo chaiwo mafungiro andinozvidza, mafungiro emubvunzi weiyo Holy See, uyo anotenda kuti ane chokwadi chizere, uye kuti anogona kutungamira varombo vatadzi vakananga kuchiedza kana kukupisa padanda.
Iko kuzvidza, handikushori iwe! Kure nazvo, dai ndakazviita ndingadai ndisiri kunyora zvandinonyora, kana zvakakunetsa, ndine hurombo, zvinongokuita kuti uzive kuti pamwe uri kusanganisa zvinhu uye zviri pachena kuti handisi ndega, asi chii Ndakati kwaisave kuda kwangu kuti ndikugumbure, kana ndadaro, ndinokumbira ruregerero, uye handidi kuti zvandinotaura zviende kumisa, kwete zvachose. Maonero angu maonero angu akafanana neako, hapana chimwezve. Asi kana nekupa maonero angu iwe ukandiyambutsa ndichibuda mairi, ndaitarisa guvhu rangu zvishoma. Kana ndosaka ndiri munhu anonyanyisa, zvakanaka urombo, ndinofunga kwete, kutaura zvazviri ini ndinoshandisa windows palaptop uye ini handishungurudzike, uye ini handisi mutambi uye ini handidi basa. Asi zvandakataura, ndinofunga handina munhu wandakatadzira, asi kana ndakazviita, ndine urombo
Zvakanaka, ndinewe, ari kuvhiringidza zvese uye ane hura hwakakura hwepfungwa. Pamwe iwo mhedzisiro yekushandisa Windows 8 ...
Uye rusununguko rwekuziva zvinoitwa nemakambani nedata rangu harisi remunhu?
Ngatiregei kusundidzira nyaya iyi zvakanyanya. Kuenzanisa Richard Stallman nevanhu vakaita saBakunin zvinoita sekuwedzeredza kukuru kwandiri. Ndokumbirawo, tiri kutaura nezve chishandiso chebasa, kwete iro basa pacharo kana rusununguko rwemunhu ...
Izvo hazvina kunyanya kusiyana izvo zvese zvinoratidza.
Kana kuburikidza nesoftware ivo vari kuongorora uye kudzora vanhu vese, hazvisi zvekusununguka kwemunhu here?
«Lima, Gunyana 23, 1984. Ini ndinofanira kuenda kune projekita ku kudzivirira kutonga kwevanhu".
@xex, @morfeo uye @Distopico Vegan ndinopindura vatatu venyu mune imwecheteyo chirevo kuti zvive nyore.
@xex: Izvo vanhu vakaita saBakunin, Proudhon kana Kropotkin, madzibaba eanarchism, vakati, hazvienderane nemitsara yakafanana neinotaurwa neRMS. Ivo vanoramba zvemasimba masimba uye vanopokana zvikonzero zvavo. Yemahara software haina kutyora aya masimba masimba. Hapana kana anarchism inotaurwa mune yemahara software kana chiremera chakabvunzwa. Iyo Open Source uzivi haidziviriri kugadzirwa kwemakambani uye nekudaro kubva mumaonero angu, haidziviriri kutonga uko izvi zvinogona kushandisa pamusoro pehupenyu hwedu. Icho chokwadi chekuti ini ndinogona kuona iyo kodhi yekushandisa iyo inopihwa nekambani haisi kuzonditadzisa kudzorwa nedzimwe nzira dzakadai sekushambadzira.
@morfeo: Zvandiri kureva nekutaura kwangu ndezvekuti, sezvandakambotaura, kuti software yemahara haisi kuzodzivirira hurumende, makambani nehupfumi kubva mukuenderera mberi nekudzora hupenyu hwedu. Zvirinani, ndiyo nzira yandinozviona nayo.
@Distopico Vegan: Handisi kuti handigovane zvaunofunga kuti software yemahara ine pesvedzero inodambura mamwe emaketani atinoiswa nevevanhu. Zvandaireva nekutaura kwangu ndezvekuti izvo izvo Stallman anotevera zviri pasi zvakanyanya pane izvo vanhu vakaita saBakunin vaive mushure. Kutaura kwekupedzisira kwakakura kwazvo uye mune mamwe akawanda masegi kupfuura aStallman's. Ndosaka ndichiti hatikwanise kuenzanisa izvi zviviri. Ivo vaviri vanotsigira rusununguko, hongu, asi kwete padanho rimwe chete. Ini ndanga ndichingoreva izvo.
Zviripachena kuti iyo Open Source uzivi, kubva pane yangu maonero uye kubva kune yako ndinofungidzira zvakare, idanho diki rekuunza vanhu vakagovana tsika nerusununguko rwakazotaurwa neanarchist. Ini ndinoshandisa Debian nekuti ndiko kugovera kune manyorero emunharaunda kumashure uye izvo zvinoita kuti ndidade. Ini ndicharamba ndichidzivirira yemahara software pese pazvinogoneka, asi zvakare ichokwadi kuti chidiki chidiki kurwisa nharaunda isina kugadzirwa zvakanaka kubva pasi kumusoro. Unotondinzwisisa ...
Kunakidzwa kugovana hurukuro iyi newe 😉
chishandiso chine simba rakawanda, kunge terevhizheni, sevazhinji vezvenhau, sechitendero zvinhu izvo vanhu vakaita saBakunin vakataura nezvazvo ndokuramba, vazhinji vanorwisa terevhizheni yekutengesa uye vanonzi "maturusi", vamwe vanorwisa monsanto avo vari zvakare "zvishandiso" asi chaizvo imwe neimwe ine kumashure kwayo uye pasocial simba.
NayosX Ness akadaro
Usataure nezvazvo asi iwe verenga pfungwa dzangu uye ini ndiri 99.99% muchibvumirano, rusununguko rwemunhu runochinja nekuda kwenzvimbo yaanoshanda, pamwe hurongwa hwakarongwa neGNU hahushande kune wese munhu, asi kune vashoma, iyo GNU OS / Linux ndiyo yakanakisa iripo izvo ichokwadi, iwe unofanirwa kungoziva nzira yekusarudza chaiyo Hardware kuti ushande zvinoenderana nezvaunoda, ndiko kuti, iwe unofanirwa kutsvaga kuwirirana sezvinoita maBuddha.
Semuenzaniso: Ini ndinofanira kushandisa visual studio mune yakasarudzika modhi ne win 7, hapana kana chimwe zvacho chakashata, asi ini ndaisa kudiwa kwangu kweGNU / linux distro pamberi pechinodiwa chekuve nechikamu kana dhisiki rakaomarara reWindows chete, Kunyange hazvo zviri izvo mune iyo laptop yangu, pane desktop yangu pane Windows 8 yekuuraya nguva yangu yekuzorora ndichitamba COD, Crysis uye yese iyo mitambo isingamhanye 100% muGNU / Linux, izvozvo zvinouraya rusununguko rwangu rwekusarudza? ??, kwete zvachose, zvinondipa dzimwe nzira dzekushomeka kweOS mune iyi kesi
Pindura NayosX Ness
Munzira zhinji ndinobvumirana newe. Uyezve, ndiri kushandisa GNU / Linux nekuti ndine mukana uri nani wekumutsiridza PC yechinyakare ine Slackware pane neWindows XP.
Zvino, dambudziko nderekuti kana ukazvivharira iwe muparadigm, unozova nyanzvi yekumira, chimwe chinhu chiri kuitwa nevazhinji fanboys, uye hauzive kuti kune mamirioni emaparadigms ari kusimba, pakati pavo, "zviri nyore ".
Chandinopesana nesoftware ndeyekuti, kana vachinyatsoda kudzivirira kodzero dzavo, vaizozviita nekuvhota software kuti ivo vanofanira kutengesa zviri pamutemo zvisinei nenyika yavari, asi sevaya vane simba shoma rekutenga, ivo tikanganwirei kubiridzira software yepamutemo uye nokudaro tichiva vanovimba nazvo zvekuti tinozvibvumira kuvaka tsika paradigm iyo inotidzika muiyo "software huru chete" iripo.
Nezve software yemahara, ndinobvuma kuti ndiyo yakanakisa maererano nefilosofi uye mhando, asi mune dzakawanda zviitiko, kana zvasvika pakugadzira yakanaka kutsiva yepropathi software, vanozvitora zvisiri izvo uye chokwadi ndechekuti zvinowana kushorwa kwe izvo zvinoramba zvichishandisa proprietary software, nekuti haina kuburitsa ruzivo mune iyo yavanogona kuchengetedza mashandisiro avo (inonyanya kuzivikanwa kesi iri gnash uye distros inogamuchirwa neFSF).
Ndiine Windows, ndinobvuma kuti dzimwe nguva, inyonganiso (NTFS, UAC, yakachipa spyware seWAT), asi kana iwe uchigara munzvimbo iyo yakawira mutsika dzakadai sePeru, zvinosuwisa kuti zvinorwadza shanduko kubva kuWindows kuenda GNU / Linux, nekuti kana ukasamuratidza iyo yemahara software haina kunyatsoita zvakafanana uye / kana zvirinani pane shamwari yake, haasi kuzosiya.
Ini ndinobvuma sekungotumidza zita rekuti Linux. Pasina nguva refu ndanga ndaona girafu inoratidza kuti yakawanda sei muzana yeGNU yaive mune distro (ini handirangariri kuti ndeipi) uye yaingova 8% yeiyo yakazara. Muchiitiko ichocho isu tinofanirwa kutumidza zita rekuti distros chimwe chinhu senge GNU / Linux / Xorg / KDE yechikamu chimwe nechimwe chakakodzera chegadziriro.
Uye iyo% ye linux?
Iko kune 8% GNU (+ 5% GNU, chinova chikamu chepamutemo cheiyo GNU chirongwa!)
Ye kernel (Linux) pane 9% (Hazvina musiyano)
Zvimwe zvese zvinobva kune vamwe (mozilla, Java, xorg)
Ikozvino OS iri distro?
kwete hazvo. Iyo sisitimu inogona kushanda zvakakwana pasina xorg, isina Java, isina mozilla, isina gnome, nezvimwe.
Isu tangosara neGnu neLinux chete, izvo zvinoumba OS yakazara uye inoshanda.Vanogona kushanda vasina mumwe here?
Ehe, pane HURD (GNU pachayo kernel) uye kune Android (ine Linux, asi kwete GNU)
Ndingangodana here GNU / Hurd Hurd?
Hazvingaite zvine musoro, chinhu chakajairika chingave chiri pachena GNU, rinova zita reiyo OS.
Ini ndinofanira kufonera Android Android / Linux?
Kana iwe uchida, asi inowanzo danwa kuti Android, rinova zita reiyo OS.
Saka mumwe munhu anondipindura, nei tichifanira kudaidza GNU (/ Linux) LInux kungoti GNU iri OS uye Linux iri imwe yemaziso ayo?
chinyorwa chakanaka, chinoshanda pakukurukurirana nekusimbisa kwepfungwa dzakakosha senge gnu, linux uye openource ... izvi zvinopa ruzivo rwangu ini ndinoda kde ndosaka ndichishandisa linux
Flame vulgar senguva dzose paunonyora chimwe chinhu uye pakupedzisira izvozvi zvekare: «Rega ndifunge uye ndiite chero chandinoda, ini ndiri Windowslerdo neBorrego uye vane basa rei ...»
Kunyangwe mushandisi wemushandisi akanditengesa ... rangano !!!
Icho musoro kutungamira mushandisi-mumiririri muGoogle Chrome.
Vanhu vanoti iwe unoti "linux" kana "gnu / linux" usingatomboziva kuti tsananguro yeanoshanda system, uyai, verengai kutanga.
Uye kana ukandibvunza kuti ndeipi tsananguro yehurongwa hwekushandisa, hapana kana imwe chete, mumabhuku ini ndakawana kanokwana kana, mu wiki zvichienderana nechinyorwa chawakaverenga kana kuti mutsananguro yacho unoshandurwa mumutauro upi.
kana isu tikatora iyo yekushandisa system ndiyo kernel, linux inokunda
kana tikatora iyo inoshanda sisitimu ndiyo "pasuru" yese iyo "yavanotengesa" kwauri, ipapo ubuntu, gentoo, nezvimwe kukunda.
kana tikatora iyo yekushandisa system ndiyo kernel pamwe nezvimwe "zvakakosha" maturusi ipapo gnu / linux anokunda
uye hurukuro inogona kuenderera nariini nariini. usave sematomatiki zvekuti ndizvo zvese kana 1 kana 0, muhupenyu chaihwo panogona kuve nechokwadi chakasiyana kana nzira dzekuona zvinhu.
kubuda izvo, ndinokorokotedza munyori nekuyedza kunyora chimwe chakadai, asi vaTaliban varipo, uye havaregerere, rombo rakanaka kupindura vese vane hukasha avo vari kuzokunyorera iwe akanaka maonero ekuona asingatenderi komma yekuvafambisa 🙂
Pindura kune timu
Hupenyu munaKristu hachisi chitendero, zvitendero zvinodzokorodza uye zvinochengetedza huchenjeri hwevateveri vake, Kristu akati:
«Ndini nzira, chokwadi nehupenyu, hapana anouya kuna baba asi ndezvangu»
Johani: 14: 6
"Muchaziva chokwadi uye chokwadi chichakusunungurai" Joh: 8:32
"Nekuti Mwari wakada nyika (rudzi rwevanhu) zvekuti wakapa mwanakomana wake mumwechete, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, Asi ave neupenyu husingaperi".
Kristu anokuda, tsvaga paanogona kuwanikwa.
Pindura kuna Frank Dávila
"Ini ndadzidza kuti rusununguko rwemunhu rwuri pamusoro perusununguko rwe software" zvakanyatsotaurwa, kukwazisa
"Lima, Gunyana 23, 1984. Ndiri kutamba kupenga kuti ndingape pfungwa dzangu"
Zvinoita sekunge hauna kuwana iyo jeki maererano naOrwell.
Kuongororwa uku kuburikidza nesoftware kunogumisa kubvarura internet, uye, kana ivo vachikutarisa, inotangazve paunotangazve, uye izvo zvinoitika zvisinei nehurongwa hwekushandisa hwaunoshandisa. Rusununguko ruri muminwe yako, kwete muhurongwa hwekushandisa hwaunoshandisa.
Kana iwe uchikwanisa kuverenga kodhi, iwe unogona kuziva zvazvinoita! Kana iwe uchiziva zvazvinoita, iwe une rusununguko rwekusarudza kuishandisa kana kwete. Rusununguko IS mune iyo software iwe yaunoshandisa, kwete muzvigunwe zvangu, asi mune zvigunwe zvekuti ndiani akaronga software yacho. Sei vanhu vazhinji vachifarira kukurukura misoro ivo vasina pfungwa shoma? Pane chavanoziva nezve chirongwa?
Amai vangu, asi mhinduro isina musoro. Zvakanaka, morpheus, kudza zita rako remadunhurirwa uye utore zororo.
«Mhinduro yeupenzi» Zvakanaka, saka isu vedu vanodzivirira iyo SI havashiviriri. Kune dzimwe pfungwa dzakavharwa kupfuura windows chaidzo!
Pamwe iwe unofanirwa kutora ESO usati waisa GNU / Linux.
Handizive kuti mabudiriro akadaro anotenderwa kuburitswa sei.
Uye nezve mafungire: Zvekuvara kwemavara, uye zvemidziyo yemarara.
Rambidza vatendi XD hahaha.
Rambidza avo vasina kufambisa iyo Open Code. kwaziso kubva kuMexico.
Sewe linux mushandisi ini ndinoda yakavhurwa sosi uye zvese izvo zvinomiririra. Kunyangwe ini ndisiri kuronga, ini ndinoziva kuti yakavhurwa sosi yakafanana nemuchina wekudhinda mumazera erima.
usarwa neadiki, izvi ndezvekuwedzera kwete kupatsanura.
Eya, munyori wenyaya anoisa icho chipingaidzo pakati pe "vanonamata vanonamata" vanotsigira huzivi hweFree Software uye "vakasununguka-vakasununguka" vane "rusununguko" rwekushandisa zvakare yavo inodiwa software yekudyara.
Ini HANDINZWISISE, chii chakashata nesoftware yekutengesa, iyo yakasiyana zvakanyanya neyemuridzi, muridzi inonzwisiswa sechinhu chisingakutenderi, icho chisingatenderi iwe kana muchokwadi chichiita basa racho, handiti?
Chete basa racho? Chii chinonzi "basa rayo"? Unoziva sei kuti hapana chakaipa nazvo kana iwe usingazive zvazvinoita chaizvo?
Uye hapana munhu anoti chinhu chakashata ndechekuti ndeyekutengesa. Kune akawanda ezvokutengeserana uye emahara zvirongwa (RedHat, Suse, kana iwo andinogadzira, semuenzaniso).
- hairegi iwe uchimhanya chero kupi uye chero zvaunoda
- haikurege iwe uzive mashandiro ayo uye zvazvinoita mukati
- hairegi iwe uchigovana nayo kune chero waunoda, chero kwaunoda
- Izvo hazvikurege iwe uchichinje icho pazororo rako uye ugovane izvo zvigadziriso kune chero waunoda.
Izvo "zvakashata, zvakashata, zvechitendero" kutenda kuti IZVI HAZVIKONZESE (uye hazvifanire kunge zviri pamutemo) kushambadzira marezinesi epurogiramu esoftware?
Izvo zvakashata, zvakashata, zvechitendero "kuda kuti vamwe vanhu vaone izvi uye kuvaita kuti vaone kuti mamiriro ezvinhu aya haana kunaka sei?
Ndiani ane pfungwa dzakavharwa? Nei vashandisi vatsva vachifanira kutiza nekuda kweizvi?
Zvakanaka sezvaunotaura, ini chete ndoziva kuti kana ndikaona vanhu vakaita sewe mumugwagwa ipapo ini ndinomira padivi ndoenderera mberi nerwendo rwangu, sekunge ndanga ndichifamba nenguva yese yekugadzirisa, kuverenga kodhi nezvimwe, hahahahahaha zvakakomba, ndatenda kundifadza zuva ratopera.
Asi ini handisi kuti iwe unofanirwa kuona iyo yese kodhi.
Ini ndinoti havafanirwe kuirambidza
Zvakanaka, ivo havafanirwe kukumanikidza kuti uratidze futi, handiti?
Uye nei, semuenzaniso, varimi vechikafu "vanomanikidzwa" kuratidza izvo zvigadzirwa zvavanogadzira nazvo?
Unogona here kutengesa PC usina kuudza mutengi izvo processor uye ndangariro yainayo?
Ungatenga mota here kana iyo inogadzira ikakurambidza kuvhura kana kuigadzirisa paunoda?
Oo, uye nenzira yaunotaura izvozvo "kana ndikaona vanhu vakaita sewe mumugwagwa ipapo ndinotsvedza"
Unondifungidzira sei, segandanga reMuslim rine ngowani nepfuti nezvose? Kungoti nekuti zvinoita sekunge kodhi yemapurogiramu andinoshandisa aripo?
Vabatsiri software vaparidzi vari kuita basa ravo nemazvo vachititambudza!
Red Hat ndeye rakakura curmudgeon nezve kugovaniswa kwemahara uye / kana yakavhurwa sosi software munyika dzakaita seNorth Korea neCuba (kusanganisira iyo rubatsiro ne IRC), asi chokwadi ndechekuti makambani akaita seRed Hat seNovell ari ezvokutengeserana munzvimbo, saka unogona kusanganisira mablobs anonyanya kugadzirirwa izvo zvekutengesa.
Muchokwadi, angangoita ese ma distros ane iwo maBLOB (iwo ari muTorvalds kernel) kunze kwelinux-yakasununguka. Kana zviri izvo zvaunotaura paRedHat, zvinoratidza kuti Mahara Software haina chekuita necommunism, uye haina kupokana ne "zvinangwa zvekutengesa." SL ine hupamhi hwakawanda kupfuura software yekudyara (vemabhizimusi vanogona kutenga nekutengesa zvigadzirwa zvavanoda pasina zvirambidzo, software yemidziyo haigone)
YEMAHARA YAKASIYANA NEMAHARA, ndeipi imwe nzira yekutsanangura izvo?
Murombo Stallman neChirungu !!
Carlos Zayas akadaro
Zvekutengesa software hazvina kufanana nechero software. Yemahara software inogona zvakare kuve yekutengesa. Proprietary software ndeimwe inotadzisa imwe kana inopfuura yerusununguko rwune: kushandisa, kugadzirisa, kugovera uye kugadzirisa software. Iko kune software yekudyara iyo inogona kushandiswa uye kugoverwa mahara, asi hapana inogona kugadziridzwa zvakasununguka kana kuvandudzwa, nekuti nekuda kweizvozvo iwe ungazoda kodhi yekodhi.
Pindura Carlos Zayas
Ndizvozvo, shamwari yangu, iyi huru bluff iyo yavakaisa pamwechete kwechinyorwa icho chandinobvuma kwazvo ndicho chinhu chechinhu chinoita kuti vashandisi veLinux varambe vachitiza, kunyangwe GNU iri pamberi kana kwete.
Chinhu chakanyanya kushata pamusoro pevateveri ndechekuti havana pfungwa yekuseka ...
dai linux chaive chitendero, zvirokwazvo chaisazove mazviri, zvichipiwa kusatenda kwangu kuna Mwari uye zvakanaka, mirairo yeSIGIUcious inonzwisisika.
Kusvikira iye pakupedzisira ataura chimwe chinhu chiri fanboy chaizvo Fran, chii chakaitika kwaari? ndiani akamurova? kana ini ndinoteedzera kupi izvi? Handifunge kuti wakambofunga nezvazvo ... xD yatonyatso taura zvakanyatsonaka!
Kutumidza mazita emhuka dzinobuda nhasi GNU / linux zvinoita kunge kunondimukira, ndosaka ndichipedzisira ndavadaidza kuti Linux chete (kunze kwaDebian) ... ndine hurombo kune vanonatsa vanoda kuziva basa raStallman ... asi Ini handidi kuwedzera izwi GNU ku distros iyo nekumisikidza inounza DRM, mafafitera uye mabhuru akavharwa kana kukuita iwe "mazano ekutengeserana" (euphemism yeadware).
1) TESE TIRI VARANDA NESIMBA SEZVAKANAKA SEWE KANA NDIRI. Iye muranda wezvaanofunga, iye muranda pamaonero ake, iye muranda wetsika dzake, iye muranda wetsika dzake. Stallman (senge chero mumwe mukuru), zvese zvaanoita zvinoita kuti uranda hwepfungwa nekuchinja hunhu asi asinga bvise izvo, izvo zvinogadzira rimwe boka rine imwe nzira. Rusununguko rwechokwadi rwuripo mukufunga neinopfuura imwe pfungwa uye nekuzvipikisa nekusingaperi asi pasina kurasa nzira nekuti izvo zvisiri zvemitemo imwe ndeyechokwadi kune imwe. Gurus inofanirwa kuurawa.
2) Imwe nzira yeuranda zvinodiwa. Wakamboona piramidhi raMaslow? Zvinodiwa nemurume wega wega zvakakamurwa muzvikamu zvishanu uye kupedzisa chikamu, ese epasi matanho anofanira kupedzwa. Kana rusununguko ruri pamusoro pepiramidhi (uchifungidzira kuti rusununguko rwunotungamira kumufaro), saka zvido zvese iketani. Asi kune mamwe maketani ayo, kana akadamburwa, anouraya munhu (iwo edanho rekutanga, zvinodiwa zvemuviri). Naizvozvo, pfungwa yekuti "rusununguko haruna ngetani" inodonha nekuda kwezvandinotaura.
Ngatiregei kutaura nezverusununguko. Ngatitaurei nezve kutsamira.
"Tinofanira kuuraya gurus" ndiani anoti? Chirevo ichi hachiite senge "guru" kwauri here?
Zvikanzi nemunhu anga asiri kutsvaga vateveri. Zarathustra.
@Tina Toledo kuisa +1 mu3, 2, 1 ...
Ini ndinobvuma kwazvo, ini ndinotenda mukusununguka kugarisana kwemahara software nepropetiary software pane yangu Linux.
Hapana munhu akasununguka .. sevanhu .. chokwadi chekuva vanhu (uye tichitenda kuti tinogona kupokana nepfungwa dzekutanga dzekupona) chinoita kuti tivharirwe mudenderedzwa irori (zvirokwazvo nemamwe misiyano)
Asi izvo zvemahara software zvinokarakadza ndeye munhu asi akanaka ... chokwadi ... chakatenderedza iwo huzivi nharaunda dzakagadzirwa uko kunyangwe hazvo dzese dzakaita kunge zombies dzichiti "ndakasununguka ndakasununguka" (ivo vakagara pamba pakombuta zuva rese. "Zvinoshamisa") tinoziva kuti vamwe vedu tinogona kuvimbwa navo.
Kuti nharaunda ine simba rekusada (kanenge kwete 100%) makambani ane nyota yemari nesimba.
Kuti isu tinogona kuyedza kuvimba .. munyika ino nyowani uko .. tekinoroji neinternet zvave kusvetuka kukuru muhupenyu .. .. zvirinani tinogona kuvimba (kana hafu) kuti kune vanhu vanozviita nemoyo wese vasingade ndinotarisira kuti tibudise chimwe chinhu mukudzoka .. dai zvisiri chokwadi chiri nyore chekuda kubatsira vamwe .. akanaka kwazvo ..
Uye uzivi hwakakosha .. nekuti itsika .. nyika inoenderana netsika .. ..
Tingaendepi tisina tsika yatinayo ... tinoda kusununguka kunyangwe iri paInternet asi ndine chokwadi chekuti haisi internet chete ... kuti avo vedu vanotsvaga vanobatanawo vamwe vedu varume ... vanokwanisa kubatsira mumwe pasina chero chinhu chinodzosera .. icho chikamu cheedu mararamiro .. kunyangwe iwo ari makomputa nenhamba chete .. ivo vakaita sekuwedzeredzwa kwevakawanda vedu uye zvakajairika kuti isu tinotsvaga dzidzora zvakanaka .. asi ipapo isu tinofanirwa kuve vechokwadi uye kwete kutaura zvinhu senge «Ini ndakasununguka .. izvozvi ndinoshandisa linux» »uye ndinoswera zuva rese pakombuta ndichiregeredza mhuri, kana zviitiko zveupenyu izvo zvingatifadze (kunze kune avo vanoshanda pane izvi ... kunyangwe vari programmers kana vamwe ... unoita vane chikonzero xD)
Pindura kune zyxx
Ini ndinofunga kuti mune dzimwe ndima iwe unokanganisa rusununguko rwemunhu nerusununguko rwekusarudza muhurongwa hwekushandisa.
Pfupiso kune avo vasingade kuverenga zvakanyanya: Yemahara software inoratidza yakawanda mikana nemhando dzakasiyana dzekugadzira uye ndizvo chaizvo zvinonakidza.
Kana chimwe chinhu icho chemahara software chinotsanangudza chiri chaicho chitsva software yekugadzira system. Iyi sisitimu (yakazvimiririra-inochengetwa uye inochengetwa nevakagadziri pachavo) yakafukidzwa nemabatiro anoita mamwe makambani mhando yerudzi urwu, asi ichokwadiwo kuti makambani mamwe chete aya akachinjira kumashandiro ainoita nenzira iyi. Izvo hazvireve kuti vanomira kuve capitalists, nekuti yavo yekugadzira system yakafanana uye kuti software yacho "yakasununguka" inonyanya kurara pakuti iripo kune chero munhu kuti atore nekugadzirisa.
Kana iwe ukatarisa pamhando dzekugadzira dzinopesana nehurombo, ivo vanozoona mune yemahara software nzira yakanaka yekuita iyo system iyo ivo pachavo yavanofunga (ine grey tones, hongu) uye kuti ivo vakaedza vasina kubudirira kuita pane imwe nguva munhoroondo. ( Kunyangwe iwe uchifanira kuenda kune XNUMXth century kuti uone izvo, pamwe). Imwe yemafungiro ekutanga emhando idzi anopesana nehurombo / neoliberalism (zvakatorwa zvachose kubva kuruboshwe) zvinoratidza kuti kana avo vanoshanda vatora maturusi ebasa uye nesarudzo dzekuti voita sei navo, "ecosystem" inobudirira kuita zvirinani, rusununguko rwakakura rwevanhu vanoshanda kuzviita (rusununguko hazvireve husimbe) uye nekudaro maitiro ese achange ari nani (kusanganisira kuti hauzongozviita nekuti ibasa rako, asi nekuti unozvida, chinhu chakakosha musoftware yemahara uye kuti tinokwanisa kurarama zuva nezuva pane ino peji uye ndinofungidzira kuti ndiwe nekukurudzira kwangu kugovana aya mazwi).
Ini ndinobvuma 100% kuti yemahara software haisi chitendero uye haifanire kunge iri, asi zviverengero zvakaita saRichard Stallman anotadza, uyo nezvakanaka nezvakaipa zvake asingatambe zvakanyanya mukumufarira kana tichiedza kunzwisisa kuti mahara software inogona kutamba sei basa rakakosha muhupenyu hwevanhu, richikurudzira kwete chete kuburikidza nesoftware, asi zvakare kuva muenzaniso mupenyu wemhando dzakasiyana dzekugadzira (nezvose zvakanaka nezvakaipa zvazvinazvo). Nguva dzose iwo manhamba anofukidza mamwe ese haazotiunzira chero chinhu chakanaka, chero divi. Kazhinji, simba rakawanda rinowira mumashoko kana zviito zvavo, nekuti kune vazhinji vedu vanogona kuvapo padanho rakakura kana shoma.
Zvamunotaura nezve vanhu vanoshanda mushe basa pamwe neemahara software ichokwadi chaizvo, asi handizive kana vari vazhinji vanogona kutaura izvozvo. Tarisa pane chero repamhepo saiti kuti uone kuti mangani mapurojekiti ehukama anoitwa nerudzi X munzvimbo yeY, pasina vanopa kana ne1 kana 2. Iyo zvakare iri yemahara software, asi isina mwenje senge kernel kana chero hombe chirongwa. Pamwe uine hushoma hwepasirese zvakare, asi pamwe nesimba rakasimba renzvimbo (kana iwe uine, unogona kufungidzira kuti chakasimba sei chishandiso chakagadzirwa nemukomana makore mashanu gare gare pane imwe nzvimbo yakasarudzika inogona kuva).
Nyaya yemahara software haina chekuita nechitendero (mupfungwa yekutenda kuna mwari), asi nezvematongerwo enyika. Kuve nekutarisisa kwakaringana, zvakaringana kufamba nemifungo yakakosha yesocialism (sezvo uchibva kuSpain, ndinofunga unofanirwa kuve pachena kuti iyo PSOE haisi socialism, ndoda iyo yechiRussia, Chinese, nezvimwewo zviedzo zviri zvichibva pane yakachena uye capitalist bani kushandisa State kuita chinangwa chayo) kuwana akawanda akawanda ma nuances ekuti mahara software inoratidzira imwe pfungwa yezvematongerwo enyika (kana zvirinani, inozviita, pasina kufunga zvakanyanya nezve izvo zvematongerwo enyika. is, asi chii chakanakira vanhu). Nehurombo mumaonero angu, ndinofunga kuti pachine kusanzwisisika pachikamu cheavo vazhinji vanobatanidzwa kuti zvinhu izvi zvine hukama, pamwe nekuda kwekuoma kwakaita maonero ese uye nekuda kwekufungidzira kunogona kuvapo pamativi ese, asi tarisa kwete kumberi.ndivapi avo vakatsigira mahara software uye anti-surveillance marongero uye iwe unozoona zvatiri kutaura nezvazvo.
Kwaziso. Makorokoto nekuratidzira uku uye ndinovimba vanowanzoitika! Ndine urombo nekuwedzera kwangu.
Bravo! Unogona kutaura zvakakwira, asi kwete kujekesa.
Ungave une moyo munyoro sekutsanangura mutongo uyu: «Zvakakomba, zvakakomba zvikanganiso. Linux haizi uzivi, zvirinani kwete zvekare, muenzaniso wakajeka ndiyo nhamba yemakambani zvakare ane zvivakwa zvekudyara uye anoshandisa Linux yezvavanoda, senge Oracle, AMD, Nvidia, Steam, Intel, IBM…. »? Ini handinzwisise nharo dzako.
Zviripachena kuti Linux haisi uzivi, iri OS, zvisinei, kana iine hwaro husingadzivisike hwouzivi. Philosophy hachisi chinhu chauinacho kana kwete, huzivi chinzvimbo, kududzirwa kwechokwadi. Pasina kuziva kwako, iwe uri kutochengetedza chinzvimbo chefilosofi, iyo inonzi "utilitarianism."
Uye, ndapota, usavhiringidze huzivi nechitendero, hakungavi nezvimwe zvinhu zvinopesana.
Zvinoenderana nezvinonzwisiswa neumwe neumwe "linux", mukati mechinyakare ipakeji (GNU / LINUX / DISTRO) kana zvinoreva munhu, mugadziri wake,
Zvinotaridza kwandiri kuti fsf ine chinzvimbo chakatsanangurwa, maererano nechimwe chirevo cheyakajairika mamiriro, ayo anoenderana nezvinangwa zvakafanana, unogona kufunga pfungwa yefilosofi, yega yega distro ine mamwe mafirita kana nhungamiro, kune izvo zvinzvimbo, isu unogona kufunga «mafilosofi».
Asi zvese zvinoenderana nezvinorehwa nemashoko kune rimwe nerimwe
Alberto Aru akadaro
Ichokwadi kuti yega yega distro inewo uzivi hwayo, asi isu tiri kutaura nezvekushandiswa kwesoftware kubva pamaonero emushandisi, semuenzaniso ini ndiri kushandisa manjaro, iyo inouya nemapurogiramu epamba uye kunze kwekungopenya, ndinofunga ini don Handina chero zvirongwa zvekuva nazvo izvozvi nekuti ndanga ndichiita yekuchenesa.
Pindura kuna Alberto Aru
Zvinenge zvakanaka kana zvese zvaive zvemahara, asi izvozvi mamiriro acho haana kudaro, pane yakanaka kwazvo yemahara software yezvimwe zvinhu, asi mune dzimwe nzvimbo, uko software inodhura chaizvo uye inodikanwa, iri eral, hapana yakaenzana uye yekambani yakanaka kwazvo uye kune vanhu vanofanirwa kuishandisa; (.
Nekuti pane iyo imwe, iwe unoziva mune chimwe chinhu, iwe unoshandisa yakawandisa nguva yehupenyu hwako, uye iwe unotevera imwe nhanho yekufunga, yakagadzirirwa mufilosofi, uye dambudziko rinomuka, unorovedza seizvo zvauri, kana kushandisa muridzi software, iyo iwe yauri kuzove yekutsaurira yakawandisa nguva yehupenyu hwako kune vamwe kuti vabudirire iyo uye kuti ive yakawanda kana kushoma inoshanda. kana iwe unosara kumashure uchiona munhu wese achipfuura iwe wosara kumberi kumashure.
Zvichida iyo yakazara adobe suite inodhura, asi pamwe iyo yakazara suite yakawedzeredzwa nekaverengeka nguva haina kukwana for a application module, yeinorambidzwa zvakanyanya kushandiswa, kana kuti, kwete zvekushandisa kwese uko kunogona kukupa iwe mukana wakakura, nezve vaviri . Asi iwe uchafanirwa kushandisa yakawanda nguva (zvakaita sekubhadhara mutero, mangani mazuva egore andinofanira kushanda kubhadhara nyika) uye ndeye yakasarudzika (nekuti ini handina mukana wekubhainari), ini ' ll kupisa muMS gehena.
Zvirinyore kuona tsanga yejecha iri kure kupfuura gomo riri pamberi pako. Vanhu vakaita saStalman vanodikanwa, asi nyika pachayo haina kunaka. uye vazhinji vevanhu vane hutsinye uye vanozvida kupfuura avhareji nepakati. Runyararo nerudo ndezvekuti iwe uve nevana, kana iwe unofanirwa kugogodza pamikova yakawanda yebasa kana simba rako rekutenga rinokwira.
Kana ndiine nguva ndinonyora kodhi yese yandinogona, ndinoinyora uye ndoigovana, ndinoedza kubatsira muhupenyu chaihwo uye chaihwo. asi handigoni kurega kushandisa hofisi, handikwanise kusiya mahwindo, zvichingodaro, zvimwe zvakawanda, uye zvizhinji zvacho hazvisi nekuti ndinozvida, asi nekuti zviri nyore, (zvinondisiya ndiine nguva yakawanda yekuita husimbe uye nyora kodhi).
Pa peji rePidgin rekutora pane bhatani rekutora mugadziri uyo anoti "Dzimwe Linux" ...
… MuMozilla Forefox ikholamu yekurodha inotungamirwa nemusoro unoti «Linux»….
… Mu Muy Linux ndinoona chinyorwa chine musoro unoti «SyncDrive, mutengi nyowani weGoogle Drive weLinux anoonekwa panzvimbo»
Icho chokwadi chekuti iyo Pidgin uye Firefox vanoisa vanoti chete Linux, panzvimbo yeGNU / Linux, inoita mafaera asingashande? Chinyorwa chakanyorwa naMetalByte hachishande nekuti mumusoro wayo chinozivisa kuti SyncDrive ndeyeLinux panzvimbo yeGNU / Linux?
Hapana chakafanana nekunyora musoro wenyaya uchitaura kuti Linux hachisi chinamato zvekuti maZadokites ivo pachavo vauye kuzopokana fomu: "Kumhura! Mune Torah yedu inoti GNU / Linux… saka GNU / Linux inofanira kuva! »
"Hakuna kumwe kududzirwa kunofanira kupihwa, nekuti izvozvo zvinokanganisa vanhu ..." vanodaro.
Ndakatopinda mune zvehunyanzvi kubvira ikozvino pavanondidaidza Toledo handichatendeuki kuti ndione ... hazvina basa kuti ndini ndega Toledo munzvimbo iyoyo uye zvinonzwisiswa kuti ndezve ini.Chikonzero? Zvakanaka, baba vangu ndiToledo, mukoma wangu ndiToledo, hama dzangu naivo vari Toledo. Hazvina basa kuti ndini ndega ndiripo munzvimbo iyoyo, kana vasingandishevedze kuti Argentina Toledo uye handizotendeuka kuti ndione ...
Iwe unonyatsotenda here kuti 99.9% yevaridzi vevashandisi ve software vanofarira kuverenga maOOD macodhi avakaisa pane maPC avo? Iwe unonyatsofunga kuti inyaya inokushungurudza iwe kana uine mamwe matambudziko akakosha, ekuti vagadzirise?
Kusvika riini ivo pavachaona kuti rezenisi rekushandisa sisitimu yekushandisa ingori chimwe chigadzirwa senge chero chinhu?
Ini ndaona kuti vanoisa mienzaniso yakakombama zvekuti yega vanowira:
1.- Ungatenga mota inongotenderera mune imwe nharaunda uye yausingakwanise kuteedzera pane zvaunofarira here? Kubva pakutanga, ndiani akakuudza kuti mota zvakasununguka kwatinonzwa kuda kwayo? Ndine Van yandisina kumboshandisa kwemwedzi, nei? nekuti iye yankee uye ini handigone kufamba ndakasununguka naye kuMexico kunze kwekunge ndamugadza munyika ino.
Ndakazvigadzirisa here? Hongu. Asi ini ndakazviita pamwero wakaenzana newangu Windows, nekuti injini, kana ndikaichinja, ndinofanira kuita mamwe maitiro epamutemo ekuzivisa kuti injini yekare haisisiri yangu uye kuti ikozvino ndine imwe, saka zvinoreva kuti uvandudze kadhi rekunyora nekuti iyi, ine serial nhamba yeinjini yekare, haichashandi kwandiri. Maitiro aya ane mutengo. Pasina kutaura nezve chassis ...
Ah, asi ini ndinogona kuitengesa! Chokwadi, asi pandinoitengesa, mota haisisiri yangu ... ini handisisina kodzero dzayo. Kunge Windows yangu.
Ehe, muridzi mutsva anofanirwa kuenda kunoudza vemo traffic department kuti mota ine injini serial xxxxxx uye ine chassis nemuviri serial nhamba yyyyyy ikozvino ndeyake uye haisisiri yangu.
Asi ... mira! Ini ndinogona kutora mota yangu kune auto auto makanika uye ndokumukumbira kuti aiongorore uye vagadzire imwe yakafanana nayo. Pekupedzisira ndine mota iyo mukuwedzera pakuve yakafanana neye yapfuura iri nani ... ini ndinongova nedambudziko hombe: ini ndoda injini, chassis nemuviri kuti ndive nenhamba yavo ye serial kuti ndikwanise kutenderera ne mota zviri pamutemo nekuti ndisina marezinesi. Ini handikwanise kana kusvika kukona ndisina kuwana faindi uye pamwe kutosungwa nekutadza kuratidza kwakatangira mota yangu. Zvakafanana neWindows yangu.
2.-Iyo yekugadzira iyo yakagadzira imba yangu yakanditengesera mapurani ekuvaka, nokudaro ndeangu uye ndinogona kuateedzera nekuapa kune chero wandinoda.
Hongu, ichokwadi. Chete pane chimwe chinhu chandisingafunge nezvacho, zvirongwa zvacho hazvisi chete akateedzana madhayagiramu uye kuvaka uye zvivakwa dhizaini, iwo zvakare gwaro repamutemo rakasainwa nenyanzvi iyo rezinesi rehunyanzvi rinomutendera zviri pamutemo kutora basa rezvematongerwo enyika kune yakaipa masisitimu ekuverenga. Asi pamusoro pezvo, iwo marongero akafanana haandishandire kuti ndivake kana ndikasatsvaga gwaro rekuvaka pamberi pemaspala, dunhu kana masimba anowirirana ... uye ndizvo chaizvo izvo izvo zvirongwa zvakasaina nenyanzvi zvinondishandira.
Chiremera chinondipa mvumo uye chinochengeta kopi yeaya mapurani.Kana mumwe munhu akaedza kukumbira mvumo nyowani yekuvaka pane imwe nzvimbo, iwo mapurani haachagamuchirwa. Asi nei? Zvakareruka uye zvakapusa nekuti iyo nyanzvi yakasaina mapurani inogona kuve nemhosva chete kune imwechete kuvaka uye nekudaro siginicha yake haigone kuwedzerwa kana kushanda kune mamwe kesi.
Ikozve kune maviri chete sarudzo ... kwete kushandisa iwo marongero kana kuda iyo nyanzvi uye kumubhadharira zvakare kuti aite zviri pamutemo zvirongwa zvakare neimwe fem.
Pandev uye vamwe blogger. Pamusoroi kana izvo zvandanyora zviri kunze kwenzvimbo kana zvisingawirirane nepfungwa ichaitwa ... asi chokwadi ndechekuti ini ndaida kuzvitaura.
TIna, nekukurumidza kana elav kana nano, ivo vachipfuura, ivo vanogamuchira komendi ehehe, xdd sezvo iine zvakawanda zvinongedzo, iri kumirira kubvumidzwa.
Rukudzo rwangu kuna Tina rwekupa ipfupi software modelling kirasi (kunyangwe kana chete kuburikidza nemaanalogies). Chokwadi ndechekuti kana munhu asingazive ekuvandudza mamodheru esoftware modelling, uyezve kana iri yemahara software, akawanda masuo achakuzarurira iwe uye iwe unobva watonzwisisa kuti yega yega software inogadzirwa sei zvichibva pane yekuburitsa kutenderera. Kwete zvekunakidzwa, avo vanopa mitsara yavo yekodhi kuti vasunungure uye / kana yakavhurwa sosi software vari chikamu chayo, asi ivo zvakare vanodzidza kuti software inogadzirwa sei chaizvo.
Izvo hazvisi zvefilosofi chete, asi ndezvekuziva zvikonzero uye zvimwe zvikonzero zvaungave usingazive, asi iyo yemahara software iri nani pane proprietary software, imhaka yekuti inokutendera iwe kuve chikamu chayo uye haikusiyanise iwe se software inobata.
Hapana munhu anobvunza kuti vashandisi vevashandisi ve software vanofanirwa kufarira "kuverenga macode", ndeyekuti avo vashoma vedu vanofarira HAVANA PANGOZI YOKUITIRA.
Mumuenzaniso 1 wemota: Zvinorambidzwa zvauri kutaura nezvazvo NDIMAMBO MITEMO yenharaunda yaunogara KWETE ZVINOGONESESWA ZVEMUGADZIRI. Hazvina kufanana newaunoda Windows:
- Iwe haugone kugadzirisa windows ako, ingochinja zvimwe «zvishongedzo»
- HAUGONI KUZVITENGESA kumahwindo ako, iwe wakatenga USE LICENSE chete pakombuta yako.
- HAUGONI KUZARURA mamhepo ako kuti makanika aongorore
- Unogona kushandura injini yako nekuimisa zviri pamutemo pasina mvumo yemugadziri, ako windows NO.
Muenzaniso 2 wezano:
- Iwe une zvirongwa uye iwe unoziva izvo zvine imba yako
- Unogona kuishandisa kuvaka yakafanana imba (iine nyowani, siginecha, kubvumidza, kana chero chinhu, asi haina chekuita nemuvaki weimba)
- Havagone kukutengesera imba "yakavharwa", zvichikurambidza kuziva kuti inovakwa sei
Kutaurwa kwakanaka, asi nekudzivirira zano iwe unovawo muranda kwariri, hazvidzivirike, ndiye munhu wenyama.
Chaizvoizvo, izvozvi Pandev ari kuita muranda weuzivi hwake xD
Murombo taku akadaro
Chinhu chega chinochinyorwa ichi ndechekuti linux kernel haisi chitendero (icho dai chaivepo, chaizoda makore mazhinji ekudzidza kuti vatange kunzwisisa). Ini handina zano rekuti ndeapi magwaro ezvemahara software zvawakaverengera zvinosuwisa kuti funganisa pfungwa dzeGNU, iyo kernel uye yemahara software, ndiri kukuona uchironga iyo c uchituka compiler nekuti haina kunzwisisa bash miraira bareback.
Ndine tarisiro kwazvo, ndinoda kufungidzira nyika yatisingatarise simba redu pane zvido zvedu, patiri vese programmers.
Nekuti mune rakaperera nyika ivo programmers vatongi vedu, iwe unogamuchira zvirongwa zvakaitwa nevamwe, kana iwe unozvigamuchira.
Kunze kwekunge iwe waive programmer, iwe waizogadzirisa iyo sosi kodhi kana kuvaka yako yega chirongwa. Uye ini ndinofunga izvo zvidiki zvidiki zveruzivo rwevanhu sekugadzira zvirongwa zvine mukana wekuchinja nyika. Ndokusaka kuwanikwa kwekodhi yekodhi kuchikoshawo kwandiri.
Ini ndinotenda kuti sevanhu vakasununguka, chinhu chehunhu ndechekuti zviito zvedu zvinotarisana nekuvimbisa rusununguko rwevamwe, nekuti ndipo pandinoona kururamisira.
Ruramisiro inoratidzika kwandiri seinokosha kukosha kupfuura rusununguko.
Kuti pave nerusununguko rwechokwadi munharaunda, chisungo chevanhu vese kutsvaga mamiriro ezvinhu kuti munhu asununguke, sekupa sekugamuchira kwaunogamuchira, kugovana mazano, kudzidzisa mashandiro ezvinhu (inenge Linux inokudzidzisa, Chokwadi, mumwe anochidzidza nekuverenga)
Handiyedze kuzvitungamira nehupenyu hwezuva nezuva, nezvakakosha Ini ndinogara ndichirerekera kune chakanakira. Dai ndisina kutungamira zviito zvangu kune zvandinofunga, ndingadai ndiri mukupesana kukuru.
Ndosaka ndichigara ndichiedza yemahara software mune yayo chaiyo chiyero, nekuti zvinoita sekunge kwandiri kuti ndizvo zvinowanzo tenderera kune zvakanaka.
Isaac LA akadaro
Pindura kuna Isaac LA
Zvinotaridza sekusarongeka kwandiri kuti maonero av pandev92 "anokosheswa sei" (mushure mezvose, iyo tag inoti OPINION ipapo).
Iyo inonakidza maonero ekufunga, pamwe anga asingazive maitiro akanaka uye nekudaro discords asi, uyai, iri blog rakafanana netafura ine makapu ekofi uko munhu wese anofumura mazano avo, pfungwa, pfungwa dzekuona, nezvimwe. . uye muite nharo navo, makadzikama, sevakuru.
Nezve kudaidza iyo OS GNU / Linux, ndinoiwana yakawandisa (pamwe risiri iro zita chairo) fanboyism kuidaidza iyo GNU / Linux uye kwete Linux chete, semuenzaniso, ini ndinonzwisisa pandinonzwa Linux kuti iri OS yakaumbwa neaya zvikamu zviviri Zvisinei neicho chikamu cheimwe nechimwe, zvese zviri zviviri zvakakosha pakutanga kusvika kune izvozvi. Kuti kana, zvirinani iwe unofanirwa kujekesa neimwe nzira (kazhinji kudzivirira mabonfire) ayo anokuudza iwe matauriro avanoti ichagara iri GNU / Linux (nehunyanzvi kutaura). Uye kunyangwe iri iri rakakomba blog, kuchine rusununguko rwekuti akuudze chero zvaunoda, iwe unoziva zvazviri uye izvo zvakakwana, nenzira imwecheteyo, GNU haitsakatike nekuda kwekukanganisa kuri nyore (izvo zvisiri ) saizvozvo. Kunyangwe pandev92, sununguka kudzivisa izvi uye utaure kuti iri GNU / Linux asi iwe unoti Linux nekuti chokwadi, kunyangwe ini, ini ndaneta nekutsimbirira shif + GNU + shif + / + L + inux pese pandinoda kuzvitaura XD ...
Chandiri kujekesa ndechekuti ini handidi uye handinzwe kugadzikana nehunhu hwakatorwa nevanhu vazhinji vanoteedzera "x" kana "y" uzivi. Uye hazvina kushata kuti vanozvidzivirira, asi chinhu chimwe kudzivirira uye imwe kurwisa, handiti?
Semuenzaniso, shamwari yangu (yemahara software yakanyanyisa mumaonero angu) anoshandisa Linux (ndine urombo, asi ndinoda kutaura izvozvo) uye ini ndaishandisa Windows panguva iyoyo, akanditarisa nemaziso embudzi yakatemwa nematombo ndokuudza ini kuti ndaive benzi rekumira kusununguka uye kundiita muranda muWindows. Zvisineyi, "chiiko chaicho? Mahara? Ini ndakasununguka, zvishoma zvangu kutonga" ndakadaro. Uye ndinorevei neizvi? Ini handina kugona kufumura nharo kana mazano, asi ini ndaida kutsanangura zvakanyanya kana kushoma izvi:
"Chero hurongwa hwaunoshandisa, chero zvaunofunga, tenda zvaunotenda kana kuda zvandiri kufarira, ndaigara ndakasununguka zvinoenderana nehungwaru hwangu, zvinova ndizvo zvinonyatso kuudza zvandiri." Mune ino kesi, huzivi hwangu (kana imwe nzira yangu yekuona hupenyu, ndinoziva pfungwa yacho inosiyana asi kwete iyo pfungwa yacho pachayo, ndinofunga) haisi yekuzviita nhapwa neimwe nzira kunze kwekunge ichidikanwa uye haidi kuti ive kumanikidzwa. » (Ndinoziva kuti haina kunyanya kukosha uye zvinhu, asi huzivi haisi sutu yangu yakasimba, nekuda kwechikonzero ichocho, ndinodzivirira kuwira mumatambudziko uye kuyedza kuva muranda akasununguka sezvinobvira).
Uye zvechokwadi, ini ndiri semi-ndinoziva mamongi emakambani, matambudziko nekukanganisa kwevamwe vamwe, uye nezvezvimwe zvinhu izvo, kunyangwe zvisingandibate zvakanyanya, ndinoziva kuti vazhinji vanoita uye zvakadzika kwazvo nzira (sekuwanda kwekunyaradza nyaradzo yako pabasa uye kunyange kuzvinyima nyaradzo iyoyo.
Ini handizive kana Photoshop muenzaniso wakanaka, kune vanogadzira graphic vachishandisa Linux, chero munhu anoti “ahh, asi kune GIMP, Krita, Inkscape, nezvimwe. anozvinyima ", asi ko kana iye akasununguka muLinux yake yaanoda? Chii chaanogona kuita iye?, Chinja kuWindows kana achida (nenzira, ndinofunga mumashoko chingave chinhu chakadai "kuzvimanikidza kuti arege basa achizvidira"), saka ndivanaani vedu vatinodzivisa rusununguko rwake kuti ruve nhapwa uye shandisa Windows yega ne Photoshop kuti zvive nyore kwauri? Rusununguko rwakakwana haruwanikwi kwandiri, rwakafanana nekuva miriwo kuti usauraye mhuka uye nokudaro kuremekedza hupenyu, kuuraya zvirimwa.
Idzi nyaya dzerusununguko dzakanyanya kundinetsa uye ndinozvinyima kudzidza zvakawanda, zvakanaka, ndinogutsikana nezvandinofunga sezvo nenzira imwechete yandinofunga kuti hupenyu hwangu hungave hwakavhiringidza kutsvaga rusununguko pane kunzvenga uranda.
Kudzokera kunongedzo, ndinobvumirana nezvakawanda zvezvakatumirwa, nemapoinzi akati wandei uye kunyanya kuti kusiya zvese izvo zvisingabatsiri zvehungwaru addons (ndinoreva vanhu vakaipa, extremisms) yemahara kana yakavhurwa sosi software, Linux hausi mweya wepasi uye mushandisi anoshandisa Hofisi semuenzaniso haafanire kuturikwa obva auya kumba kuzoshandisa LibreOffice ... Mushure mezvose, hapana chinoitwa nekukurukura maawa gumi kana mumaminitsi makumi matatu Debian yakaiswa uye munguva pfupi iwe unoona kuti hauna kufa nezvazvo.
Pakupera kwezuva, zvakare, ndinoziva akasununguka kunyange kusaremekedza, asi izvo zvingave kuva muranda kune yakaipa uzivi. Mune maonero angu akajeka.
Ndine urombo nekutaura kureba zvakadaro, pamwe haina chinhu, pamwe haina, asi ndiyo yangu yekutanga kutaura kukuru pane desdelinux uye ndakafara.
Ichokwadi ndechekuti ini handibvumirane nezvakawanda zvezvinhu zvaunotaura. Ongororo yako haina hukasha munzira dzakawanda.
Ini ndinongoda kuratidza chimwe chinhu: vashandisi veLinux vanofanirwa kuve vese vachipesana nekusarongeka uye, nekudaro, vachipesana nemhando yezvehupfumi hwenyika.
Uye mumwe munhu anoshandisa ubuntu anozvitaura, iyo distro iyo inopa simba kuCanonical kambani. Nenzira, chokwadi chekuti linuxers vanoshandisa gnu / linux hazvireve kuti ivo vanogovana gnu uzivi (iwe unongofanirwa kuona iyo Pandev chinyorwa). Uye kubva ipapo kugovana zvematongerwo enyika-hupfumi ideology kune HUGE kutambanudza.
Kubuntu kuve yakakosha, iyo yakafanana asi haina kufanana. Ini ndinoshandisa zvakare nyoro yekutengesa kana zvichikosha kwandiri. Asi ndosaka ndichiguma ndataura kuti zvinhu zvakadero uye hazvigone kuchinjwa. Pane zvinopesana, ini ndakauya kusununguka software chaizvo nekuti ini ndinorwira shanduko uye zvinoita kwandiri kunge chishandiso chakanaka, kunze kwekunzwa chikamu chenharaunda yepasirese iyo, zvinopesana nezvinotaurwa naLinus, yakasunga hutsinye hwese uye kuzvimiririra kune iyo system ambotijairira here.
Munguva pfupi yapfuura pave nezvimwe zvinyorwa zvine pfungwa dzakafanana. Ini ndinotenda kuti Linux pachayo mudziyo. Izvo zvine uzivi pachako hazvisi linux, asi yemahara software. Ndinobvumirana nezvimwe zvezvinhu zvawataura. Ichokwadi kuti kugadzira yemahara software mune yazvino hupfumi modhi yakaoma kune mudiki mugadziri. Asi zvinodikanwa kuti uchinje iyo yemhando yezvemari yezvimwe zvikonzero, yemahara software ndeimwezve! Ini handibvumirani nekutaura "Ndozvazviri, nguva, kana usingaifarire, unozvimonera." Zvakanaka, kana ndisingazvide zvirinani ndinogona kutaura kuti handizvide.
Ini ndinoremekedza maonero ako, asi ini ndinozviona neimwe nzira kutenderera. Mushure memazana matanhatu emakore ekushandisa Linux, ini ndinoishandisa nezvikonzero zvefilosofi (kana chero chaunoda kuitumidza). Ehe zvinhu zvakawanda zvingave zviri nyore kwandiri kana ndikaramba ndichishandisa windows, asi kune izvo ZVIKONZERO (isa chero zita raunoda), ndafunga kushandisa Linux uye yemahara software yezvose. Izvo zvinondifungira kuti ndinofanira kudzidza ndichienderera uye rimwe dambudziko; mukudzoka, ndinofunga kuti mhedzisiro yacho yakanyatsoita uye ndinofara neni. Ndokunge, kana ndichifanira kushandisa MSOffice, HANDICHAZVIWEDZESA, uye ini ndichaona kuti ndozvitsiva sei. Ehezve, inongova pfungwa chete.
Pfungwa 1: OLE
Pfungwa 2: chii chaunoshandisa panzvimbo pechiedza? Ini handikwanise kuzvibvisa:
Ndine urombo, Adobe flash *
Ehe: GNU Gnash. Chinhu chakashata chete ndechekuti haina kuvhura ese mabhenji ekushambadza ayo anobuda, kuwedzera kune iwo akawanda mapeji ewebhu akagadzirwa kumucheto kwekupenya haavhure nenzira kwayo, mukuwedzera, inoshandisa zviwanikwa zvakawanda kupfuura Adobe Flash Player pachayo.
Ini ndinotenda kuti matambudziko edu-mazhinji- aine flash ane mazuva avo akaverengwa. Nepo isu tine kumwe kutambura kwasara.
Icho hachisi chitendero, asi seri kwayo chine uzivi.
Shure kwayo kune zviuru zvemafilosofi akasiyana, izvo zvausingakwanise kuti "izvi ndizvo, uye avo vanofunga zvakasiyana neni, vanoenda padanda", inzira yekushandisa, uko yega yega inobatsirwa nenzira yavo.
Ini ndakatanga Linux nekuda kuziva angangoita makore manomwe nehafu apfuura uye izvo zvaunotaura ichokwadi setembere.
Ndinoyeuka apo Stallman akabvunzwa nezve kuvhurwa kweSteam yeLinux, uye kunyangwe aisada zano (kunyanya nekuda kwenyaya ye DRM, iyo yandinogovera mune iyi kesi) kunyangwe akazoti "zvirinani haushandise Windows"
Kunyangwe ndichigovana rusununguko rwune rweFree Software uye ini ndinozvidzivirira, kana ndichifanira kushandisa software yepamutemo, kungave nekuda kwekudikanwa kana nekuti ini ndoda, senge iyo NVIDIA kana Steam madhiraivha zvichiteerana.
Ehe, pane rimwe boka rechitatu muLinux, uye ndeavo vanoti Linux inofanirwa kushandiswa chete nevehunyanzvi mune chikamu, mayunivhesiti, nezvimwe, kwete nevashandisi ve desktop (sezvatinowanzo danwa)
T Shake akadaro
"Zvinosuruvarisa munyika chaiye, pfungwa yekuti software chigadzirwa ichiripo, uye kune mari yekushandisa software iyi, tingave tichida kana kwete, asi uyu ndiwo muenzaniso watinogara"
Muchirevo ichocho iwe wakanganisa izvo vazhinji vanoita, uchienzanisa yemahara software neemahara software. Haasi ese emahara software yemahara, kunyange hazvo mazhinji ari, uye haazi ese emahara software yemahara.
Nezve iyo posvo kazhinji, ndinofanira kutaura kuti ndinobvuma kuti munhu wese anoshandisa zvavanoda nguva dzose (ini, semuenzaniso, shandisa Windows uye GNU / Linux).
Iniwo ndinofunga kuti nyaya yerusununguko yakavhiringika. Ichokwadi kuti kana iwe uri munhu anofarira chimwe chinhu uye ukaedza kugonesa mumwe munhu nezve izvo VANOFANIRA kushandisa, tiri kuvamanikidzawo, asi proprietary software inotadzisa mashandisiro aunogona kuzvipa, zvichikutadzisa, semuenzaniso, kubva kukurudzira icho kune mumwe munhu uye kuva iwe unogona "kuchipfuudza" icho.
"Zvichida mumwe munhu angauya kuzotora kodhi, oivandudza, uye chishandiso chako chingakunda chepakutanga, nesimba shoma"
Pano iwe unosiya parutivi avo vese vanhu vanogona kubatsira kuvandudza bugs kana iko kushanda mune zvakawandisa nekutenda nekukwanisa kuwana iyo sosi kodhi.
Muchidimbu, uye nguva dzose mumaonero angu, kuti yega yega inoshandisa zvavanoda zvakanyanya uye zvavanoda nguva dzese, asi zvakare iyo software yekudyara inotitadzisa kana zvasvika pakuita zvatinoda.
Mhoroi, nerukudzo rukuru, ndinotaurira shamwari yakatumira izvi, VERENGA ZVAKAWANDA NEZVEMAHARA SOFTWARE, usanyora nechiropa chako, wakasununguka kusarudza zvaunoda.
Linux ndiyo kernel GNU / Linux ndicho chinhu chaicho chekuita (mapakeji pamwe nekernel)
Radicals kune rimwe divi, ndinokuyeuchidza kuti yemahara software inovakwa, vanozvipa rezinesi uye vanoita kuti vamwe vanhu vaishandise Uye KANA VAWANA KUTI VANOSHANDISA (zvinovashandira), chipo chinoitwa, ndiwo mararamire emahara mapurojekiti, vanogadzira shandisa izvo zvavanovaka uye vanotsigira hunyanzvi kumakambani uye NDIZVO ZVINOGARA KWAVO, hapana anofa nenzara kunze kwekunge, sehusimbe, vanovamirira kuti vagogogodza pamasuo avo vasina kuratidza chero chinhu chezvavanogona kuita. Isu tese tinoshandisa microsoft software uye yemahara sw neimwe nzira, nekuti tinoshanda munzvimbo dzakasiyana uye kwete wese munhu anofunga sesu, semuenzaniso ndine zvandinoda zvemahara sw, ini ndinoenderana nezviripo uye kana chimwe chinhu chisingashande kwandiri ini edza kuzvigadzirisa neizvo Pane magwaro pane makuru eprojekiti saiti uye nharaunda rubatsiro, ini ndinodzidza uye kushandisa GNU / Linux uye BSD mashandiro masystem, ini ndadzidzawo kuronga webhu kunyorera uye kubva kune izvo ini ndinorarama ndichinyanya kushandisa yemahara software uye ini don 'Handizvirumbidze kuti ndinoshandisa izvi izvo, handitaure zvakanyanya semunhu anonyanyisa, asi kana mumwe munhu achifarira ndinotaura navo izvo zvinodiwa, ndinoedza kupa mhinduro ndichishandisa tekinoroji yemahara, maneja maseva ane GNU / Linux uye BSD ( FreeBSD, OpenBSD uye NetBSD) Ndinozviona zvichibatsira uye handisi KUZVIPA uye HANDIKWEMUTSVANE, ndine zvandinoda uye rudo rwemahara sw, ndinofarira dzimwe nzira dzekufunga pavanoti tekinoroji inoenderana ne sw haifanire kunge iri yakavharwa, isu tinofanirwa kuverenga zvakawanda nezve GPL uye BSD marezinesi tisati tanyorachero chinhu, muchidimbu iwe uri kutaura chokwadi asi iwe uri kunyanyisa.
Ini ndinofunga kuti kana tichifanira kukumbira ruregerero rwemahara software uye veto proprietary software kusvika padanho remikana yedu. Asi pasina kuzvidzora. Ini handifunge kuti zvine utsinye kuve nekuisa Steam yekukanda mashoma mashoma, zvinosuwisa kuti mapros gamers haana kupihwa yemahara iyo inoita iyo idiki diki mumvuri kune ma greats evaraidzo ekuvaraidza.
Mune ino kesi, ndiyo hurongwa hwehupfumi hwakatemerwa pakutengesa iyo yakavharwa-sosi mutambo. Iyo capitalism uye inogadzira mamirioni epundutso. Iko hakuna kukwana zviwanikwa mune chero Linux chirongwa chinokwanisa kukwikwidza neBlizzard, semuenzaniso.
Chinyorwa chakanaka kwazvo uye chichaunza gakava, nemvumo yako ndinoikopa uye ndinoiburitsa papeji rangu (nezvikwereti zvako zvechokwadi). Pfungwa ndeyekuti munhu wese anopa zvinoenderana nezviitiko zvavo uye kwete kwavo kwekunyanyisa
Ini ndinonyanya kuziva nezvakanyorwa, zvinosuwisa kuti ini ndichiri nezvirongwa kubva kubazi rangu rekurapa zvinongoshanda paWindows nemakambani akazviita havana kuda kuti ndiite imwe yeLinux, saka ndinofanira kuishandisa mune iyo OS, hongu kana hongu .
Zvikasadaro, ini ndinoda GNU / Linux.
Kune nzira dzakawanda dzekuwana mari, imwe nzira yekuita kuti software yako izarure uye kuitengesa ndeyekuisa kodhi yekodhi uye kutengesa chirongwa chakanyorwa: kana iwe uchiziva kuumbiridza iyo yemahara uye kana zvisiri, kwete. Izvo zvandisiri kuzoita kupinda muhondo ye "ndiani anosiya yakachipa software".
Asi kana paine software yemahara, tora mukana wacho pese paunogona. Ini ndinobvumirana nenyaya yekuti munhu wese akasununguka kuita chero chinobuda kubva mumabhora avo nekombuta yavo, ini pachangu handina kukwanisa kubvisa flash (ine gnash uye lightpark hazvina kundifambira zvakanaka), uye ndinodya Facebook uye google + (ndiyo imwe, iwe unogona zvakare kuita mari nekushambadzira). Nekudaro, kana iwe uine mahara uye mahara software ine zvakafanana maficha kana zvirinani pane izvo zvinopihwa neyako proprietary software (uye chenjera kuti handisi kutaura chero chinhu nezve "Ini ndinogona kuita izvi nacho" kuti uite mabhesiki iwe aunogona kurarama neiyo software yemahara, kunyangwe iine flash).
Gnu ishamwari yako uye seshamwari iye aripo kuti akutsigire uye akubatsire munzira chero yaanogona. Uye hei, kana isu tichigona kubatsira nharaunda nemapurogiramu mazhinji uye kugadzirisa, wadii kuzviita?
Zviripachena munyika yangu ine udyire, ini ndichabatsira kuchirongwa icho chinondibatsira ini pachangu.
Ndicho icho chinhu chake xD ini handitarisiri kuti utange kugadzira kodhi yechikumbiro chiri muRussia XD chete
makomendi avv92 "Kana ini ndakadzidza chero chinhu mumakore apfuura, ndechekuti chokwadi chinoenderana nedivi raunotarisa, uye kuti hapana mumwe wedu anaro zvizere" uyezve anoenderera mberi nechokwadi Chake, chizere nekuvhiringidzika, relativism nemitsara .
Chokwadi chakandishamisa nekuzvitutumadza uye kuzvitutumadza kwawaipa mutongi chokwadi chako.
Hazvishamise parizvino, vanozvitutumadza izvozvi vanotaura nezverusununguko nedemokrasi, asi zvavo chete.
Pandev92 ichakuyeuchidza iwe kuti gnu / linux iri KUGADZANA kwete Makwikwi.Zvaizonaka kana ukajekesa pfungwa dzako.Kana iwe uchiri kufunga kuti egoism ndiyo injini inoita kuti vanhu vafambire mberi, chichava chokwadi chako, uye yakaderera mamiriro ekuziva , uko kuzvitutira kurudyi.
Pindura kune vivaldis
Kana iwe wazvitaura, iyo ndiyo mafungiro e gnu, iyo openource inoshanda zvakanyanya, pane kungori kufunga.
Pane iko kuzvitutumadza kurudyi, zvirinani kukura uye kurega kusanganisa churra hwai nemerino hwai.
Kana iwe usingazive kuti iwe une kodzero kupi kana kupi iwe kuruboshwe, idambudziko rako pandev92.
Uyezve chikamu chakanyanya kushata ndechekuti iwe unoshandisa ubuntu uye iwe unotaura nezvechishuwo chekugovana nenharaunda, sekunge kuti icho change chiri chinhu chekanganiki chine hanya nazvo. Kana iwe ukashandisa trisquel kana gnusense, ini ndaigamuchira zvaunotaura, asi nenzira iyi, iwe unongoita kunge mumwe mumwe munyengeri, wakahwanda pasi pekhibhodi.
Uye chii chine chekuita nekushandisa Ubuntu kutaura nezve Kugovana? Ini ndinofunga wakakanganisa ipapo shamwari, nekuti sekutaura kwako kuti unoshandisa Linux, Windows kana OS X nezvikonzero zvakasiyana, Vivaldis inogona kunge iine zvikonzero zvakafanana, kana zvikonzero zvakasiyana zvekushandisa Ubuntu, uye kwete nekuda kwechikonzero ichocho tevera ideology, uzivi kana zviito zveCanonical.
Ini handisi kukanganisa, kuti uve mudziviriri weiyo gnu uzivi, haugone kushandisa chimwe chinhu chisingaenderane nehuzivi uhu, hunyengeri kwazvo. Ini handisi mudziviriri wazvo uye haundione ndichishandisa gnu pfungwa kana trisquel.
Dzimwe nguva hazvigoneke kuve 100% GNU izvo hazvireve kuti uri kupokana nehumambo, ini ndiri mushandisi weDebian, asi kwenguva yakareba ndakazviwana ndiri mukuda kwekushandisa distro iyo yakanditorera nguva shoma yekuisa (I shandisa iso net install, kwete ini ndichaenda mune zvakadzama kana nhaurirano nezve izvi kana kuti nei ndisina kutora imwe iso ... blah blah) poindi ndeyekuti ini ndinoshandisa Trisquel, asi yangu isina waya network kadhi haishande, saka ini ndaive kurodha mutyairi, kuumbiridza uye kurodha ne startup script Nekudaro, yangu Lap haisi 100% Yemahara asi nekuti HD yangu haina Mahara, yakafanana nevakawanda vePachivande, saka zvirinani kuMexico hatina tsika yeFree HD, isu tichiri kunze kwekuve 100% Mahara, izvo hazvisi Zvinoreva kuti vashandisi veTrisquel vane madhiraivha anoshanda seni, ngative vanyengeri.
Kukanganisa kwemunwe: "IZVI HAZVIREVEDZE KUTI HAUSI UNOPESANA NESIMBA"
Uye zvechokwadi, ndoda, enda nemweya wepamusoro, kana asiri iye munhu arikutonga, achizvitenda semudziviriri wegnu, zvino zvinobva zvaratidza kuti kunyange iyeye munhu haaite zvaanotaura.
Kuti utonge vamwe, zvirinani kuti iwe uite zvaunotaura, zvikasadaro, uri kutambura nechinhu chinonzi huviri kufunga uye:
Murume ane mwoyo miviri anoshanduka-shanduka munzira dzake dzose
Zvakanaka, ini ndaizoshandura iwo mameseji ako tux zvaunotaura, nekuti vese vanoti GNU / Linux
Uye iwe unofunga kuti vazhinji veavo vanoshandisa GNU / Linux vari kuzoshandisa iyo GNU / Linux-Libre kernel? Zvakanaka, ini handifunge kudaro nekuti ivo vane AMD / ATI uye / kana NVIDIA Hardware ine Broadcom.
Pano haisi nyaya yehukuru kana mashandisiro. Ini ndinoshandisa "isina-yemahara" kernel uye izvozvi ndiri kushandisa windows (inodikanwa).
Zvichitaurwa zviri nyore, iyo sisitimu inonzi GNU / Linux, kwete nekuti ndirikudaro, asi nekuti IZVI ZVINO (inotaura zvakajeka muTux icon) uye kune rimwe boka rinoshora kuzvidza huzivi hweGNU, kwete chete chokwadi yekuibvisa pazita, asi kumarudzi ese emakomendi anotsamwisa ("anotsigira chokwadi", "anonamata") achipesana, pasina kana kuziva nezvezvinhu zvakakosha semusiyano uripo pakati peusununguko uye wakasununguka.
Ini handitonge avo vanoshandisa proprietary software (ini ndiri mune imwe nzira mumwe wavo) asi kuzvidza "kwemahara uzivi", asi ini zvakare ndinoziva kuti idzi pfungwa dzekuvhiringidza ne "communism" kana "hugandanga" kana zvinhu zve maitiro acho ANOSIMBISWA neane simba rezvivakwa software kuburikidza nenhau.
Izvo zvinonyadzisa kuti blog yakatsaurirwa kumatopiki ane chekuita neLinux kernel (iine kana isina gnu) seiyi inozivisa zvisizvo zvakanyanya nerudzi urwu rwechinyorwa.
Hatisi "kumanikidza" chero chinhu, isu tinoedza kuzivisa.
Tsitsi kuti meseji haina kunzwisiswa
Uye avo vakagadzira Ubuntu, Red Hat uye mamwe ma distros asingaise GNU / Linux pairi, havana kuzviisa seizvi nekuti vaida kudaro? Kwete, nekuti muzviitiko zvakawanda havanzwirane nehunyanzvi hweFSF, uye nekudaro, havaziise.
Ini handisi kureva chaizvo kune huzivi, asi kazhinji, fomu yazvino yeavo vanodzivirira iyo GNU / Linux kernel vanozviita vasina kufunga nezveuzivi hweFSF, saka iyo FSF yakazivisa iyo distros inoshandisa iyo Linux-sununguka tsanga uye kwete iyo Trovals kernel nekuda kwenyaya yeblog.
Ini ndakagadzirira kuisa Parabola GNU / Linux-Libre nekuti yangu Hardware inokwanisa kumhanya iyo kernel pasina matambudziko.
Iyo ndeye yemahara software inobvumidza izvo. Kana ndichida, ndinogona kutora linux kernel, kuishandura uye kuigovera zvakare se morpheoOS.
Ubuntu, Red Hat nevamwe vanogona kuita chero chavanoda: "Open office" yakashandiswa kugadzira "Libre Office", MySQL yakashandiswa kugadzira MariaDB, iyo Linux kernel inoshandiswa, kugadzira Android, ini ndinoshandisa MariaDB neJQuery kuita yangu zvirongwa, nezvimwe. Ndosaka ndichienda kunodaidza kuti Myprogram / JQuery. Iyo iMyprogram, nei ichisimbisa chikamu chimwe chete?
Uye isu hatizive kuti makambani aya anonzwira tsitsi kana kwete neFSF, izvo hazvina basa.
Dambudziko nderekuregeredza nemaune kwevakagadzira sangano iri ratiri kubatsirikana naro, iro rinonzi GNU. Linux ingori kernel, iyo yakapedzwa pamberi peHURD (asi makore gumi mushure mekuzvarwa kweGNU) uye iine rimwe zita "rinobata", hapana chimwezve.
Ndine virtualized trisquel, kureva kuti, chero ane muromo anonzi ruzha. Iwe unofunga kuti iwe unogona kumisikidza chokwadi uye kuchichinjazve icho kune kuravira kweanodzora whims.
Zvakanaka, ini handina kukanganisa, ndinoona kuti unozvitsanangura semunhu akasununguka, uye zvinoratidza, mafungiro ako efilosofi anonhuwa neakasununguka akasununguka, uye iwo mavara awakanyora anonzwika senge KUVIMBISA kodhi.
Ini ndiri wekupedzisira mushandisi we gnu / linux, uye ini ndinoona zvakanaka kubva kune zvakaipa, chimwe chinhu icho iwe, neako kwepfungwa relativisms, iwe zvausingazive.
Ini handinzwisise zvinovaka pamusoro pechinyorwa chino ... Uye kuti zvinobvumidzwa sei kutsikisa zvinyorwa zvine mhando yakaderera kudaro ... Chokwadi chinhu chimwe chakaitwa: mumaawa asingasviki gumi ine zvirevo zvakawanda nemaonero. ..
Kune yangu chikamu iwe warasikirwa muverengi. Kudzima RSS ...
Iwe wakasununguka kuita chero chaunoda xphnx. Takazvitaura kane chiuru uye zvinonetesa: Sezvo Linux isiri pandev, haisi nano, haisi elav, haisi KZKG ^ Gaara, kana vamwe vese vanoshanda pano. Kana iwe uchizviona iwe pachako: bye! Unogona kudzoka pese paunoda.
Zvinotaridza kwandiri kuti ndiyo troll imwechete yandaive ndataura mune imwe posvo, asi neimwe alias. Kana ndikamuwana muTaringa, Fayerwayer uye / kana muplp.cl, ndinomukwazisa uye nyaya yacho yagadziriswa.
@elav Ichokwadi, asi aya marudzi ezvinyorwa anoderedza zvakanyanya mhando yeblog. Zvinonyadzisa
Tarisa uone linuxquestions.org, sezvo isu tiri kunyatso kuyedza kuita zvatinogona kuti tigadzirise.
Chii? Chinyorwa chimwe chete chinokuvadza mhando yeblog rese? Ndinoreva, iyi posvo imwechete inoita kuti vamwe vanhuwe zvinoenderana neizvozvo, kana, hazvo, ndinogona kusanzwisisa uye ndiri kuzvidzivirira, asi chero zvakadaro, kune mumwe kana vaviri vashandisi vanosiya kuverenga iyo blog, haife kana kutsakatika.
Handizive kuti sei ndichitaura izvi kana pasina chinoshanduka, asi zvakadaro, ndinoda kutaura kudaro….
Enda, pakupedzisira uyo anorasikirwa ndemumwe nekuti iyi blog yakanaka kwazvo, chakanakisa chiripo uye ndinokukorokotedzai imi varume, kwete munhu wese anoita chirongwa chakadai. Ziva kuti zvirinani ini ndiri mushandisi anogutsikana, maziso angu akagamuchirwa nemufaro pa blog.desdelinux.net 😉…
Ini handisi kuzosiya kuverenga iyo blog, ini ndinongofunga, ndoizvo zvakataurwa, nekuti ini ndinofunga izvo zvakati wandei zvinyorwa zvichangoburwa:
Panzvimbo pekupa zvakanaka, vanotaura zvisirizvo uye vanovhiringidza misoro yakakosha kwazvo yeblog (ingoverenga zita rekuti "Ngatishandisei Linux kuti TISunungure") vanovhiringidza RUSUNUNGUKO nerupo, ivo vanoparadzanisa "rusununguko rwekusarudza" kubva parusununguko rwekusarudza kuziva izvo isu zvatinosarudza maererano nesoftware uye ivo vanorwisa kufamba kwakapa ino yakakosha shanduko iyo yemahara software.
Ndiyo nzira yako yekutenda, pamwe ari pachokwadi uye maonero ake akasiyana zvachose neako, kwandiri handizvione saizvozvo, asi, pamberi peichi chinetso, chii chingaitwe? Kushambadza (mu iyi nyaya, izwi rekuti "kurudyi" rinokwana zvirinani) maonero ake, asi zvakadaro, ndakaverenga zvinyorwa zvinoverengeka zvandisina kuwana uye chakanakisa chandingaite kusava nehanya navo (handirangarire kuti ndeapi, nekuti ini ndakavarega).
Zvisinei, uye nehutsinye, isu tinosiya kana isu togara uye izvo tichifungidzira zvakanaka nezvakaipa zvinhu.
Kukumbira humwe hunhu hwenzvimbo blog yatove yakawandisa kubvunza, uye zvakadaro, zvinoita zvazvinogona.
Ndo izvo zvinotsoropodzwa pandev92 pamusoro pechiso, kupfuura kusashivirira uye kuzvitutumadza, iwo mafungiro eruvengo kana kushora (uye ini handisi kuti ndiwe, nekuti maonero ako anonzwisisika kubva pachinzvimbo chako). Saka ndiregerere kana ndikazvidzivirira kana ini ndisinganzwisise zvakanyanya sevamwe vese.
Iwe unofanirwa kutora zvinhu zvakadzikama.
Zvakanaka morpheus, iwe une chairo pane peji rekutanga, pazasi pezvinyorwa, pager iyo inokutora iwe kuverengwa kweakanyanya kufarira. Iwe unogona zvakare kushandisa maTag uye Mapato .. 😉
Zvinhu zvipi. Icho chinyorwa chemafungiro icho chisingayedze kudzidzisa chero chinhu uye chiri pachena, chete kuti vamwe vakatanga kuchikanganisa nematauriro avo. Ini ndinoti, kana vasingazvifarire, uye kana vachibvumidzwa pane ino blog, nei vasingagaro "vatuki" vanyora chinyorwa chakanaka, tione kuti vanozviita sei.
Artemio Nyeredzi akadaro
Kana pasina sarudzo, saka hapana rusununguko.
Izvo zvinotaurwa nevazhinji gnu / linuxers ndezvekuti hapana rusununguko. Ipa gnu / linuxers mukana uye ivo vanokwanisa kubvisa software yekutengesa, nekuti ivo vane yekugadzirisa pairi. Ivo havakwanise kuona kana pamwe havanzwisise kukosha kwechokwadi kwerusununguko, sezvo tiine sarudzo yekuve nekuparadzirwa kweLinux pakombuta yedu, kubva panguva iyoyo, yega yega, ndinopedzisira ndaita software yekutengesa.
Nekudaro, ini ndinogara ndichida kugona kusarudza kuti ndodzokera here kune yekutengesa software pasirese, nekuti ini ndoda kusununguka kuzviita.
Ini chaizvo handiteerere zvakanyanya kune gnu / linuxers. Vanoti iyo software inofanirwa kuve yakasununguka kuishandura paunoda; vanobva vanyunyuta nekuti ichi kana kuti kugovera kuri kufamba kubva kuGNOME kuenda kuUNITY kana kuKDE kana chero; Saka kupihwa kwacho hakuna kusununguka kushandisa chero software yavanofarira ?; Nei vachinyunyuta, ivo havana kusununguka kushandisa kumwe kugovera kana, vachikundikana izvo, kuzvishandura pamadiro?
Nei uchifunga nezveboka re gnu / linuxers, avo vanoto gunun'una nezve shanduko yeiyo Wallpaper mune yekugovera.
Pindura kuna Artemio Estrella
Red Hat ikambani iyo SELLS iyo Red Hat Enterprise Linux inoshanda sisitimu, iri zvachose "yekutengesa software" uye zvakare "YEMAHARA". Red Hat inotengeswa pachena.
Ini ndiri programmer uye NDINOTENGESA iyo software yandinoita asi ine rezinesi pasi peGPL (iri YEMAHARA zvachose uye ndinoshandisawo maharaibhurari emahara), ndichiendesa kodhi yekodhi pamwe neiyo bhanari (kazhinji ini ndinoshanda nemitauro yakadudzirwa, saka hapana akadaro mabhinari), kuti mutengi wangu aite naye zvaari kuda nekuti ZVAKE, IZVO ZVAKANAKA. Semupurogiramu, handifunge kuti ndine kodzero yekuvanza mashandiro emapurogiramu angu kubva kuvashandisi vangu.
Izvo hazvina chekuita neizvi kana iyo software iri yekutengesa kana kwete, asi kana iri YEMAHARA kana YEMAHARA
Iwe wakasununguka kuita chero chaunoti iwe ita uye vako vatengi vakasununguka kusarudza zvaunoita.
Saka kupi iyo "yakawanda gnu / linuxers yakaratidza, ndeyekuti hapana rusununguko"?
Icho hachisi chinamato, asi, kunyangwe ini ndichishandisa windows pazvinhu zvinodikanwa zvakanyanya, kana ini ndichiishandisa imo nekuti kune mafomu asipo mu linux kana ari mashoma kuwana, saka, sekureba sekushandiswa kwemahwindo kuri ichiri kukurudzirwa, hakuzovi neaya ekunyorera linux.
Ndokunge, kana usinga dzivirire sisitimu yekushandisa, masimba makuru acharamba ari pamusoro payo, zvinoita sekunge ini ndagadzira sisitimu yekushandisa uye ndoti: Asi windows yakanaka kwazvo, eh ine zvinhu zvinoitwa nehurongwa hwangu hwekushandisa. kwete.
Ipapo hapana anoshandisa sisitimu yangu, iwe unofanirwa kusimudzira Linux kuti inokodzera.
Chaizvoizvo. Zvakanyatsotsanangurwa uye zvine hungwaru.
Imwe chete dhata yange isipo, mumaonero angu, yakakosha.
Vanhu vazhinji, vazhinji, havagone kuwana komputa nekuti havakwanise kubhadhara chirongwa kana rezinesi nekuti ivo vanodhura chaizvo. Nekudaro, GNU / Linux inoita kuti zvinhu zvive nyore kwavari. Iwe unoziva zvese zvinogona kuitwa pakombuta uye kuti dai GNU / Linux yanga isipo, haigone kuitwa nekuda kwemari? Kune vanhu vasingakwanise kutenga komputa, asi zvakadaro vane musoro wakajeka kuti unyatsoishandisa.
Ini handishandisi GNU / Linux chaizvo nekuda kwenyaya yemari. Ini ndinoishandisa nekuti ndinoifarira, nekuti mashandiro ayo anoshanda, nekuda kweiyo terminal, nekuda kweKDE, uye chiuru zvimwe zvinhu ... asi kwete chaizvo nekuti iri yemahara, ndiko kuti, hachisi chikonzero changu chikuru 😉
M'ijo, dambudziko harisi iro chairo mari, asi munzira iyo munhu achazoshandisa software. Ini ndinoshandisa GNU / Linux kuitira zvirinani pandinenge ndichishanda nepurogiramu, kubvisa malware eUSB uye kurodha pasi mafaera kubva kucyberlockers uye zvinoshanda zvinoshamisa, uyezve ini handifanirwe kubhadhara antivirus yekutanga nekuti Microsoft inoshanda sisitimu yakawanda yekushandisa uye ineni yakasungirirwa kumashandisirwo avo epamhepo ekugadzirisa zvemultimedia zvemukati.
Zvakadaro, ini ndinoshandisa Windows (nditende, ndinoshandisa Windows Vista SP2 uye inoshanda kwazvo) nekuti ini handikwanise kujaira software seGIMP, Inkscape uye / kana Scribus.
Ini ndinobvumirana nezvose zvaunotaura mune ino komendi, asi senge iwe, ini ndinodawo kujekesa imwe pfungwa: @Pandev -uye ndakanganisa kuti anondiruramisa- hapana nguva yaanotaura kuti kuvapo kweGNU / Linux kwakaipa uye paunotaura kuti kubva nhasi GNU / Linux haisi uzivi, wataura chokwadi. Zvisinei, mazwi aPandev haarambe kuti mukati meGNU / Linux hapana huzivi hwazvino uye zano rezvematongerwo enyika rekuchinja.
Hapana munhu anopokana kuti GNU yakazvarwa sepolitiki / chirongwa chemagariro - zveshuwa inotsigirwa neuzivi, zvikasadaro zano racho rinenge risina maturo- asi nanhasi, uye nechinangwa, chirevo ichocho chakapfuurwa. Kana tikaverenga zvese zvakataurwa, vazhinji vedu tinotaura kuti tinoshandisa GNU / Linux kunakirwa, hapana chimwezve. Kunyangwe vazhinji vedu hatitombobvumirana - kune chikuru kana chidiki - naVaStallman.
Izvi zvinoreva here kuti isu hatifarire kuvepo chaiko kwesangano reGNU / Linux? AIHWA. Zvakapesana. Zvakanaka kuti kune vanhu vanoita chimwe chinhu kuti vabatsire nzanga, asi izvo vazhinji vedu tinobvunza itsika. Ndine chokwadi chekuti, semubato ripi neripi remagariro, pane radicals uye moderates uye chaizvo Pandev yekudai inoenda kune iyo chikamu chakakura, kwete kune iyo GNU / Linux kufamba kwacho.
Kutendeseka, zvinoita sekunge ini ndakawandisa kubvunza Pandev kungoita zvechisikigo, zvinoita musiyano upi kutaura -kana kunyora, mune ino kesi- Linux kana GNU / Linux apo isu tese tiri pano tatoziva zvazviri? Kana kuti ndezvekuti GNU / Linux haigone kudaidzwa, nenzira yakajairika, Linux, uye kuti pfungwa yacho inonzwisiswa, sezvo izwi rekuti "Linux" risingapihwe roga asi mukati mepfungwa yemafungiro? Zvinotaridza kwandiri kuti pane nyaya inobvunza radicalism, iwo mafungiro andinofanira kumbofungidzira kudzivirira zano ndee kunyanyisa.
Zvinotaridza kwandiri kuti kufamba kweGNU kunofanirwa kufungisisa nezvechinzvimbo chayo uye, pamwe, kunyangwe chikamu chemashure ayo nekuti nhasi, kwanhasi, GNU / Linux haichamiriri vazhinji vedu, vashandisi vayo, zvakafanana nezvavo. Muenzaniso weiyi ndeye pragmatism yeCanonical iyo OS iri, pasina mubvunzo, inonyanya kufarirwa uye ine huwandu hukuru hwevashandisi munyika yeGNU / Linux. Ehezve, izvi kufunga kuti isu tinowirirana nemifungo yedu nezviito zvedu, nekuti ini handigoni kuwana chirevo chinobviswa pachisungo chaStallman pane "... iyi haisi democracy." Nekudaro, kunyangwe hazvo iyo Canonical isiri democracy, yaunza iyo GNU / Linux chikumbiro padyo padyo nemurume nemukadzi mumugwagwa.
Uye, ndapota, pfungwa pano kwete kuvhura gakava pamusoro pekuti kana Canonical inofuratira vashandisi vayo kana kuti kana kwete kana iyo inotora chibvumirano chebhizimusi kusanganisira kushambadza uye / kana kumiririra zvisirizvo zvevashandisi vayo. Kwete. Iyo poindi ndeyekuti iyo yekumisikidza iyo yaive genesis yeGNU haichashande kune ese eGNU / Linux. Uye izvi ndizvo zvatinofanira kufunga.
Tina anopa zvine mutsindo kubata kune izvo zvandanyora xdd, ndinoshuva dai ndaive shasha pakutsanangura eheheh!
Kunyangwe ini ndisingazive kana zvandanyora nezvenyaya imwecheteyo zvakanyorwa zvakanaka kana kwete, asi zvirinani ndanga ndichichenjerera nematauriro angu.
Pasina iyi yekuisa muenzaniso ndinobvumirana naPandev LOL
Chinangwa cheGNU chaisafanira kuve chakanakisa OS, kana kushandiswa nemunhu wese, asi kusimudzira huzivi hwayo. Zvinosuruvarisa kuti "ruzhinji rwevashandisi vayo" havazvinzwisise.
Ini ndinonzwa neizvozvo "izvo zvirevo zvaive genesis yeGNU hazvichashande."
Zuva rega rega zvinhu zvinoonekwa zvinoratidza kuti Stallman anga achitaura chokwadi nezve "malicious" (NDINODZORA, ndinoshatisa SOFTWARE, kwete avo vanoishandisa, avo ndivo vanobatwa). Wakambonzwa nezve Snowden neNSA?
Zvakawanda chirevo chekuti "Stallman anga achitaura chokwadi" anodzokororwa.
Ivo vanofanirwa kufungisisa nezvechinzvimbo vamwe.
Iye zvino kupfuura nakare kose isu tinofanira kuedza kusununguka kupfuura nakare kose.
Ndave nenguva ndichiziva kuti Stallman aive akarurama. Muchokwadi, kana iwe ukaverenga iwo mamiriro uye mamiriro eiyo proprietary software (inosanganisira Google Chrome), iwe unozoona kuti neimwe nzira iwe haugone kudzoreredza mainjiniya eChromium forogo kana ayo akavakirwa-mukati ekuwedzera (kusanganisira Pepper Flash).
Iye zvino, kuitira kuti vanhu vasazvinetse kuverenga izvo uye / kana kuona kuti ndezvipi zvingasarudzika zvakavanzika zvemasocial network senge Facebook uye / kana Twitter vane (kusanganisira chikamu chemugadziri chemasocial network), imwe ichapihwa ziva kuti yakapusa sei kutadza padivi uye kunyoresa neruzhinji.
Kuedza kuivaka hazvina kukwana 😀 ngatishandisei zvatinazvo kuvaka matekinoroji emahara zvishoma nezvishoma, makambani eFreeSoft anogona kuita mari, kushandisa programmers vanodawo mabasa nekupa mhuri dzavo chikafu.
Morpheus, usabvisa mutongo wangu kunze kwechimiro, ndapota. Ini handisati ndambotaura "izvo zvirevo zvaive izvo genesis yeGNU hazvichashande", zvandiri kutaura ndezvekuti "izvo zvirevo zvaive genesis yeGNU hazvichashande ZVESE GNU / Linux."
Zvino chindiudza icho hachisi chokwadi.
Stallman pachake anofumura zvikonzero nei Android isingakwanise kutariswa seOS iri yeGNU / Linux.
Ini handizobvunze kana wakarurama kuti ufunge nezve izvo, asi kana ndikakwanisa kuzvibvunza kuti mangani maOS, ayo nhasi anoonekwa sechikamu cheGNU / Linux, ane hunhu hwakachena kuti hutariswe mukati mechikamu cheGNU / Linux? Ndiani uye pasi pemiyero ipi vanoongorora mwero wekuchena kweOS kuti ikwane mukati mezvakarongwa? Kukosha kweichi "chidiki" kana "chikuru" cheGNU geneti kodhi kunoiswa pasi pechinhui.
Zvandinofunga ndezvekuti pakupedzisira iyo GNU / Linux nyika ichaguma mukukanganisa uye mushandisi weLinux Mint, semuenzaniso, inozopedzisira yoshandisa Linux OS, isina GNU, sezvo Android yava kuiswa muchikamu.
Zvinotaridzika kwandiri semuenzaniso wakazara weManichaeism kutaura kuti zvese zvakaora muDenmark, handibvumirane nezvinosimbiswa naM Mirlo, semuenzaniso: zvinhu hazvisi chete nhema uye chena. Haisi hondo yengirozi yekurwisa madhimoni.
Kufunga seizvi kwakafanana nekuda kupedza hurombo nekuuraya vapfumi nezve chokwadi chiri nyore che "kufunga" kuti hupfumi hwakafanana nehuipi nemakaro uye kuti saka vapfumi vese vakaipa. Software rese repamhepo rakashata kudaro? Isoftware yese inobatsira zvechokwadi mukusora here? Uye tinoziva sei kuti agency Snowden yaakashandira haina kushandisa GNU / Linux software sechishandiso chekushora vamwe?
Morpheus, kana chinangwa chekupedzisira cheGNU chiri kusimudzira huzivi uye kwete kutsvaga kuve yakanakisa uye inonyanya kushandiswa software, saka chii chinonzi praxis yayo? Ko pfungwa dzisingaoneki dzeuzivi uhwu dzinobatana sei neicho chaichoicho?
Zvinoita sekunge kwandiri kuti iyo GNU inosimudzira shanduko yehana uye izvo zvinoita kunge zvakakwana kwandiri, asi shanduko yakadai zvishoma iyo yainogona kuita kuisa munzvimbo dzakakomba senge kunze kwedu zvese zvakashata uye zvese zvatinotaura zvakanaka. Ini handina chokwadi nezvakanaka zveStallman, uye handipokane vavariro dzakanaka dzeSnowden ... asi handivimbe uye handifarire hurukuro nenzvimbo dzinongotaura nezvezvakanaka zvadzo pasina kufunga nezvezvakaipa. Ndiko demagoguery.
Uye chii chinoshandura iyo "YEMAHARA GNU / Linux"?
Handifunge kuti kune nyika mbiri dzeGNU / Linux. Kune rimwe ruoko iyo GNU uye kune imwe iyo Linux? Iko kupatsanurwa kunoitwa newe.
Android haishandisi GNU software. Vagadziri veGNU vanoziva mapurogiramu avakaita, uye ivo vanoziva kana vari pachirongwa.
Uye tinoziva sei kuti agency Snowden yaakashandira haina kushandisa GNU / Linux software sechishandiso chekushora vamwe?
Nekuti tinokwanisa kuverenga iyo kodhi !!!
Kuti ruzhinji rwevashandisi havazive maitiro ekuronga hazvireve kuti isu vedu vanoziva vanogona kuiongorora voona zvainoita kana kupa.
Kana iko kuri kusahadzika kana mune iri nyore kuraira kweiyo processor processors (RdRAnd) yaishandiswa senzira yekumashure neNSA muLinux, nekuti hazvigoneke kuziva mukati izvo zvairi kuita.
Ini handireve kuti "software dzese dzinobata dzakaipa", ndinoreva kuti isu tinofanirwa kuve nekodzero yekuziva izvo zvese software zvatinoshandisa kuita kuve nechokwadi kuti haisi (pakati pedzimwe kodzero dzandinofunga dzakakosha semushandisi).
"Isoftware yese yakanakira kushora here?"
Dambudziko nderekuti HATINOGONA KUZIVA, ndizvo zvandisingafunge zvine hunhu, zvichirambidza mushandisi kuziva izvo chirongwa chiri kuita chinoita.
»Zvino chii chinonzi praxis yako? "Ko pfungwa dzefilosofi idzi dzakabatana sei neicho chaicho?"
Zvakanaka, kusimudzira nekuparadzira uzivi uhu. Kuzivisa, kwete kunyepa kutaura kuti "isu takanakisa." Kuita kuti nyika izive kuti kune dzimwe nzira dzemahara, kuti dziripo kuti dzishandiswe, kuvandudzwa kana kutorwa sehwaro hwekuita chimwe chinhu chiri nani.
Kana tikaramba tichinamatira nesoftware nekuti "chero munhu akati zvakashata" havazombo gadziridza dzimwe nzira dzemahara.
Neraki munyika iyo SL iri kufambira mberi nekukwakuka nemuganhu.
Zvakashata kuboka iro rakazara makore nezvakanakira Photoshop, uye pamusoro pezvo vanonyora mu "kubva ku linux" vachiedza zvinoshamisa kuti vamise shanduko iyi.
«Handifunge kuti kune nyika mbiri dzeGNU / Linux. Kune rimwe divi iyo GNU uye kune imwe iyo Linux? Kupesana uku kwakaitwa nemi. "
Kwete. Ndozvinotaurwa naStallman:
«Android yakasiyana zvakanyanya neiyo GNU / Linux inoshanda sisitimu nekuti ine zvishoma kwazvo zveGNU …… mamiriro ari nyore: Android ine Linux, asi kwete GNU; saka, Android neGNU / Linux zvakanyanya kusiyana. »
"Android yakatosiyana neGNU / Linux operating system, sezvo iine GNU shoma ... ... mamiriro acho ari nyore: Android ine Linux, asi kwete GNU, saka Android neGNU / Linux zvakasiyana zvakanyanya."
Stallman anoti Android ine GNU, asi idiki zvakanyanya kutarisirwa GNU. Chishoma sei icho chidiki chekusiya OS kunze kweGNU uye yakawanda zvakadii kuti uchitarise mukati meiyo chikamu?
"" Uye tinoziva sei kuti agency Snowden yaishandira haina kushandisa GNU / Linux software sechombo chekushora vamwe?
NEKUTI TINOGONA KUVERENGA KODZERO !!! »
Wakaverenga kodhi yakashandiswa nesangano Snowden yakashandiswa here? Morpheus, ini handisi kuyedza kutaura kuti yemahara software yakaipa, asi ini ndinobvunza kuti icho chokwadi chekuti software yemahara chinoita kuti isashandisirwe zvakaipa.
"Zvakashata kuboka iro rakazara makore nezvakanakira Photoshop, uye pamusoro pezvo vanonyora mu" kubva kuLinux "vachiedza zvinoshamisa kuti vamise shanduko iyi."
Hapana munhu anoedza kumisa iyo shanduko, izvo zvinobvunzwa haisi iyo pfungwa asi nzira.
Stallman haaite kupesana kwepfungwa nepfungwa:
Stallman mugadziri, akaita seti yezvirongwa zvinoshanda pamwechete zvinoumba yakakwana sisitimu yekushandisa iyo yaakadana kuti GNU. Ivo vaifanirwa kupedzisa kernel (HURD) apo Torvalds akagadzira Linux uye, achitora mukana webasa remahara reGNU, iyo sisitimu yekushanda yaishanda.
Stallman anoziva kana Android iine zvimwe zvezvirongwa izvi mukati, uye achanyatso shandisa zvimwe, asi hazvina kukwana kuti unongedze kushanda kweiyo admin kune iyo GNU inoshanda sisitimu.
Stallman haasi kutonga Andtroid kana chero mumwe munhu, GNU igadziriro yezvirongwa, kwete danho re "mhando" kana "runako."
"Wakaverenga kodhi yakashandiswa nesangano kwaishandira Snowden?"
Zviripachena kwete, ndanga ndichitaura nezve iyo GNU / Linux kodhi. Ndakaiverenga (kwete zvizere) uye nemamirioni avanhu vanoshanda mairi zvakare. Unogona kuzviita uye edza kuona kana iwe ukawana chimwe chinhu chakaipa. Dai paivepo, ingadai yatove yakamhan'arwa kune wese munhu, sekukuudza kwandakaita zvakaitika neIntel.
Ndedzipi idzi "nzira"? Unofunga ndine "nzira idzodzo" mumashoko angu here? Chinangwa chedu chete ndechekuzivisa
Ndine urombo nekusiyana pane iyi pfungwa. Stallman anotonga uye akanaka. Muchokwadi, kufunga kwake kwakanyanya kunozivikanwa. 😉
Uye neimwe nzira, Apple yakazviita pamwe neOSX yayo zvine chekuita neBSD, kunyangwe kubva kuBSD haina kana iyo yekare DrawinBSD kernel.
Ini ndinofunga kuti iwo mazano eanobatsira, akasununguka nezvimwe. Ivo vanofanirwa kutariswa vachifunga nezve mutengo waunobhadhara, uye ini handisi kureva mari chete, asi nezvekuti ivo vanotora komputa yako. Nekuti vanogumira zvaunogona kuita nayo kubva kunze, uye unovapa kiyi yekupinda muchina wako chero pavanoda. Iwe unofanirwa kuziva izvo uye wosarudza
Iyo yemahara-software kufamba inoreva kuti iwe une imwe nzira pakanga pasina imwe kare, unogona kusarudza kuti komputa yako ndeyako, kuti software ndeyako kugovana uye kuigadzirisa iyo uye paunenge uchida.
PaCanonical, ngatiregei kuvhiringidza. Iyo ichiri yemahara-software, isu tinogona kuigadzirisa, kuichinja, uye kuigovera zvakare kune vamwe, sezvatingaite naDebian, Arch kana chero distro yaunofunga nezvayo.
Kunyangwe, nekuda kwenyaya ye Hardware, isu tichiri kumanikidzwa kuisa software yepamutemo, hazvina kufanana kushandisa mutyairi akavharwa, kuitira kuti kiredhiti kadhi kako kashande, kupfuura iyo rese sisitimu yekushandisa, haina kana fananidzo.
Uye Canonical kana chero, zvakare ine mvumo yekugadzira yemahara software kuti ive yakasununguka, ine hushamwari kana chero ... chero bedzi kodhi yaro yakavhurika uye chero munhu aine rusununguko rwekuchinjisa nekuchigovana sezvavanoda, uye kunyangwe izvozvi zvichiri zvakadaro .
Kufamba kweCanonical kune zvakawanda zvine chekuita nekusvika kwayo pamahwendefa uye mafoni, inova nzira yekushandisa komputa mune ramangwana. Uye handizive kana vazhinji vachiri kuona kuti izvi zvinorevei.
Isu takanga tisina imwe sarudzo, tese taifanira kudzidza tichishandisa güindous, asi mukati memakore gumi, inogona kunge iri nyaya yevana vasingashandisi güindous muhupenyu hwavo, kana kutamba, kana kushanda kana kudzidza.
Nekuti iko kwekutanga kuonana kwavaive nako nekomputa yaive piritsi kana smartphone ine Unity pre-yakaiswa. Uye ivo vanozonyanya kushandiswa kushandisa iyo terminal, pane kuita bhuruu skrini, mavairasi, uye inotevera> inotevera> inotevera.
Kana riri zita iri Gnu-Linux kwete Linux, chii chatiri kuzoita! Zviri nyore kujaira kutumidza zvinhu sekudanwa kwazvinoitwa, uye kwete sezvatinoona zvichinyatsogadzikana kana kuita.
Gabriela gonzalez akadaro
Ndinokufarira. Zvinotaridza kuti kana wakasiya imba yako mumakore gumi apfuura xD
Pindura kuna Gabriela Gonzalez
Ndicho chinhu chakanaka chekuisa Arch Linux padivi yenguva yeeeeeeeeeeeeen.
Ini ndinofunga kuti pano pane yakawanda yakavhenganiswa pfungwa uye kuti zviri nyore kupatsanura. Kusarudza murusununguko, munhu anofanirwa kuve neruzivo kubva kurusununguko. Ngatiisei parutivi mafirosofi uye tiende kune anoshanda.
Mubvunzo wandinofunga kuti unoda kubvunzwa ndewekuti ... software yemahara ndeyei? .
Iyo inoshandiswa kune chero munhu kana boka kuti riwane mukana weiyo software, zvisinei nehupfumi hwavo kana magariro. Iyo inoshandiswa kugovana, kugovera patsva, kudzidza uye kugadzirisa, nerusununguko rwakakwana, zvirongwa uye masisitimu anoshanda uye anozvigadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa zveumwe neumwe.
Iyo inoshandiswa kuziva zvazvinoita uye isingaite izvo iwe zvaunoisa pane komputa yako. Iyo inoshandawo kumakambani kuti awane mari, sezvo naivowo vakasununguka kuishandisa, uye nekudaro inoburitsawo hupfumi uye basa mabhenefiti, (uye kuchengetedza mitero yedu, inovawo mari, painoshandiswa nehutongi hweveruzhinji).
Uye zvechokwadi iro rimwe divi remari, chii chinonzi proprietary software? . Iyo inoshandiswa kumakambani anoigadzira kuisa gonhi rekumashure pakombuta yako (ehe, iyo yaunayo), uye kuwana ruzivo rwako.
Iyo inoshandiswa kuti iwe ushandise komputa yako, kwete sezvaunoda kuzviita, asi semusimudziri akagadzira iyo sisitimu kana kunyorera akafunga kuti iwe unofanirwa kuishandisa.
Uye inoshanda kupa basa kune mashoma emakambani makuru anorarama samambo, kuitira kuti iwe ungoshandisa chete software, nekuti software haisi yako uye haugone kuitenga, unongova nekodzero yekuishandisa nerezinesi iyo inogona kuchinja chero nguva pasina mvumo yako.
Kuziva kuti chinhu chimwe nechimwe chingashandiswa kupi, zviri kune mumwe nemumwe kushandisa chero chavanoda.
"Inoshanda kuitira kuti munhu wese kana boka riwane mukana weiyo software, zvisinei nehupfumi hwavo kana magariro." Chikamu ichi chakanakira, asi mukuita hazvisi zvechokwadi zvachose, zvinogona kuvimbisa kuti kodhi yacho inowanikwa, asi kwete kuti mamiriro ehupfumi haasi muganho (kuti haufanire kubhadhara kuti uwane kodhi, kana kuti unofanirwa iyo bhanari kuishandisa). Dambudziko nderekuti kune marezinesi mazhinji anobatanidza zvatinoziva semarezinesi emahara http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#Compatibilidad_y_licencias_m.C3.BAltiples
Munhu ... zviripachena kana iwe usingafanirwe kutenga komputa, haugone kuwana chero software, kana yemahara kana isiri-yemahara. Chisati chave kudya nekurapwa mazuva ese, pane kuve nePC. Izvo zvandisiri kuona ndeyeMicrosoft neMac vachipa marezinesi avo ekushandisa kune vanhu vasina zviwanikwa, handiti?
Ini ndaifunga iyi blog yaive yemhando yepamusoro, ivo vakapa matipi akanaka asi ivo vakatowira mune MuyLinux yero yemaitiro, imwe inoibvisa kubva kuRSS
Iko troll ...
Bata @ pandev92 kuti uvadzidzise kunyora makirasi (semumaitiro mazhinji, kugadzira marimi emoto zvakasarudzika kune vamwe vanhu).
Usanetseke. Hatife takatsvuka seTechRights. Usakahadzika nazvo.
Huye, kunyange iri rakanyanya kubhenekerwa muSpanish cyberspace iri FayerWayer. Pane izvozvo handina mubvunzo.
MuFayerWayer hamuna chinamato chemahara software asi yeApple (senge Alt1040). paTechRights hongu.
Zvapupu zveGNU, zvapupu zveGNU kwese kwese.
Ichokwadi kuti kune vazhinji vanopofumara vanonyanyisa, sekukwese kwese. Kazhinji ndinogara kure nevanyanyisi, havafunge zvakajeka, ingori hwai dzinodzokorora zvinotaurwa nevamwe. Ndiri kutaura nezvevateveri zvavo.
Mune yangu nyaya ikozvino ndinoshandisa windows 8, kunyangwe ndisina kuvhura muchina wangu kwemwedzi nekuti handina kana chinhu chakakosha kuita uye nguva yapera kukoreji. Ini ndinowanzo gadzira archlinux server isina graphical nharaunda, chete kune ftp uye http maseva. Kwete kushandisa wammp shit. Asi ini ndinonzwa zvirinani nenzira iyi, muchina wangu unoshanda zvirinani uye ndine mapurogiramu ese ehunhu andinoda. Ini handidi kuti nditangezve kutamba, uye handifanirwe kuramba iyo yakasunungukaoffice.
Ndinoenda ku shoutcast.com, kurodha pasi .pls faira uye kurivhura muVLC. Zviri nyore kuteerera kuchiteshi cheShoutcast.
Hahahaha ini ndinofunga zvakafanana uye neniwo ndinoita zvakafanana, ini ndinofarira kugadzira Linux yezvinhu zvandinoda sezvo Windows ichindishandira kwazvo pamushini wangu wese uye ini ndinoshandisa software ini yandinoda, vasati vapatsanurwa kuLinux neWindows (uye imwe ine OS X) uye ndiko kunetswa, saka ndafunga kusiya Windows mune zvese uye kugadzirisa, sezvo Linux isingade zviwanikwa zvakawanda nekuti ini handisi dambudziko uye mazhinji emahara software zvirongwa zvinoshanda muWindows pasina matambudziko ...
Sezvazviri, wangu archlinux muchina unoshandisa 20mb yegondohwe, pittance. Kushandisa Linux seyakanyanya system haina kunyanya kushanda, asi iwe unofanirwa kusiya chigaro uye kukotamisa musoro wako nezvose zvinogumira zvinounzwa neLinux, zvinogadziriswa nekaviri bhutsu, asi hazvina basa. Zviri kutonyanya kugadzikana kugadzirisa.
comments pendev92 «" Linux ifilosofi "
Kunyangwe bato rakakurumbira munharaunda yangu rinoshandisa Linux kunze kwekudikanwa, nekuti haifanirwe kumutsiridza makomputa mazhinji uye nekuti inongovhara zvese zvinoitwa, saka hatigone kutonga kuti ndiani anoita izvozvo »
huh zvinondityisidzira. Kunyangwe iyo PP inoshandisa gnu / linux uye kubvira patakapfuura nepano uye izvi hapana munhu ndosaka tisingaite seyakavanzika system? Ivo vanonditya, ivo neoliberals, vanopamba veruzhinji, vasina hunhu kana hunhu, ivo vanoteerera chete Machiavelli "magumo anoruramisa nzira", magumo ekuwana mari, nzira dzinobiridzira ruzhinji.
Pendev92 kunyangwe iwe usinga zive hutsinye hwaunonyora.
tsanangura pev92 "" Linux ifilosofi "
Pendev92? "" Linux ifilosofi "? WTF?!
Zvakaiswa @ pandev92 usati waisa chirevo ichi ndeichi:
«Kudzokera kune izvo zvinotinetsa, kwete munhu wese anoshandisa Linux yefilosofi, pamwe vazhinji vanozviitira zvakapusa uye nyore, pakati pavo, mukana wekugadzirisa yako system kune zvaunofarira, mukana wekugona kushandisa akasiyana desktops, iyo optimization hurongwa, uye zvimwe zvakawanda zvekureruka uye zvekuda kuziva […] »
Yakakomba, yakakomba chikanganiso kusaziva kuverengera yakadaro mavara zvakanyatso.
pandev92 yakanyora kare
"Kana ndakadzidza chero chinhu mumakore achangopfuura, ichokwadi chinoenderana nedivi raunotarisa, uye kuti hapana mumwe wedu anazvo zvizere."
Zvakanaka, tanga waona hunhu, uye wobva wasiya zvirevo zvavo.
Yakakomba, yakakomba chikanganiso kusaziva kusanzwisisa rugwaro rwakadai zvakanyatsonaka.
zvichave zvakakosha mukutarisana neakawandisa neoliberal kutsamwa
Zvakwana!, Tisu avo vanoshandisa Linux kungoita zviri nyore / zvinodiwa uye avo vanoishandisa kutevera huzivi ... Nei kusawirirana kwakanyanya?. Ini handizive chekuchidaidza, asi zvinoita kunge zvisina musoro kwandiri kuti mushandisi wega wega anoda kusununguka nekumanikidza maonero ake kune vamwe. (Ini ndinogona kudzosera)
Asi mushure mezvose, Linux inoshandiswa. Kana kunyangwe sirogani yeblogiti inoti: "Ngatishandisei Linux kuti tive vakasununguka", asi nei? Linux inotisunungura here kana sarudzo yekuishandisa pachayo? ...
Usatombo kunetseka, mafeni uye fanboys vakadzorerwa kumashure nekutadza kuramba vasina kwavakarerekera.
PS: Pane chero munhu angavhara zvirevo? Ivo vatove kusvika mazana maviri.
Hongu, chete kuti moto unopfuta pandinoona kusaremekedza kwakanyanya uye vane kodzero yavo, asi kodzero yekuremekedzwa mumaonero angu inorema zvakanyanya.
Kuputsika kwake kwakaita kuti ndirasikirwe nehunhu XD (yakaipa joke) ...
PS: Uye izvi hazvisati zvapera, ndiri kushamisika kusaona Nano, KZKG nechikwata chavo ...
Pakupera kwezuva, inzira yekushandisa, chishandiso chebasa, kana nzira yekufamba nayo, kana kutamba mitambo, kana chero chinhu chatinoda kufadza nacho; inongova nzira yekuvhiya, kwete ropa remumwe munhu.
Chaizvoizvo, zvinoita sekunge kutsigira kuvapo kweiyo huru sisitimu yekushandisa (kana kernel, sezvaunoda) vanodzivirira pfungwa dzimwe nguva dzakashata kana dzakarurama.
Hapana munhu anofa nekuti ini ndoti izvi "ndinoshandisa Windows hahahaha", handiti?
Dai ndaive pamberi peumwe munhu, aibvarura rurimi rwangu obva asundira Arch Linux CD mumuromo mangu ……… ..
Mumwe anogona chete kutaura nezvesarudzo kana zvigadzirwa zvatinogona kusarudza kubva pakugamuchira rutsigiro rwakafanana. Sezvo pasina chinhu chakadai mune zvigadzirwa zvakawanda, munhu haugone kutaura nezve rusununguko rwekusarudza: unogara muWindows kuitira kuti zvigadzirwa zvako zviitwe ne100% kana iwe uchishandisa Linux, uchitora mukana, semuenzaniso, 80% kadhi revhidhiyo kunyangwe system ive yakatsiga. Pane izvi pane yakawanda, yakawanda mienzaniso.
Chinhu chinonakidza nezve yemahara software ndeye paradigm shanduko iyo yainofunga maererano neyakagadzirwa / nehukama hukama, iko shanduko mune bhizinesi modhi zvinoenderana nekubviswa kwepatendi, kodzero dzekopareta uye nevamwe vamiririri izvo zvinoita kuti chigadzirwa chinyanye kudhura, uye izvo zvisingatenderi kushanduka. Yemahara software ifilosofi yehupenyu, pasina kuenda mukusimba, nekuti yavo yekugadzira modhi inogona kuiswa kune chero chirongwa uye mhedzisiro yayo inogara yakanaka kune wese munhu, pamwe kwete yemabhizinesi modhi inoedza kuzvisimbisa.
Zvinotaridza kwandiri kuti kutaura nezve "kune mhuri dzekutsigira" kuve nekumira uye kusiri-kwekushanduka kufunga; Munhoroondo yese paive nemabasa aive asisakwanisike kushandiswa (anoshanda erevheta, semuenzaniso). Ndakaverenga chikumbiro chinonakidza chakandibatsira kubvisa kusahadzika kwese: dai paine muchina waiteedzera zvisingaite chingwa uye uchibvumidza munhu wese kuti ave nechingwa chavo uye panguva imwechete muchina uyu waigona kuchinjika zvakasununguka kuti upe zvakasiyana siyana pasina kutsamira hapana mubiki, ungasarudza chii? Kudzivirira bhizimusi remubiki kana mabhenefiti emuchina unowanza zvingwa?
Ini ndinobvumirana nechinangwa, kunyangwe paine zvimwe zvinhu zvinoita kunge zvakadzvanywa.
pandev92: »» Uye kana munhu iyeye achida kuwana imwe mari, kunyangwe penti, achaburitsa sei kodhi?
Kuti yakasununguka hazvireve kuti yakasununguka. Kubhadhara chirongwa chemahara hazvireve kuti hapasisina mahara. Ini ndakagadzirira kubhadhara kuti ndishandise kwandinoda kugovera. Ini ndakasarudza kugovera uku neiyi sisitimu yekushandisa kwete nekuti yaive yemahara asi nekuti ndakaona kuti ndiyo yakanyanya kundinakira. Pane vamwe vedu vasingade kubhadhara kuti tishandise GNU / Linux?
Uye vasati vandikanda mujugular, ini ndinokuudza kuti handisi kutaura zvemari ndega. Iyo ndiyo nzira iri nyore. Ndiri kureva kutora chikamu (kwete kungogunun'una) mukugadzira yako distro, iyo kernel, yakanakisa: kubva pakuva beta-tester, kuburikidza nemabhuku ekushandura, kujoina chikoro uye kubatsira mumwe mudzidzi asina zororo kuyedza GNU kana open- sosi.
Kuzvida kwangu kunondimanikidza kuchengetedza zvandinokoshesa zvakanyanya. Uye ini zvakare ndinoda kuti ive yemakwikwi. Linux inokwikwidza: yakazvarwa ichikwikwidza, inorarama ichikwikwidza uye hapana imwe nzira yekuita zvinhu. Kuita kuti iwanikwe kune chero munhu iri imwe nyaya, asi ini chandinoziva chete munyika ino makwikwi. Ini ndinogona zvakare kuvhara maziso angu uye kugara mumalollipop villa kwechinguva.
pandev92: »» Pamwe, mumwe munhu aigona kuuya, kuzotora kodhi, kuigadziridza uye mashandisiro ayo aigona kupfuura epakutanga, aine hushoma simba, nekudaro achisiya iye wekutanga wepamberi ari mumakwikwi zvinokonzeresa, zvichikonzera kumagumo kusarudza kusaenderera mberi nekusimudzira. , izvo zvakaitika kakawanda, zvichipiwa kunetsekana kwekuita mari madiki mapurojekiti.
Izvi hazvitadzise musiki wepakutanga kutora chigadzirwa chake "chakagadziridzwa", achigadzirisa zvakare, uye achiedza kuchinjana nemari. Icho chichiri chinetso chekupa mvumo. Ndosaka ndichiona zvichikosha kuti isu tese tishande pamwe nekupa zviwanikwa kuvakagadziri vatinoona zvakakodzera, uye kwete nemari chete.
Tinofanira kupatsanura izwi remahara kubva kune remahara. Chaizvoizvo, ini handizive nezve chero chinhu chemahara munyika ino. Chero chinhu chine mutengo. Zvakanditorera nguva yakawanda kugadzirisa matambudziko madiki andakamhanyira mariri. Ini ndakabhadhariswa nekuti ini ndakawana chigadzirwa chakaoma kunatsiridza mukuchinjana, kunyangwe kubhadhara.
Saka wakasununguka, hongu; Yemahara kwete.
Pindura kuna adeplus
Uye isu takafanana! Kana iwe ukatengesa chimwe chinhu chine rezinesi remahara, ndinogona kutora kodhi yako ndigoigovera patsva mahara pasina chero chinoshamisa kuchinjika, pakupedzisira, ini mudiki ganda, ndinorasikirwa. Haunzwisisi zvandiri kureva here?
Makambani akaita seRed Hat anogona kuzvikwanisa, nekuti iwo chiratidzo, chitaridzi, mhando yeLinux nike. Vachagara vachitengesa, kunyangwe mangani linux centos uye masayendisiti abuda.
Ndinokunzwisisa zvakakwana. Asi hapana chinotadzisa mushambadzi mudiki kuti ape chigadzirwa mukutsinhana nemari. Kana RedHat ikaratidza uye ichida kuchengeta chigadzirwa chidiki chemugadziri, ngaamubhadhare. Izvi hazvireve kuti chirongwa ichi hachisisina mahara, uye musimudziri mudiki haarasikirwe nekodzero yekuvandudza chigadzirwa chake, kana kudzoreredza iyo yakavandudzwa neRedHat. Chero bedzi RedHat yakatendeseka uye inotsigira zvirevo zvechibvumirano.
Dambudziko richiri rekuti isu tinofunga maererano ne "Ini ndinoibvuta," ine chip ye "mellow-locrackeo-ya-run." Uye, kana iwe uchimhanyisa ini, nekuda kweiyo proprietary software.
Icho chokwadi ndechekuti ndinobvumirana newe pane zvese zvinhu, kunze kwekufungidzira kwako kuti yemahara software inofanira kuve yemahara.
Kupinda kwakanaka Pandev,
kupokana nehunyanzvi mune chero mafomu ayo 😉
«Ini ndakatanga nguva yandakatsanangura mazwi aStallman, ndichiva nechokwadi chekuti ichi ndicho chega chokwadi uye sezvazvinowanzoitika, patinotenda kuti tine chokwadi chezana, takakanganisa, hatikwanise kuona nyika chaidzo, zvavanoda uye isu tinova rudzi rwevanonyanyisa mune zvechitendero avo, kune imwe nhanho, vanonyanya kunetseka nerusununguko rwe software kupfuura rusununguko rwevanhu, zvinova zvinofadza asi ichokwadi.
"Kana ini ndakadzidza chero chinhu mumakore achangopfuura, chokwadi ndechekuti unotarisa kudivi ripi, uye kuti hapana mumwe wedu anazvo zvizere."
hapana chaRichard stallman anopenga taliban anopenga.ano ruzha.anofarira zvekunamata.Richard stallman haangashandiswe kuti ane chikamu chechikonzero.
Pandev92 yakati "Ini ndakadzidza kuti rusununguko rwemunhu, rwuri pamusoro perusununguko rwe software" Ah, ipapo, o ipapo ndipo paunotanga kuona zvakajeka zvinangwa zvake, kusiyanisa zviitiko zvevanhu nemunhu.
Pandev akawedzera "Anogadzira sei anogadzira chikumbiro chemimhanzi kuti aite mari, nekungopa technical service, sezvinoita Red Hat?" Kick yekupedzisira kuvhura sosi, uye ndipo paanoratidza kunyemwerera kwake neoliberal. akakwana alibi KUVIMBISA kodhi.
Ini ndinogona kutsanangura zvakawanda, asi kuverenga chinyorwa ichi kunonyadzisa vanhu vanehunhu.Kunze kweizvozvo, inotaura zvakawanda nezverusununguko uye nekuvimbika kwechokwadi.
ChiFarisei kana mipimo miviri, iyo inoda kutevedzwa nemutemo asi iye achiusvetuka, yagara ichindikonzera chisimbwa.
Zvakanaka, ini handizvinzwisise nenzira iyoyo. Pandaiverenga pandev92 ndakanzwisisa kuti hazvina kukwana kungova muteveri asingaone asi kuti meseji yacho inofanirwa kufananidzwa. Izvo hazviite kuti mumwe kana mumwe wacho asakodzere. Iyo zvakare inovhura musuwo wekuti imi vaviri muve mukutadza kana muchitaura nezve Chokwadi uye Chokwadi.
Nekutaura kuti iwe unofarira rusununguko rwevanhu pane software rusununguko, ndinonzwisisa kuti rusununguko rwemunhu rwakakwirisa pane pfungwa yemahara software. Ini handione chero kupikiswa nekuti ndeye kuzviisa pasi.
Kuva neoliberal kunoreva kuti iwe uri kufanotemera shanduko yehupfumi kubva kudivi rekupa. Unogona kuishandisa sechinhu chinoshamisira, asi ichiri dzidziso yezvehupfumi.
Ini ndakadzikama uye handina kana kumbovhunduka, uye handina kukwanisa kuwana muchinyorwa icho Richard Stallman anozivikanwa seanonyanyisa kana anonamata.
Ndinobvumirana nechero allergy yaunotaura; Ndine nguva yakaipa.
Mundima yechitatu, nyatso verenga zita raRichard Stallman semunhu anonamata,
Neoliberals haisi sarudzo yezvehupfumi chete, zvakare hurombo hwehupfumi hwevagari, uko kunotora huwandu hwevanhu, uko kune vamwe vanhu vane rombo rakanaka vanobvisa hupfumi hwese kuti vazvibatsire, vakasarudzwa nenyasha dzaMwari, vanoshanda upfumi dzidziso dzakanangana neudyire, iyo yakajeka inoparadza zvese.
Ini handidi ane hungwaru muhurumende, ndinoda vakadzikama.Wona al wert, gurukota rakangwara uye rakakosha, asi anotora bhezari kuti abatsire boka rekuwedzera.
Iko kunofadza KUKWikwidzana kunotitungamira kuhondo, zvigadzirwa zvekugadzira zvichave zvakatenderedzwa mumatatu kana mana emunyika.
Kana iwe uchida kutaura nezvematongerwo enyika, tinogona kuzviita kumusoro muforamu, haina chekuita apa, kunze kweizvozvo iwe unongotsausa kutarisisa, zvakare ...
pandev92 yako maonero, iyo inokodzera kuremekedzwa kwangu kose, yakanyura mune zvematongerwo enyika.
Ndine urombo kukuudza, shamwari yangu yakanaka, kuti kunyangwe mutengo webhinzi sarudzo yezvematongerwo enyika.
Sarudzo yaStallman yekugadzira software yemahara yaive sarudzo yezvematongerwo enyika.
Izvo hazvigoneke kupatsanura zvematongerwo enyika kubva kunzanga, munhu i «mhuka yezvematongerwo enyika», uye nekudaro chero chiito chesangano icho chinounza neimwe seti yemaitiro, maprotocol uye / kana mitemo, pakupedzisira, ungave uchizvida kana kwete, zvematongerwo enyika.
Software chishandiso, haisi magumo pachayo.
Nekudaro, iyo hutongi uye kutonga kwauinako pamusoro pechombo icho, icho chiri kuramba chichiwedzera kuve chakakosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Ndiko kukosha kweFree Software.
Dai Stallman asina kutanga (uye nditende ini, mumwe munhu angadai asina kuzviita pasi pematemu seGPL, nekuti pakupedzisira kuzvipira pachako kunofanirwa kuitwa kuti ashande nenzira yaakaita yakawanda).
Panguva ino tinenge tisingakwanise kuzvidzivirira pamativi mazhinji. Sezvo neNSA (semuenzaniso).
Ichokwadi ndechekuti simba remahara software rakanyanya kukura kuti upinde mune chimwe nechimwe chezvinhu icho chakatikanganisa isu tese (kunyangwe vachichiziva kana kwete).
Asi kunyangwe iwe uchizvida kana kwete, zvikonzero zvekugadzira software, uye kunyanya yemahara software, haisi yenguva dzose hunyanzvi. Iko kune zvakare mafungiro uye ezvematongerwo enyika zvinokurudzira.
Nyika haisi makambani uye manhamba chete. Asi bvunza Stallman, ndiani muenzaniso mupenyu wekuti kufamba kunogona kutangwa nekuda kwemafungiro ako ezvematongerwo enyika nehungwaru.
Zvino ivo zvavari kuda kuita hapana chimwe chinhu, asi zviri chokwadi kuti hapana mumwe wenyu anogona kuita zvibairo zvinoteera zvaunofunga kusvika pakupa hupenyu hwako kwazviri.
Yechii? Izvo hazvina kunyanya kusununguka kutarisa guvhu uye kufunga chete nezve rimwe chete?
Sei uchifunga nezvevamwe, kana pakupedzisira, kunyangwe ukaedza zvakaoma sei kuita chimwe chinhu chiri nani kune wese munhu, pachagara paine vakomana vanozvipira kukuseka iwe uye kukuregeredza iwe nekuda kwekusava noudyire nekushandira kunaka kwepasi.hunhu?
Eya, pakupedzisira ivo ndivo vanhu vanoenda pasi munhoroondo, kwete nekuti ivo vane mukurumbira, asi nekuti ivo vanoita zvinhu izvo kwete wese munhu anokwanisa kuita.
Ndosaka kune vamwe vanovayemura, ndosaka kune avo vanotevera tsoka dzavo, ndosaka kune avo vanoshanda pane iwo mazano uye vanoramba vachizadzisa.
Saka yemahara software ifilosofi? Ehe
Isangano rezvematongerwo enyika here? Ehe
Chinhu chimwe software uye chimwe zvinhu zviri kuseri kwayo.
Asi hazvidiwe kubvumirana nefilosofi yavo kuti vabatsire uye vabatsire mazviri. Nekuti pane chinhu chehunyanzvi chakabatana zvakanyanya nacho.
Iyo yehunyanzvi chimiro isoftware, uye chimiro chevanhu ndizvo zvatinoita nacho. Ndizvozvo chaizvo zvekupedzisira izvo zvese zvandataura pamusoro zvinoreva. Nekuti software haizvigadzirire pachayo, uye haizvishandise pachayo. Ndiye MWE MUNHU anozvigadzira uye anozvishandisa.
Ndine urombo kana ndaive ndakashata pandakanyora, ndiri kubasa panguva yekudya kwemasikati uye nekuchimbidza ndakaomerwa nekugadzirisa pfungwa = P.
Asi sekureba sekunge kuti meseji inonzwisiswa, zvakanaka. =)
Kutaura kwako kwakanakisa, Wilson, ndinobvisa ngowani yangu.
Kutanga, ndinofanira kutaura kuti blog nezveLinux iyo inopa aya marudzi ezvinyorwa anovhura yakanaka uye inovandudza gakava remazano. Bravo yeLinux! Agora pawebhu uko mazano anokurukurwa uye pfungwa dziri nuanced inogara yakanaka.
Asi zvirokwazvo, chinyorwa chiri kubvunzwa chine nharo dzinoverengeka dzandinoda kupa maonero angu
1. Kutaura kuti Linux ifilosofi haisi "kukanganisa kukuru." Linux, senge zvimwe zvinhu mune ino postmodern nzanga, ine hunyambiri hunhu. Pamwechete, chikamu chemafungiro nezve software chakagadzirwa muchirongwa chefilosofi. Izvi, hongu, hazvichinjiki. Iko kushandiswa uye shanduko yekernel yaifanirwa kuita kuti zvirevo zvayo zvive zvakachinjika kuitira kuti isvike kune "a" mushandisi akajairika, uyo anotenga Hardware asina kufunga nezvakawanda zvisina kufanira zvefilosofi. Maitiro akagadzira yakasarudzika inoshanda hunhu (imwezve "chishandiso") cheGNU-Linux. Linux, ehe saizvozvo, zviri zviviri, asi simba reimwe uye rimwe racho, kutaura zvishoma, kusaenzana, zvisinei hazvo rimwe ringave "rakanyanya" rinoshanda kupfuura rimwe racho.
2. Kazhinji kazhinji, kushandiswa kwevechidiki kunoitwa kune zvinoreva izwi rekuti rusununguko. Zvinotaridza kwandiri kuti ndizvo zvazviri. Zvakawanda zvakanyorwa nezve izvi. Vanyori vakadai saAlbert Camus ("Murume Anomukira"), Guy Debord (Sosaiti yeSpectacle), Michel Foucault naSlavoj Žižek (kutaura vashoma chete), vakapinda mumubvunzo uyu. Iko hakuna zvachose murume akasununguka. Muchokwadi "Rusununguko" runogona kuve rwusingafadzi. Hazvina kufanana kana zvichinzi, kunzwisisana, nemubhengi kana mutungamiriri weUnited States, sezvazvinotaurwa nemukadzi wemba akarohwa, mudzidzi kana murwiri wekodzero dzevanhu. Mhuri, hurwere, zvisungo zveushamwari kana kuda, gadzira ngetani dzatinofanira kufamba nadzo muzuva redu rezuva nezuva. Hatigone kuzviona nenzira iyoyo, hongu, asi kuvapo kwazvo kunotinyima "rusununguko rwekusarudza." Kunyangwe paine chokwadi chekuti "kuzvisarudzira", pachayo, ipfungwa inopokana. Imwe nyaya yakasiyana ndeyekuti "mumwe munhu" anotimanikidza kuti tiite zvimwe zvinhu kana kutisarudzira. Mbeu yehutongi hwakawanda, kongiri kana kupararira, iyo yatinorarama nayo mazuva ese inogara, chaizvo, pano. Mune izvi, ini chokwadi handitendi kuti GNU ndeyekuremekedza hutongi. Kuisa kuburikidza izvo zvinongova "boutade." Imwe nyaya yakasiyana ndeyekuti nharo dzavo hadzina utsinye nekuti vanotigumbura. Asi iyi imwe nyaya. Kuti tikunde, tinofanirwa kuita nharo. Izvo zvatiri kuita nhasi.
3. Padivi rine hushamwari repasirese, patinogona kushandura PC yedu makore maviri kusvika matatu, tinowanzo kanganwa kuti imarii inoreva uye zvazvinoda kuwana munzvimbo dzakasiyana dzepasi. Mamwe makambani haatombofunga kana vangakwanise kutenga Mac kana kubhadhara rezinesi reAutoCad. Hazvitombofungi. Kumadokero, kune shanduko, isu tinofunga isu pachedu seguvhu repasi. GNU-Linux, iyo hombe isiri-Yekutengesa komputa chirongwa pasi, inokonzeresa kupandukira "asi" muhudzvanyiriri hwekutengesa. Ngatiregei kuzvikanganwa. Kubva pakuona kwangu, ndisingade kuve anonamira, izvi zvakakosha. Kutaura chokwadi, kuzviisa kune chishandiso chakareruka, chakaomeswa uye chisina mhosva, umo chinhu chega chakakosha kushandura nharaunda yedesktop uye kuchigadzirisa kune zvatinoda, kuperevedza.
Mapato ezvehupfumi (makwikwi, kukosha, mari, purofiti, mari, zvigadzirwa fetishism) zvakagara zvichititonga. Zvinoitika munzvimbo dzese dzehupenyu uye vanotikunda (isu hatichakwanise kufungidzira hupenyu husina ivo, kunyangwe hazvo hupfumi hwakave chete nemakore mazana mashanu enhoroondo). Nedambudziko iri rebudiriro ratange tichisangana naro kubva muna500, nekudzikira kwemhando inonetsekana nenhengo dzayo dzese, "yefilosofi" imwe nzira yakatsanangurwa neGNU-Linux, inoshandisa kushandiswa uye kugadzirwa kwesoftware, "ichizviparira" kubva yakachena bhora rezvehupfumi, mune iro purofiti uye kugadzirwa kwayo ndiyo yakanyanya uye mamiriro chete.
"Hakuna munhu anosaina kumazana kuti ashandise chirongwa chakavharwa." Chokwadi, asi iwe unobvumirana neni muchinyorwa chekutanga chekuti pakati pehukuru uye hunopfuurira midhiya bhomba inofarira humwe hupenyu, iyo <> yakanyatsogadziriswa.
Chekupedzisira, mutsara wakandiita kuti ndifunge mumavhiki apfuura uye izvo zvandinofunga zvine chekuita nezvatakurukura nhasi:
«… Asi iyo sisitimu yakadaro haishande nekuti ine chibvumirano chevadzorwi vayo, kana zvisiri nekuti inoita chero imwe nzira isingagone», (Anselm Jappe, «Kiredhiti Kufa» Mupepepitas de Calabaza, 2011)
Ndine urombo, ndinogadzirisa chikanganiso
"Hapana munhu ari kusaina mazana kuti ashandise chirongwa chakavharwa." Chokwadi, asi iwe unobvumirana neni pachinhu chepuraimari kuti pakati pechaunga chikuru uye chinoramba chichiitika chezvenhau chibhomba mukufarira humwe hupenyu, "sarudzo yemahara" yakanyatsogadziriswa.
Xeip ... Ini ndinogona kusabvumirana nehukama hwenyu hwese, asi ndine chokwadi chekuti kusvika parizvino kunyora kwako muenzaniso wakanaka we dialectics. Zvakanaka kuverenga.
Zvinonakidza, hapana kana mumwe munhu angadai akazvitsanangura zvirinani ... Handizive kana iwe uchizvipira iwe kunyora asi izvo zvataurwa zvinofadza kuverenga. maererano
"Zvinosuruvarisa kuti munyika chaimo, mafungiro ekuti software chigadzirwa ichiripo, uye kune mari yekushandisa software iyi, tinogona kuifarira kana kuti kwete, asi iyi ndiyo mhando yatinogara, uye inopesana nayo, zvakaita sekuenda kunopesana nemhando yehupfumi hwenyika.
asi iwe hauzvizive, zvinoda kuzviisa pasi, kuti hupenyu hwakadai, ... kana ukandiyeuchidza nezve mufaro, kusagadzikana uye chibayiro, gariki nemvura, unamatira kunze ubatirire, zvinhu zvakaita seizvi ... ngatione pandev92 GNU / LINUX ndeyekusimukira kune izvo zvakagadzwa, ungave uchizvida kana kuti kwete, iko kurwisa kudzvinyirira, kumisikidza ... zvinosuwisa sei, ngatione kana tichimuka
Ini handigone kumira kuseka nekuenzanisa kwako kwe @ pandev92 uye iyezvino purezidhendi weSpain.
Iyo software pachayo ndiyo inonzwisisika chikamu chemidziyo yemakomputa, saka inogona kupihwa sevhisi.
Zvino, zvekuve chigadzirwa, ndizvo zvakafungidzirwa naBill Gates paakatanga kubhadharisa kodhi yekodhi yemusanganisi wake muChechi (zvakadaro, ndicho chete chinhu chandinoburitsa kubva kuMicrosoft kunze kweiyo Windows interface Tarisa).
Dambudziko nderekuti panogara paine boka revanhu vaFascist vachida kukunyadzisa nenzira inosemesa kwazvo, vachiisa maonero avo nekutyisidzira kwerufu kunosanganisira.
Ndine nguva yakafanana newe uye ini yatakaedza distro mushure meimwe uye ini ndaifanirwa kushandisa Windows kana OS X kuita zvimwe zvinhu -Zvishoma uye zvishoma-.
Zvinondishamisa zuva rega rega kuti kune vanhu vakatora izvi sechitendero uye vanopedzisira vari mukukurukurirana kusingagumi: "Mwari wangu ari nani kupfuura wako" uye vanonyengana.
Kubvira pandakawana kuravira kwe linux, ndakaona kuti basa rangu se linuxer kuunza linux kune vashandisi veWindows neMac vanoda simba.
Ini ndinoisa Ubuntu uye ndinotsanangura maitiro ekuzviita, ndinotsanangura koni uye zvishandiso zvekutanga uye ndinonzwa kufara kwazvo pavanogara kudivi repenguwini.
Chatinoda vanhu vanoita zvinhu uye vasingataure zvinhu.
Vanhu vanoita zvigadzirwa zvemhando yepamusoro: Red Hat
Vanhu vanogadzira zvigadzirwa zvinonzwisisika uye zviri nyore kushandisa kune vashandisi vatsva: Canonical / Ubuntu, Linux Mint.
Ministri dzedzidzo uko kwakazara dzidzo yemakomputa inosimudzirwa uye haina kuganhurirwa pakudzidza zvigadzirwa zveMicrosoft: Venezuela
Sezvo peji rekutanga rehurukuro iri technicality gnu / linux kana linux. Sekureva kweWikipedia, zvirongwa zvakagadzirwa neGNU zvatinozowana mune zvakajairika distros ndeye gimp, gnome, bash uye gcc / glibc. Mune yangu kesi, arch linux yakanga isina gnome kana gimp, zvakare yaishandisa csh pachinzvimbo chebash.Kana ivo vachishandisa chakra kana openuse, yakafanana nyaya. Iyeye Gnome musiki miguel de icaza akadaro muylinux mumhinduro kuburikidza git iyo mapenzi chete anoidaidza kuti gnu / linux. Uye chokwadi chandinobvuma inyanzvi yehunyanzvi uye izvo hazvishande kunze kweizvozvo zvinotora nguva yakareba kuti nditi ndinoshandisa gnu / linux pachinzvimbo chekushandisa linux. Uye hapana ane hanya nazvo. Asi ini ndinokutendai neiyo glibc, gcc uye gdb iyo yakandibatsira kubvumidza chirongwa 1 muC.
Yakawandisa shit yakadururwa mune zvakataurwa, handigoni kutenda kuti zvakafanira kuti vanhu vatore inki zvese nemaonero emafungiro, damn, hapana chinobata mabhora angu kupfuura iwo, kuti ivo vanoda kuita zvematongerwo enyika chimwe chinhu, kana kuchipa chirevo kupfuura icho ndizvo.
Zvisinei, kwaive kutaura kuti, kana ndikatanga kupindura yega yega misikanzwa yemumwe neumwe moron wandakaona, ini handimbopedza, uye inyaya yakatambwa chiuru uye kamwe chete, haimbouya kune chero chinhu.
kazhinji kana iwe ukavava, unokwenya
Kazhinji kana iwe uchidzokorora chirevo chakadai, zvisina maturo, ndinodzima. Uye ini ndinokutaurira mune zvakanaka vibes.
Yakawandisa shit kubva pane yako maonero .. hazvireve kuti ishiti kune vamwe .. 😉
elav iyi komenda iri kunze kwetune !!! .. zvakadaro, kukwazisa, uye kukosha
Handizive kuti ndakabvepi inzwi rangu, ndakangopindura Nano ndichishandisa mazwi ake.
Asi ini ndinozviita kuti zvive zvakanakisa: Chokwadi chekuti mumwe munhu anofunga neimwe nzira nezve chakanaka kana chakaipa, hachivape mvumo yekutaura kuti munhu uyo ​​asingafunge zvakafanana haana kunaka kana ari kutaura marara.
Iwe unonyatsoziva zvandinoreva mhanza, iwe unonyatsoziva zvandinoreva, uye iwe uri pachena kuti mukati mese mheremhere, inopfuura imwe yakashongedza uye yakasiya danho rakarara muchimiro chemhinduro.
Ini handidi kutora nguva yakareba, zvakadaro, zvine chekuita nemoto waVivaldi. Zvakakosha here kukuyambira kuti chii kana chii? Ndapota, isu tinongozviita uye ikozvino murume.
elav ndinofunga pave nekusanzwisisana.
Nano ane tsvina yakawanda iwe unongoyamwa, ona kana uchigeza.
Iyi ndiyo nano, iwe wakadzidza kupi kuenzanisa?… Ndezvipi zviri, uri shamwari yepedyo yepandev92? Haugone kupindura chinyorwa chako here? nekukurumidza unonzwa kugumbuka? ... ndiani firecracker? Ndinovimba iwe unogadzirisa, kukumbira ruregerero uye kuzvibata neRUVARIDZO.
Hmm mumakore ekuyera saiti ino, ndinofunga ... kunyangwe muchidimbu uye kuti isatora nguva refu ...
"Kazhinji kana ukavava, unozvikwenya"
Kukumbira ruremekedzo, asi uchinditi benzi 😉 huya, ipapo ini ndiri mwana mutete ane ganda rakatetepa.
Tarisa, ndakakuudza kuti ini handisi kuzoreba uye ini handina, sekureva kwako, uyo anokwenya, handiti? Ini ndakashandisa zvakafanana kwauri uye zviri pachena kuti hauna kuzvifarira, uye pamwe newewo haudi kuti ini ndadzima zvataurwa zvekare, ndingadai ndisina kuzviita dai vasina kutakurwa nekutukwa kwega.
Zvisinei, iwe unogona kuenderera mberi nekufunga zvaunoda nezvangu nenzira yangu yekumodhesha, mushure mezvose, hazvina basa 😉
Ini ndinofunga kuti munhu wese anofanirwa kutora avo vega mhedzisiro nezve yemahara software yekufambisa uye yakavhurika sosi kufamba, iyi mhando yechinyorwa inongogadzira kuwanda kupatsanuka maererano ne "ideology", kufungidzira uye mimwe mifungo yakawanda, musoro wega wega inyika.
Kwete. Ini ndinofunga kuti iyi mhando yechinyorwa inonyatsoburitsa kufunga kwevanhu nezvenyaya iyi.
Zvakanaka izvi zvakafanana nekuverenga mapepanhau anondizivisa zvisirizvo kana kundipa hafu chokwadi, ndine hurombo nedivi rangu asi ndiri kuenda. Ndiri pachena kuti pandev92 haisi Kubva kuLinux asi ndine hurombo, handikwanise kubata zvakanyanya "mukaka wakashata", nekuti pakupedzisira ndizvo zvandinoona, mukaka wakashata. Kumbundira kune vese uye ndati kune "vese". Kutenda nezvose zvinyorwa, zvakanaka kune vangangoita vese. Ndishevedze zvaunoda, ndichave izvo uye nezvimwe zvakawanda.
Zvakanaka karlinux: Bye! Kuti unoenda wakanaka. Muchagamuchirwa kudzoka pese pamunoda .. 😉
Tokuona muTaringa neFayerwayer, mukoma.
Izvo zvakanaka kutaura kuti proprietary software ndeimwe sarudzo, asi isu tinofanirwa kuwedzera kuti inowanzo kupandukira mushandisi, ichiva tyisidziro.
Kune rimwe divi, GNU yakanyanya kudarika uzivi, isina GNU, pamwe Linux ingadai isipo. Hatifanire kusimbisa chete "zvakaipa", isu tinofanirwa kuve takaringana.
Kune vamwe vese, ndakafarira kuiverenga.
Kana ndichiverenga ndinoona chishuwo chakakura chekuita gnu / linux chimwe chinhu chekushambadzira, ndinochidzokorora, gnu / linux haina kunyorwa pamastock exchange uye haisi iyo kambani futi.
Ivo vanhu vanobatana kuti vawane zvirongwa uye chirongwa chekushandisa icho chisiri chinhu chekutengeserana, ndiko kuti, chinangwa chavo hachisi chekuita mari, kana pamwe kana vakakwanisa kuwana mari vanozogovera madhora mashoma kune isu tese tinoshandisa?
Vagadziri vanoda kuita mari vanotova nemawindows uye mac ekuvandudza ... handizive kuti ndiani anovaidza gnu / linux ivo pavanenge vachitoziva kuti mitemo iripano ... ndinoreva iwo iwo mirau yakaita kuti izvarwe uye ikure uye zvirokwazvo ramba uine hutano hwakanaka.
gnu / linux inharaunda, kubatana… .haisi kambani! chinangwa chebhizinesi chete kuita mari uye chinofanira kuve.
Ndokumbirawo usaramba uchimanikidza kubatanidza distros uye gnu / linux kuva bhizinesi.
Izvo zvausingafanire KUITA kuenzanisa "zvisina mvumo" kana "zvisiri pamutemo" Yakavharwa uye Yakavanzika Software; Ine Mahara Software kushandisa chero, zvisinei, chero nguva, chero chipi zvacho uye chinogara chakakodzera:
- 100% KUSVIRA
Izvo hazvisi KUSHANDISA.
Haisi imwe nzira yeVALID yekushandisa Yakavharwa uye Yakasarudzika Software kuva MHOSVA anoishandisa nenzira "isina mvumo" kana "zvisiri pamutemo", uye izvi hazvitaurwe neni, varidzi vezvakataurwa software vanozviti, imhosva.
Zvichida, ini handisi "sesual stallmaniac", ndosaka ndichishandisa Kubuntu.
Ini ndinogona kurarama nezvinhu zvisina-zvemahara (madhiraivha, kernel blobs, macodecs, nezvimwewo), asi sekureba sekugona kwandinogona kuzvishandisa zviri pamutemo.
Muchiitiko changu ndine mini-yekudhinda muchina uye Mahara Software neLinux ndidzo nzira DZANGU chete dzinoshanda, kushandisa zvimwe zvinhu kungave ANTI-ECONOMIC uye COUNTERPRODUCTIVE.
Pindura kune dbertua
iro trojan rakanga rakashonga 😛
uye nemurazvo uyu unopera. Thanks @Ed nemudzimisi
rodrigo satch akadaro
Chinyorwa ichi chakareba kwenguva pfupi, muchidimbu, vashandisi veLinux vakasiyana uye zvinoshamisa kuti pamwe kune vamwe vasina kuverenga ma manifesto eFree Software nePhilosophy panobatanidzwa kubatana, havanzwisise kuti chii chinonzi Linux nyika, zvachose kwandiri zvishoma Kushandisa Linux uye Mahara Software, ndiwo mararamiro 😀
Pindura Rodrigo Satch
yakanakisa post shamwari!
Dalton tsime rezita rokutanga akadaro
Ini zvakare ndinofunga iwo murazvo, asi nokutendeseka muhurukuro iyo yakaiswa, unogona kudzidza zvakawanda nezve yemahara software neLinux. Enda Linux !! .... ndine urombo Enda Gnu-Linux !!!
Parizvino ndaifunga kuti ndiri kuverenga tsamba yakanyorwa naBiLL GATES muma80's, ndine hurombo asi handibvumirane mune mimwe mitsara yechinyorwa chenyu.
Chinhu chakanakisa ndechekuve zvishoma nezvishoma kutsiva software yezvivakwa kuti irege kuwira mumharadzano dzenzira. Ini handibvumirane pane akawanda ako poindi ekuongorora.
Pindura kuna Augusto3
Ndakaona ichi chinyorwa paTaringa, uye chakabata pfungwa yangu ndechekuti makomendi akadzikama kupfuura aya ari pano
Handisi kuti munhu wese anobvumirana, asi kuti ivo vanoziva huzivi hwegnu / linux.
Iwe wakarasa pasiv92 pasi mune chimwe chikamu uye kuratidza rakareruka mazwi: zvinoitika kwauri zvakafanana kune vatendi vanotenda kuti izvo zvavanoona pane cinema skrini ndizvo zvese, rega nditsanangure, iwe unoti iyo proprietary software haigone kufanana ne uranda hwevanhu kuti hapana munhu ane pfuti mumazana kuvamanikidza kuti vashandise imwe application, hazvo, tarisa kuti zvakangoitikawo sei, laptop yangu nyowani inouya neWindows 8 isingandishandire pabasa rangu, izvi nekuda kwezvirambidzo zvaro ini ndinogona kutenderera zvirinyore asi zviri pachena ndisina mvumo, yandinofanira kubhadhara zviuru zvishoma, (yeshanduro yemahwindo andinoenda kunoshanda, ndinofanira kuyeuka kuti vanoichinja painobuda mumabhora uye vomanikidza update zvimwe vanokusiya usina basa? yakagadzirirwa kusakwana uye kuona kusakwana, xox macho mari yakawanda sei yekuita basa rangu) zvinondiita zvisiri pamutemo saka handigone kushandisa kana kushandisa basa rangu zvakasununguka, izvo zvinoshamisa nesisitimu yangu (Ivo vaifanira kunge vakabuda padivi mushure me zita rangu remadunhurirwa xD) kana richindibvumidza zviri pamutemo uye zvakanyanya kana ndichigona kubatsira mukuvandudzika kwaro sekutenda ndinozviita uye sezvinei ndinotenga marekodhi nevanovagovera kuti vatsigire chirongwa ichi nemari (Nguva yega yega paine vhezheni itsva, izvi hazviite Sechisungo asi sekudzoka kuchirongwa chinondipa zvese kubva pakutanga ndisina kukumbira chero chinhu, tarisa mutsauko wakadii, unondiyeuchidza nezvenguva yandinotenga marezinesi ekutengesa paJamendo kunyangwe ndikasaashandisa kushambadzira, saka pasita haisi dambudziko kana usingaidzidzise), ndiko kuti uye nemazwi mashoma ndiyo yakatendeseka tsika inosanganisa iwe semunhu, ndinoda kuona kuti IOS kana Windows vanoita izvozvo, kuti ne nzira iyo Windows 8 ichandibhadharira madhora mashoma Kune zvakawandisa pasina ini ndazvida uye ndinomanikidzwa kuzviita nekuti kambani yaunotenga kwairi inomanikidzwa kuzviita, uye kwete, haisi nepfuti mune zana nhasi isu tiri bhizinesi revanhu uye ndizvo chaizvo neicho chairi kutyisidzirwa nacho, ndiko kuti, haichagari pachiratidziro chiri nyore asi chinokukanganisa iwe mune chakatumidzwa zita hupenyu chaihwo, uye chenjera kuti usashandise "bullet" yemunhu inokumanikidza kutenga iyo brand, kuti kune mabrands nemalaptop anoshandisa yemahara kana yakachena software, zvakanaka, kana iwe ukaona kuti ndinoziva uye ndinofungidzira kuti chii ... ini ndichafanirwa kumirira mwedzi mitanhatu kuti vanditumire yakadaro kubva kuSpain nekuti vanga vasina imwe nezvandaida mumwedzi iyi mitatu Asi nemutsa uye nebasa guru vachandigadzirira ini, kana tichifunga kuti rusununguko ndiko kuita zvaunoda nenguva yako, uye mari inomiririra nguva nekuedza, nzira iri nyore yekudzvinyirira ini ndatoshandisa mari uye nguva yaro rusununguko rwangu, kushandisa zvisirizvo uye kutonga izvo zvandinogona kana zvandisingakwanise kusarudza (iyi iziso rekwake? kana zvisiri XD ndokumbira undiudze kuti chii chinonzi wink), uyezve kana tikapfuurira mberi nemutemo haugone kutengesa Hardware neSoftware inosanganisirwa uye isingamanikidzwe, iyo yanga isipo XD, iwo maitiro asiri pamutemo;).
Zvino mupiro wangu owo, dai pakanga pasina ruzivo rwakawanda rwakashata mune izvi zvehurongwa, software uye tekinoroji zvakajairika, magetsi emagetsi (pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda) kutenderera pasirese angadai asina kupatsanura zviuru kana asiri mamirioni avanhu munyika, Just by kutumidza Spain zita, nharaunda zhinji hadzina nzira yekutarisa terevhizheni (zvisinei kuti terevhizheni inoita zvakanaka here kana zvakaipa, vanhu ava havana kana mukana iwoyo uye Spain inopfuura Madrid, Barcelona kana Andalusia) nekuda kwemitengo yakakwira yemidziyo inodiwa kugamuchirwa kwemasaini, izvo zvisina kudhura nekuda kwekukura kwavo kana kuvaka asi zvinodhura nekuda kwekurambidzwa kwemaitiro uye mutengo wemarezinesi avo (ini "ndakagadzira" "smart TV" ine USB uye flat screen kune hushoma mutengo 10 madhora XD, kuzviita nemahwindo system ini ndinowana anodarika zviuru zvina zvemadhora kune marezinesi ekubheja uye mvumo ---, semuenzaniso wekusiyana kwemitengo), hausi wekuSpainZvakanaka, muenzaniso zvakare chiSpanish, kudzimwa kwedhijitari muTijuana kunogona kuitwa nemutengo pamidziyo yemakumi masere emadhora, hongu dai zvisiri zvekushungurudzwa kwemamwe makambani;), asi kudzima magetsi hakuna kuitwa nekuti michina iri kunyange pamadhora mazana mapfumbamwe (kwete ese asi mazhinji) ayo vanhu vasingakwanise kutenga, unotarisira sei mhuri inowana gumi kana zana remadhora pasvondo kuti itenge iwo? Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ruzhinji rwevanhu vanobatwa neshanduro yeanalogi chimwe chinhu senge 60 kana 70 muzana yevagari, asi iwe unoti izvo zvinoitika nesoftware hazvina kufanana nezvinoitika nevanhu, ko kana ndikaudza iwe kuti ivo vanopihwa makwikwi ekunyomba ayo nechishamiso kana kuti havazombokwanisa kubhadhara (uye chenjera kuti dambudziko ratiri kusangana naro rakagadzirwa nezvikwereti chaizvo uye zvigadzirwa zvisina basa izvo zvakapa hupenyu kune mamwe mabhuru, mazuva ano vanhu vari kuzviuraya kuSpain nekuti ivo vanodzingwa, kuitira kuti iwe ugone kuona kuti iwo mapoinzi akabatana kupfuura zvaunofunga, kana vanhu ava vasina kana neminana vachikwanisa kubhadhara izvo zvikwereti, zvinoratidza kuti chero anovapa ari mubhizinesi rezvikwereti, bhizinesi rakabatsira zvakanyanya yanhasi dambudziko 😉) kutenga zvishandiso zvinoshandisa zvisirizvo ruzivo rwavo rusingazivikanwe? Ko kana ndikakuudza kuti terevhizheni kana chiratidzo cheterevhizheni chakabhadharwa nekuda kwemitero yavo uyezve ivo vanofanirwa kuve nekodzero yekusarudza rudzii rwekomboni yekushandisa kwete kumanikidzwa kune chero zvikonzero? Nekuti zvinhu zvinochinja, izvo zvinonditungamira kuti nditaure kuti software iri pamusoro pako kana ini kupfuura zvatinoziva nezve nyika ino, kune vanhu kunze uko vanoshungurudzwa neruzivo rwavo uye maitiro emakambani mamwe anobatsirwa nazvo, kushungurudzwa. Beyond the people behind a desk, be it artists, creatives, academic engineers and a long etc., maitiro acho anoitisa vanhu nhapwa, zvakafanana nechishamiso icho YouTube chaicho chinouraya, nhasi uye semhedzisiro yezviuru zvemavhidhiyo.zvipenyu zvakapoterera nyika irikuchata nekuda kwekuvaraidza uye kutora vanhu vakavaona paYouTube, ikozvino unonzwisisa pandev92 kuti zvinhu zvinopfuura izvo zvaunoona pane yako skrini uye / kana yako wega nyika?
Mukupedzisa uye mazwi akareruka, mapato anobvumirana newe nekuda kwezvikonzero zvakanaka uyezve havabvumirane nezvakawanda uye zvakanaka zvikonzero, nenzira yandiri kutoona iye anozoedza kundipisa nekuda kwekunyora zvakanyanya asi akatadza kana ukasazvitsanangura iwe handinzwisise uyezve seni pano ini ndinongova nebhokisi remashoko senzira yekutaura, rinotaridzika kunge rakasimba xD. Pakupedzisira ndinobvumirana ne: Linux hachisi chinamato, kupfuura chitendero ini ndingati dzidziso kana, -, uye mumaonero angu apfuura mune imwe chinyorwa ini ndaive pachena nezvazvo, Iwo masisitimu chero zvaari zvishandiso izvo chete. "Sando inyundo, inoshandiswa kupura kana kuti urikudei, kuipfeka semhete?"
Kwaziso dzinoremekedza, kana mazwi aya achiratidzika kuva anoremekedza xux idambudziko rekuumba pfungwa uye nharo idzi mbiri dzimwe nguva hadzisi velvety, uyezve kwaziso dzine ruremekedzo owo.
Pindura kuna N
Iwe wakasanganisa zvinhu zvakawanda zvisina chekuita nemumwe.
Kutanga, iwe unovhiringidza kuti OS inoshandiswa ne90% yeiyo pc huwandu, nekumanikidzwa. Kana pc ikauya nemawindows 8, ndinobvisa windows 8 ndoisa chero zvandinoda, ikozvino, kana basa rako richida windows nekuti maapplication aunoshandisa ndeemahwindo chete, nekuti microsoft haina dambudziko, ndiyo kambani yakazvisarudzira. ingangoshanda nemahwindo.
Chinhu cheAnalogog kudzima magetsi hazviite zvine musoro. Ivo vanogona nyore kuisa pane chiteshi pamwe satellite satellite, uye voona chimwe chinhu chakadzikama. Ndakanga ndine makore matatu ndisingakwanise kuona tdt nekuda kwechivako, uye ndinofara kuti chaisaonekwa, nekuti pane zvavakaisa: D….
Kuti kune 5, 6% yevagari vasina chiratidzo cheterevhizheni, chokwadi chidiki kwazvo ^ ^, panguva imwechete iyo analogue, paive ne2 kana 30% yevagari vakazviona zvakashata, saka havana kuzviona .
Dambudziko kuSpain, kusiyana nedzimwe nyika dzeEurope, rinobva kumabhangi, hurumende nevanhu chaivo vanoda kupinda muchikwereti uye vachida kushanda, kuisa mari mune chimwe chirongwa.
Izvo zvinofanirwawo kutarisirwa kuti nhamba yepamutemo yevasina mabasa ingasiyana, kana tikaverenga vanhu vese vanoshanda mutema black
Kuti vanhu vanoshungurudzwa neruzivo rwavo rwenhema zvinongova nekuda kwavo, chero zvakadaro vanozviita varanda. Nezve kubviswa, nekuti paunotora chikwereti, unofanirwa kuve wakagadzirira icho, iyo nyika haina mhosva, uye zvakare, kusaziva kwemugari kunokonzeresa zvakaipa. Kana iwe uchiwana 1100 euros pamwedzi, ibenzi kutenga imba yezviuru mazana matatu euros. Asi sezvo isu tajaira kupomera mamiriro ezvinhu zvese, nekuti isu tinotenda kuti ivo baba ... zvakanaka, tarisa.
Ini ndinofunga hauna kupedza kusanganisa mushe, nekuti iwe wakasanganisa pfungwa dzisina kufanana zvachose.
Asi iwe unofunga here kuti dai paive nemikana chaiyo yekuwana basa rakanaka uye rakachengetedzeka, paizova nevanhu vakawanda kudaro vachipinda mumadhaka ekushanda "mutema"?
Hurumende nenhepfenyuro dzakabatana nayo vane basa rakazara rekuparadzira kusaziva uku, nekuti zvinovaenderana. Ngatirege kukanganwa kuti chinhu chinochiviwa zvakanyanya munharaunda ino ine mari imari.
Kuombera kwese kwauri.
Vakomana, ndanga ndichiverenga iyi blog kweanopfuura gore!
Ini ndinoda Pandev92's op-ed, kunyangwe gakava ringave rakakonzera. 100% vanobvuma!
Ndinokukurudzira kuti uenderere mberi nemutsara wako, une hunhu hwakawanda, kunyangwe hazvo kuti makomendi anovaka haagare achibuda. Iwe unopa zvakawanda kupfuura ruzivo, uye maonero ako akadikanwa sekuziva mashandisiro eLinux.
Ini ndakanganisa zita rangu rekushandisa ... discudpalme
Iwe uri chokwadi chaizvo, ini ndakanga ndawirawo mune dzidziso pamberi uye ndaive fan weLinux neUbuntu kunyanya, asi sekutaura kwako haugone kumanikidza chero munhu kuti ashandise iyi kana iyo sisitimu inoshanda, kunyangwe hazvo tichifunga kuti zviri nani, zvakanyanyisa. dzakaipa nguva dzose.Kukwazisa kubva kuBarcelona
Asi kudzivirira mashandisiro nefilosofi inosimudzira yemahara software hazviiti kuti iwe unamate, zvinongokuita iwe mushandisi uye unofarira. Chimwe chinhu ndechekuti kushoropodzwa kushoma kunogamuchirwa uye kuti zvimwe zvese zvinoonekwa sechivi paPasi ... izvo mune mamwe mamiriro ezvinhu zvinogona, asi kwete hazvo.
Anthony Ruiz akadaro
Chikamu cheuzivi, mumaonero angu, ndecheiyo chirongwa cheGNU, chakatambirwa neLinux mukutanga kwayo, Linux ndiyo chikamu cheGNU icho chakanyanya. Iyo binomial iri (potse) yakakwana, tora chikamu chimwe, chimwe kana zvese, unosarudza = RUSUNUNGUKO.
Pindura kuna Antonio Ruiz
"Munhu wese ane rusununguko rwekurega kushandisa zvavanoshandisa nekushandura zvirongwa, hapana munhu mumwe chete anonongedzera kumazana kuti isu tishandise chirongwa chakavharwa." Uye Stallman haauye neAK-47 uye anokumanikidza kuisa Trisquel; asi isu tese tinoziva "hunyengeri" hunoshandiswa nekambani software yemakambani kukusunga ngetani (mupfungwa yekufananidzira, hongu 😉) kune zvigadzirwa zvavo.
"Hatifanire kukanganwa chinangwa cheGNU!" Ini handione kuti chirevo ichi ndechechokwadi, chinongoedza chete kuchengetedza hupenyu hunokosheswa iyo software yemahara yakatanga kugadzirwa.
Tsamba yangu: Imwezve ye1.998.923 lousy mbiru dzinoedza kushambadza avo vanodzivirira mahara software sevanoomerera (maTaliban chinhu chekare, hatichadaidzi iwo iwo). Kwaziso.
Ngatione. Mamwe manotsi. Chekutanga, Linux hachisi chinamato, tinobvumirana ipapo, asi hachisi icho chidimbu che software kana. Kunyangwe iwe uchida kududzira neimwe nzira kana imwe zvinoenderana nekutenda kweumwe neumwe, Linux zvakare ifilosofi, huzivi hunozadzisa software yakatumirwa, nekuti iyo yakagadzirwa uye yakagadzirirwa nepfungwa, tinogona kuti vangangoita philanthropic, kumberi yemaitiro aivepo panguva iyoyo, apo zvachose software yaive yechokwadi.
Ini zvakare ndinofanirwa kutaura kune kwakanyanya kusununguka kwaunoratidza pachena mumitsara yakadai sekuti "Mukuzvisarudzira kwevanhu, pane mukana zvakare wekutora rusununguko kubva kune vamwe vanhu, chimwe chinhu chakaitika zviuru zvakapetwa uye zvinosuwisa zvicharamba zvichiitika ", iyo yaunofungidzira nerusununguko rwekusununguka semhedzisiro yerusununguko, asi pfungwa yerusununguko inopesana kana pfungwa yatinayo yekuti" kurarama murusununguko "ndeye. Tinogona kufunga nezvekusununguka semuenzaniso? Mumwe anofanirwa kungwarira paanenge achishandisa iyo yekuzvisarudzira nharo, nekuti zvinogona kupembedza zvinosuwisa zviitiko Ndokusaka mutsika zvinhu zvese zvine muganho, uye rusununguko rwekusununguka sekudana kwaunoita haruremekedze muganho uripo pakati perusununguko rwako newemuvakidzani wako, nekudaro, panofanirwa kuunzwa nzira inogona kuvimbisa rusununguko rweumwe neumwe. Uye zvinganzwika sekushinga uye kunyange kupokana, asi kuvimbisa mwero unogamuchirwa werusununguko, ganhuriro inofanirwa kuiswa pairi kudzivirira "kunyanyisa kwerusununguko" uko vamwe vangatore.
Panyaya yesoftware, iine zano iri rezinesi reGPL rakagadzirwa, rezinesi rinoita kuti software ine rezinesi ive yemahara uyezve inovimbisa kuti icharamba yakasununguka mune ramangwana.
Vakanyanya kusununguka-pfungwa, vandinofunga kuti ndimi mune zvakafanana, vakagadzira BSD rezinesi.
Chinyorwa chinotevera. Paunoti "proprietary software haibvise rusununguko rwako, inokupa sarudzo" iwe unokanganisa nekusanganisa software nerusununguko nerusununguko rwevanhu. Kana isu tichitaura nezve software rusununguko, hapana zviripo rusununguko rwakakodzera. Iyo kambani ndiyo inoraira mamiriro ekushandisa, ayo akaganhurirwa kune zvakanyanya kushandiswa kwemunhu, uye hapana chimwezve chekutaura nezvacho. Kana tikataura nezverusununguko rwevanhu, zvirokwazvo une mukana wekuushandisa kana kusashandisa, asi kana iwe uchida kuushandisa unofanirwa kuenderana nemamiriro ekushandisa, ayo asina kana nguva yekufunga nezvekushandurwa kana kugoverwa patsva. Uye ndirwo rusununguko rwatinotaura nezvarwo kana zvasvika pasoftware.
Chetatu. Kutsigira fungidziro yako, iwe unoti kana mumwe munhu akaburitsa chirongwa chavakagadzira, "mumwe munhu akauya, ndokutora kodhi, akaigadziridza uye mashandisirwo ayo anodarika epakutanga, nekushingirira kushoma, nokudaro achisiya musiki wekutanga pamakwikwi . iwe unongedzera pano, kunova kushomeka uye kushaya ruremekedzo rwebasa remumwe neumwe.
Uye pakupedzisira, chirevo par kugona izvo vakasununguka vanoedza kururamisa zvese: "Hakuna munhu mumwe anonongedzera kumazana isu kuti tishandise yakavharwa chirongwa." Uye ipapo ini ndinokuudza iwe kuti zvimwe kwete chaiko, asi kazhinji kazhinji nenzira yekufananidzira, senge kana isu tichimanikidzwa kubasa kana muzvidzidzo kushandisa imwe chirongwa chevaridzi, kana kushandisa imwe fomati. Tingave sei dai Linux isina kubuda? Kuve kuenda kuburikidza nechindori cheMicrosoft kana Apple.
Ehe, ichokwadi chaizvo, nekuti imwe yerusununguko irwo rusununguko rwekusarudza kuva wakasununguka kana kwete, kana uchida, uri uye kana usiri, saka aiwa
Meseji kubva kuMicrosoft yakamutsa hana yako hehehe ... Vagadziri vakakwanisa kuzviita sezvakaitwa nemusiki weFacebook ... ndinokurangarira pakaitika gakava remabhurawuza muma80's Netscape yakatumira Microsoft kuburitsa internet muongorori mahara uye kambani yese yakanga yabhuroka uye vashandi vayo vakasiiwa vasina basa semhuri, kana rusununguko rikaitwa ipapo? Nei zvichidaro? Ndinokusiyira iwo mubvunzo ...
Dax OS 2.0.2 mune ayo mana mabhii anowanikwa kurodha pasi
Steam OS: Valve inozivisa yayo Linux distro